၁။	ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီရှိ လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့များတွင် အသုံးပြု ရန် အတွက်လိုအပ်သော အောက်ဖော်ပြပါလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်နေရာအရောက် ကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့်လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ ပေးသွင်းနိုင်ပါကြောင်း ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-
(က) Single Cab ၁ စီး
(ခ)2Ton Mini Excavator ၂ စီး
(ဂ) Truck Mounted Crane ၁ စီး
(ဃ) Tricycle Garbage Carrier ၂၃ စီး
(င) City Bus ၃ စီး
(စ) Tipper (Dump Truck) (3 Ton) ၁၁ စီး
(ဆ) Computer (Laptop), Tabletနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ 1 Lot
၂။	အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို ၁၆-၃-၂၀၂၀ ရက်မှစ၍ ရောင်းချမည်ဖြစ် ပြီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို (၃၀-၃-၂၀၂၀)ရက်နေ့ (၁၂:၀၀)နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန် ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်မည့်ရက်အား ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်။
၃။	တင်ဒါပုံစံအားမြို့တော်ခန်းမ(ပထမထပ်)ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး ဌာနစုတွင်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖုန်းအမှတ်- ၀၁၃၈၈၇၃၂ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် အရေအတွက် တင်ဒါပိတ်ရက်/အချိန်
(က) ဘိလပ်မြေ(ပြည်တွင်း) ၆၄၉၁၃၁ အိတ် ၂၃-၃-၂၀၂၀/၁၂:၀၀ နာရီ
(ခ) ကတ္တရာ / ရေရောကတ္တရာ ၁၆၀၀/၁၅၀ တန်
(ဂ) လမ်းခင်းကျောက်/မြစ်သဲကြမ်း ၁၇၅၀၀ /၇၅၅၀ ကျင်း
(ဃ) ဓါတ်ခွဲခန်းသုံးပစ္စည်း 1 Lot
(င) Generator ၃ လုံး ၆-၄-၂၀၂၀/၁၂:၀၀ နာရီ
၂။	အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို ၁၀-၃-၂၀၂၀ ရက်မှစ၍ ရောင်းချမည်ဖြစ် ပြီး တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်မည့်ရက်အား ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်။
၁။	ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သည် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီပိုင် ပြည်သူ့ ကျန်းမာရေးနှင့်စျေးများလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့ (စျေးများနှင့်ကုန်စည်ပွဲရုံများစီမံခန့်ခွဲရေး) ကွပ်ကဲမှုအောက်ရှိ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းစျေး နှင့် လသာမြို့နယ်၊ သိမ်ကြီးစျေး(ဃ)ရုံ တို့၏ သန့်စင်ခန်း ဝင်ခ ကောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်းများအား အငှားချထားရန်အတွက် အိတ်ပိတ်တင်ဒါ အဆိုပြုလွှာများ တင်သွင်းနိုင်ပါရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
၂။	တင်ဒါပုံစံရောင်းချမည့်ရက် - ၉-၃-၂ဝ၂ဝ ရက် မှ ၇-၄-၂ဝ၂ဝ ရက်နေ့ထိ
၃။	တင်ဒါပုံစံရောင်းချမည့်နေရာနှင့် - မြို့တော်ခန်းမ (ဒုတိယထပ်)၊ စျေးများဌာန
တင်သွင်းရမည့်နေရာ - ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
၄။	တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်နောက်ဆုံးရက်	 - ၈-၄-၂ဝ၂ဝ (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) ၁၃:ဝဝ နာရီ
၅။	တင်ဒါစည်းကမ်းနှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များ သိရှိလိုပါက ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင် သာယာရေးကော်မတီ၊ စျေးများဌာန၏ တယ်လီဖုန်းအမှတ်- ၃၇၆၇ဝ၈ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
၁။	ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့် ဈေးများလုပ်ငန်း တာဝန်ခံအဖွဲ့(ဈေးများနှင့်ကုန်စည်ပွဲရုံများစီမံခန့်ခွဲရေး) လက်အောက်ရှိ ဈေး(၈)ဈေးတွင် Market Operator လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန် စိတ်ပါဝင်စားသည့် ပြည်တွင်း ကုမ္ပဏီများ၊ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပဖက်စပ်ကုမ္ပဏီများအား စိတ်ပါ၀င်စားမှုဖော်ပြလွှာ (EOI) များ တင်သွင်း ရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
၂။	Market Operator လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုမည့် ဈေးများမှာ အောက်ဖော်ပြပါဈေး(၈)ဈေး (သို့မဟုတ်) အခြား အဆိုပြုလိုသော ဈေးကို ဆောင်ရွက်ရန် တင်သွင်းနိုင်ပါသည် -
(က)	ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဈေး
(ခ)	ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်၊ ဗိုလ်ချုပ်ဈေးသစ်
(ဂ)	သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ စံပြငမိုးရိပ်ဈေး
(ဃ)	တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ သီရိမြင်သာဈေး
(င)	ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ ကေတုမတီဈေး
(စ)	လှိုင်မြို့နယ်၊ လှိုင်ဈေးကြီး
(ဆ)	လှိုင်မြို့နယ်၊ လှိုင်ရတနာဈေး
(ဇ)	ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ သီရိမာလာဈေး
၃။	EOIအဆိုပြုလွှာ စာရွက်စာတမ်းများကို (၉-၃-၂၀၂၀) ရက်နေ့မှစ၍ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ မြို့တော်ခန်းမ၊ ဒုတိယ ထပ်၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့်ဈေးများလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့ (စျေးများနှင့်ကုန်စည်ပွဲရုံများ စီမံခန့်ခွဲရေး)တွင် ရုံးချိန်အတွင်း၀ယ်ယူနိုင်ပါသည်။
၄။	EOI အဆိုပြုလွှာ စာရွက်စာတမ်းအပြည့်အစုံကို အထက်ဖော်ပြပါဌာနသို့ (၂၁-၄-၂၀၂၀) ရက်နေ့ နံနက်(၁၅:၀၀) နာရီတွင် နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရပါမည်။ နောက်ကျ တင်သွင်း သော EOI အဆိုပြုလွှာများကို လက်ခံစဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။
၅။	EOI နှင့်စပ်လျဉ်း၍ သိရှိလိုသောအချက်များကို ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့် ဈေးများလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့ (စျေးများနှင့်ကုန်စည် ပွဲရုံများစီမံခန့်ခွဲရေး)၊ တယ်လီဖုန်းအမှတ် ၀၁-၃၇၆၇၀၈ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
( Request For Expression Of Interest )
၁။	ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့် စိစစ်ရေးကော်မတီမှ အောက်ဖော်ပြပါမြေနေရာများ နှင့် ကိုယ်ပိုင်မြေကွက်(တစ်ဦးတည်းပိုင်(သို့)ပူးတွဲပိုင်) များတွင် တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာများ(Low Cost Housing ) / တန်ဖိုးမျှတအိမ်ရာများ (Affordable Housing) (Mix – Used Development များကိုလည်းဖော်ပြနိုင်သည်) တည်ဆောက်ရန်အတွက် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံး၊ တိုင်းဒေသကြီးတင်ဒါစိစစ်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့တွင် မှတ်ပုံတင်ပြီးဖြစ်သော ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ တိုင်းရင်းသားများပိုင် ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီများအား စိတ်ပါဝင်စားမှု ဖော်ပြခြင်း (EOI) အဆိုပြုလွှာများ တင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-
(က) ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်-ပြည် မီးရထားလမ်းနှင့် ဗိုလ်ရန်ပြေလမ်းကြား၊ မြေတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၉ + ၁၀)၊ မြေဧရိယာ(၁၀)ဧကခန့် (သာဓုကန်ဘူတာအနီး)
(ခ) ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ ရတနာပုံလမ်း၊ မြေတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၄၅)၊ မြေဧရိယာ(၈.၈၅၆)ဧကခန့်
(ဂ) (၁၀)ဧကနှင့်အထက် မြေကွက်များ (တစ်ဦးတည်းပိုင် (သို့) ပူးတွဲပိုင် (သို့) အစိုးရပိုင်)
၂။	EOI အဆိုပြုလွှာ စာရွက်စာတမ်းများကို ၃-၃-၂၀၂၀ (အင်္ဂါနေ့) မှစ၍ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ၃၄-လမ်းနှင့် စည်ပင်လမ်းထောင့်ရှိ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော် မတီ၊ ဆယ်ထပ်ရုံး၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)၊ ၈လွှာတွင် ရုံးချိန်အတွင်း ဝယ်ယူနိုင်ပါ သည်။
၃။	EOI အဆိုပြုလွှာ စာရွက်စာတမ်းအပြည့်အစုံကို အထက်ဖော်ပြပါဌာနသို့ ၃၁-၃-၂၀၂၀ (အင်္ဂါနေ့)၊ နေ့လည်(၃:၀၀)နာရီတွင် နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရမည်။ နောက်ကျတင်သွင်းသော EOI အဆိုပြုလွှာများကို လက်ခံစဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။
EOI နှင့်စပ်လျဉ်း၍ သိရှိလိုသော အချက်များကို ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)၊ တယ်လီဖုန်းအမှတ် ၀၁-၃၇၄၃၆၆၊ ၀၁-၃၇၈၁၅၇ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
၁။	ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီရှိ လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့များတွင် အသုံးပြုရန် အတွက်လိုအပ်သော အောက်ဖော်ပြပါပစ္စည်းများကိုသတ်မှတ်နေရာအရောက် ကျပ်ငွေဖြင့်ဝယ်ယူလို ပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့်လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ ပေးသွင်းနိုင်ပါကြောင်း ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-
(က) Guard Rail ၅ မိုင် ၁၃-၃-၂၀၂၀/ ၁၂:၀၀နာရီ
(ခ) Computer နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်း 1 Lot ၂၇ -၂-၂၀၂၀/ ၁၂:၀၀နာရီ
(ဂ) Copier ၁၆ လုံး
(ဃ) ငွေရေစက် ၁၄ လုံး
(င) Toro Reel/Green Master (Bed Kinfe ) ၆၀ ချောင်း
(စ) Toro Green Master (Reel Blade) ၆ လုံး
၂။	အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို ၁၄ - ၂ -၂၀၂၀ ရက်မှစ၍ ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်မည့်ရက်အား ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်။
၃။	တင်ဒါပုံစံအား မြို့တော်ခန်းမ(ပထမထပ်) ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး ဌာနစုတွင်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖုန်းအမှတ်- ၀၁၃၈၈၇၃၂ သို့ရုံးချိန် အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
၁။	ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီရှိ လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့များတွင်အသုံးပြုရန် အတွက် လိုအပ်သောအောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်နေရာအရောက် ကျပ်ငွေ ဖြင့်ဝယ်ယူလိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့်လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ ပေးသွင်းနိုင် ပါကြောင်းဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-
(က) ဒီဇယ်ဆီ (၆၀၀၀၀၀) ဂါလံ
(ခ) ပရီမီယံဒီဇယ်ဆီ (၅၀၀၀၀) ဂါလံ
၂။	အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို ၆- ၂- ၂၀၂၀ ရက်မှစ၍ ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို ၁၉ - ၂- ၂၀၂၀ ရက်နေ့ ၁၂:၀၀ နာရီနောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန်ဖြစ်ပါ သည်။ တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်မည့်ရက်အား ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်။
၃။	တင်ဒါပုံစံအား မြို့တော်ခန်းမ(ပထမထပ်) ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး ဌာနစုတွင်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖုန်းအမှတ်- ၀၁ ၃၈၈၇၃၂ သို့ရုံးချိန် အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ စီမံခန့်ခွဲရေး၊ ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနှင့် ပြန်ကြားရေးဌာန	(စီမံရေးရာဌာန)ရှိ ဌဝရမြေနေရာ ငှားရမ်းလုပ်ကိုင်ခွင့်အား တင်ဒါစနစ်ဖြင့် အငှားချထားရန် တင်ဒါခေါ်ယူအပ်ပါသည်-
(က)	ငှားရမ်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသည့်နေရာ - မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် စက်ရုံလမ်းနှင့် ဗညားဒလလမ်းထိပ်ရှိမြေနေရာ
(ခ )	မြေနေရာအကျယ်အဝန်း - ၂၁၀၆၄.၅ စ/ပေ
(ဂ )	အဆောက်အဦအမျိုးအစား - (၁)ထပ် RC ၊ အုတ်တံတိုင်းခြံစည်းရိုးခတ်ပြီး
(ဃ)	လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသည့်အမျိုးအစားများ - စတိုးနှင့်စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းရောင်းချခြင်း
(င )	ငှားရမ်းသည့်ကာလ - ၁-၄-၂၀၂၀ မှ ၃၀-၉- ၂၀၂၀ ထိ (၆)လ
၂။ တင်ဒါပုံစံနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ မြို့တော်ခန်းမ(ရုံးချုပ်)၊မြေညီထပ်ရှိ စီမံခန့်ခွဲရေး၊ ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနှင့် ပြန်ကြားရေးဌာန(စီမံရေးရာဌာန)၊ စီမံ(ငွေစာရင်း)ရုံးခန်းတွင်ရုံးချိန်အတွင်းဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။အသေးစိတ်သိရှိလိုပါကရုံးချိန်အတွင်းစီမံ(ငွေစာရင်း)ရုံးခန်း နှင့် ဖုန်းနံပါတ် ၀၉၅၀၀၇၆၀၂ သို့ မေးမြန်း စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
တင်ဒါလျှောက်လွှာပုံစံရောင်းချမည့်ရက် - ၂၉-၁-၂၀၂၀ ( ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)
တင်ဒါအရောင်းပိတ်မည့်ရက် - ၂၄-၂-၂၀၂၀ ( တနင်္လာ နေ့)
တင်ဒါကျင်းပမည့်ရက် - ၂၆-၂-၂၀၂၀ ( ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)
တင်ဒါကျင်းပမည့်နေရာ	 - မြို့တော်ခန်းမ (ပထမထပ်)၊ ခန်းမ(၃)
၁။	ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီရှိ လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့များတွင် အသုံးပြု ရန်အတွက် လိုအပ်သောအောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်နေရာအရောက် ကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့် လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ ပေးသွင်းနိုင်ပါကြောင်း ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-
(က) ရွေ့လျားအမှိုက်ကန်(သံကန်) ၁၀ လုံး
(ခ) အမှိုက်သိမ်းလှည်း ၈၅ စီး
(ဂ) Fuel Flow Meter & Fusion Management System ၃ စုံ
(ဃ) Dispensing Pump (Digital) ၁ စုံ
(င) 15 Tons Overhead Crane ၁ စုံ
(စ) Sewer Rod ၈၀၀ ချောင်း
၂။	အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့် စည်းကမ်းချက်များကို ၁၃-၁-၂၀၂၀ ရက်မှစ၍ ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို ၂၄-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့ ၁၂:၀၀ နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန် ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်မည့်ရက်အား ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်။
၃။	တင်ဒါပုံစံအား မြို့တော်ခန်းမ(ပထမထပ်) ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဌာနစုတွင် ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖုန်းအမှတ် - ၀၁၃၈၈၇၃၂ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
၁။	ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီရှိ လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့များတွင် အသုံးပြုရန် အတွက် လိုအပ်သောအောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်နေရာအရောက် ကျပ်ငွေ ဖြင့်ဝယ်ယူလိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့်လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ ပေးသွင်းနိုင် ပါကြောင်းဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-
(က) တာယာ (၂၄)မျိုး ၂၀၃၀ လုံး/စုံ
(ခ) ဘက်ထရီ (၁၁)မျိုး ၈၂၆ လုံး
(ဂ) စက်ဆီ/ချောဆီ (၉)မျိုး
၂။	အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို ၃၀- ၁၂-၂၀၁၉ ရက်မှစ၍ ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို ၂၉- ၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့ ၁၂:၀၀ နာရီနောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်မည့်ရက်အား ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်။
၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ရေရရှိရေးနှင့် ရေပေးဝေရေး လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(ရေနှင့်သန့်ရှင်းမှု)သည် ရန်ကုန်မြို့တော်နေ မြို့တော်သူ၊ မြို့တော်သားများ ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်သော သောက်သုံးရေများ သုံးစွဲနိုင်ရန် အတွက် ပေးဝေလျက်ရှိသည့် ရေထဲသို့ ကလိုရင်းဆေးခတ်သန့်စင်ခြင်းလုပ်ငန်းကို မကြာမီ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
၂။	ကလိုရင်းဆေးခတ်သန့်စင်ခြင်းသည် သောက်သုံးရေသန့်များရရှိစေရန်အတွက် လူတို့၏ ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်နိုင်သည့် ပိုးမွှားများအား သန့်စင်သည့်နည်းစနစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ နှင့်အဝှမ်း အသုံးပြုလျက်ရှိကာလူတို့၏ ကျန်းမာရေးကိုမထိခိုက်စေရန် အကာအကွယ်ပေးသည့် နည်းစနစ်ဖြစ်ပါသည်။
၃။	ကလိုရင်းဆေးခတ်သန့်စင်ရာတွင် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO) က သတ်မှတ် ထားသည့် ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း ရေသုံးစွဲသူပြည်သူများ၏ ကျန်းမာရေးကို မထိခိုက်သော ပမာဏဖြစ်သည့်4mg/L ထက် မများသည့်နှုန်းဖြင့် အသုံးပြုသန့်စင်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ရေတွင်ပါဝင်သော ဘက်တီးရီးယားများနှင့် ဓာတုပစ္စည်းများအားကလိုရင်းဖြင့် ဓါတ်ပြုသန့်စင် သွားမည်ဖြစ်ပြီး ပြင်ပမှ ပိုးမွှားဘက်တီးရီးယားများ ဝင်ရောက်ရှင်သန်ပေါက်ဖွားခြင်း မပြုနိုင်ရေး ကလိုရင်းဓါတ်များ (Residual Chlorine) ကြွင်းကျန်မှုရှိနေစေရန် ဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်သဖြင့် ပြည်သူလူထုအားပေးဝေသည့် သောက်သုံးရေတွင် ကလိုရင်းအနံ့ ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
၄။	၄င်း ကလိုရင်းအနံ့ရရှိခြင်းသည် ရေတွင်ပေါက်ဖွားနိုင်သော ရောဂါပိုးမွှားများအား ဆေးခတ်သန့်စင်ပြီးဖြစ်ကြောင်းနှင့် ကျန်းမာရေးကိုမထိခိုက်ဘဲ ရေကောင်းရေသန့်အဖြစ် သုံးစွဲနိုင်ကြောင်း အထောက်အထားဖြစ်ပါသည်။ ကလိုရင်းအနံ့အား ကြိုက်နှစ်သက်မှုမရှိပါက တစ်ရက်တာ သိုလှောင်ထားခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ မိနစ်အနည်းငယ် ကြိုချက်ခြင်းဖြင့် လည်းကောင်း၊ သံပုရာရည် သို့မဟုတ် ရှောက်ရည်အနည်းငယ် ရောထည့်ပေးခြင်းဖြင့် လည်းကောင်း ကလိုရင်းအနံ့မပါရှိအောင် ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။
၅။	သို့ဖြစ်ပါ၍ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ ပေးဝေသည့်ရေတွင် ကလိုရင်း ဆေးခတ်သန့်စင်ခြင်းလုပ်ငန်းကြောင့် ကလိုရင်းအနံ့များရရှိပါက စိုးရိမ်ရန်မရှိ ကြောင်းနှင့် ပိုးသတ်သန့်စင်ထားသည့် လက္ခဏာဖြစ်၍ ယုံကြည်စိတ်ချစွာ သုံးစွဲနိုင်ပါကြောင်း ကြိုတင်အသိပေး ကြေညာအပ်ပါသည်။
YBPS Training တက်ရောက်ထားသော အင်ဂျင်နီယာ/ဗိသုကာများ ဆောက်လုပ်ခွင့်အမှုတွဲများအား Online System ဖြင့်သာ တင်ပြပေးပါရန် အသိပေးနှိုးဆော်ချက်
၁။	ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီနယ်နိမိတ်အတွင်း အဆောက်အဦ ဆောက်လုပ်ခွင့်ပြုမိန့် ရယူရေး လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ရင်းနှီး မြှုပ်နှံသူများပိုမိုလွယ်ကူမြန်ဆန်စေရန် လက်ရှိကျင့်သုံးနေသော ဆောက်လုပ်ခွင့်ပြုမိန့်စနစ် အား Risk Based System ဖြင့် ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇွန်လမှ စ၍ အမှုတွဲများ လက်ခံဆောင်ရွက်ရာတွင် Building Categorization Matrix (BCM) အား အသုံးပြုကာ Risk ခွဲခြားသတ်မှတ်၍ စတင်စမ်းသပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့(BCM)အား အသုံးပြုကာ Risk ခွဲခြား သတ်မှတ်၍ အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ခွင့်ပေးခြင်းအား ပိုမို လျင်မြန်လွယ်ကူပြီးထိရောက်မှုရှိစေရန် နိုင်ငံတကာနည်းတူ ICT နည်းပညာသုံး Automation System (online submission) စနစ်ဖြင့် ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အင်ဂျင်နီယာ/ ဗိသုကာ ဦးရေ(၆၀၀)ကျော်အား Training ဆောင်ရွက်ပေးပြီး Pilot Test Phase of Yangon Building Permit System (YBPS) အား ၁-၇-၂၀၁၉ ရက်နေ့မှစ၍ အမှုတွဲလက်ခံ ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။
၂။ ၂၀၂၀ ခုနှစ် နှစ်ဆန်းပိုင်းတွင် Full Launch ဆောင်ရွက်ရန် လျာထားလျက်ရှိရာ System အား ပိုမိုချောမွေ့ကောင်းမွန်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် အင်ဂျင်နီယာ/ ဗိသုကာများမှ System အား အသုံးပြုပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ Pilot Test Phase တွင် Online မှ တင်ပြသောဆောက်လုပ်ခွင့်အရေအတွက်မှာ Training တက်ရောက်ထားပြီးသောအင်ဂျင်နီယာ/ ဗိသုကာအရေအတွက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက အလွန်ပင်နည်းပါးနေပါသဖြင့် Training တက်ရောက်ပြီး သူများမှ Online System ဖြင့်သာ တင်ပြပေးခြင်းဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါရန် နှိုးဆော်အပ် ပါသည်။
၁။	ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ (၄၈)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်မှူးဗထူးလမ်း ဘေးရှိ မြေနေရာ၌ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ကြီးကြပ်မှုဖြင့် Myanmar V-Pile Co., Ltd မှဆောင်ရွက်သော ဗိုလ်ဗထူးတန်ဖိုးမျှတအိမ်ရာစီမံကိန်း (ဒုတိယအဆင့်) တွင် ၄ခန်းတွဲ ၈ထပ်တိုက် (၂၇)လုံး ( ၈၆၄ ခန်း ) ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ U-600 အဆောက်အဦ(၈)လုံးမှာ တည်ဆောက်မှုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပြီးစီး၍ ငွေအကြေပေးသွင်းသူများသို့ အခန်းများ အပ်နှံမည် ဖြစ်ပါသည်။ U-900 အဆောက်အဦ(၁၉)လုံးအနက် (၁၁)လုံးမှာ 5th Floor Slab ၊ (၈)လုံးမှာ 4th Floor Slab ထိ ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ပါသည်။
၂။	သို့ဖြစ်ပါ၍ U-600 တိုက်ခန်းဝယ်ယူခွင့်ရရှိသူများသည် အခန်းတန်ဖိုးကျသင့်ငွေအကြေ ပေးသွင်းပါရန်နှင့် U-900 တိုက်ခန်းဝယ်ယူခွင့်ရရှိသူများသည် တတိယအရစ်အထိ ကျသင့်ငွေများ အား လာရောက်ပေးသွင်းပါရန် နှိုးဆော်အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။
၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီရှိ လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့များတွင် အသုံးပြုရန် အတွက် လိုအပ်သောအောက်ဖော်ပြပါ ယာဉ်/ယန္တရားများကို သတ်မှတ်နေရာအရောက် ကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူ လိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့်လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ ပေးသွင်းနိုင်ပါ ကြောင်းဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-
(က) Arm Roll Truck ၁၀စီး
(ခ) Tipper(Dump Truck)(3.5 Ton) ၁၁စီး
(ဂ) Hopper Tipper ၅၀စီး
(ဃ) Sweeper Truck ၁စီး
(င) Water Bowser (1800/ 1600/1200)gal ၈စီး
(စ) Vacuum Truck(400)gal ၁စီး
(ဆ) Skid Steer Loader ၁စီး
(ဇ) Telescopic Telehandler ၂စီး
(ဈ) Bulldozer ၂စီး
(ည) Mini Excavator(2.5 Ton) ၂စီး
(ဋ) Truck Mounted Crane ၁စီး
(ဌ) Car Crane(5 /3) Tons ၃စီး
(ဍ) Tricycle Garbage Carrier ၂၃စီး
၂။	အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို ၁၆ - ၁၂ -၂၀၁၉ ရက်မှစ၍ ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို ၁၄ - ၁ -၂၀၂၀ ရက်နေ့ ၁၂:၀၀ နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန်ဖြစ်ပါ သည်။ တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်မည့်ရက်အား ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်။
၁။	ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီရှိ လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့များတွင် အသုံးပြုရန် အတွက် လိုအပ်သောအောက်ဖော်ပြပါလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်နေရာအရောက် ကျပ်ငွေ ဖြင့်ဝယ်ယူလိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့်လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ ပေးသွင်းနိုင် ပါကြောင်းဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-
(က) ကတ္တရာ	 (၂၆၀၀)	တန်
(ခ) ရေရောကတ္တရာ	 (၅၀)	တန်
(ဂ) Insulated Covered Winding Wire (၁၃၅၂၉၀)	မီတာ
(ဃ) Centrifugal Motor & Pump (၂)	စုံ
(င) Submersible Motor & Pump (၂၆)	စုံ
(စ) Induction Motor & Pump (၃၀)	စုံ
(ဆ) DI ပိုက်နှင့်ပိုက်ဆက်ပစ္စည်းများ (၂၇၆)	လုံး
၂။	အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို ၁၆- ၁၂- ၂၀၁၉ ရက်မှစ၍ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို ၂- ၁- ၂၀၂၀ ရက်နေ့ ၁၂:၀၀ နာရီနောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်မည့်ရက်အား ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်။
(က) ဒီဇယ်ဆီ (၃၀၀၀၀၀) ဂါလံ
(ဂ) ဓါတ်လှေကား (၃) စင်း
၂။	အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို ၃ -၁၂- ၂၀၁၉ ရက်မှစ၍ ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို ၂- ၁- ၂၀၂၀ ရက်နေ့ ၁၂:၀၀ နာရီနောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်မည့်ရက်အား ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်။
၁။	ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီရှိ လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့များတွင် အသုံးပြုရန် အတွက် လိုအပ်သောအောက်ဖော်ပြပါ ပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်နေရာအရောက် ကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူ လိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့်လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ ပေးသွင်းနိုင်ပါကြောင်း ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-
(က) 11-6.6/0.4KV Transformer (၈) လုံး
(ခ) Generator(25,30,50,100 KVA)	 (၄) လုံး
(ဂ) RTK ( မြေတိုင်းတာစက် ) (၁) စုံ
(ဃ) RFID Microchip (၇၀၀၀) ခု
(င) အပေါ့စားမီးသတ်စက် (၄) လုံး
(စ) ရေစုပ်ပန့် (1.5)HP (၂၀) လုံး
၂။	အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို ၂၉ -၁၁ -၂၀၁၉ ရက်မှစ၍ ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို ၁၆ - ၁၂ -၂၀၁၉ ရက်နေ့ ၁၂:၀၀ နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန်ဖြစ်ပါ သည်။ တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်မည့်ရက်အား ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်။
၁။	ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး နှင့် စျေးများလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့ ကြီးကြပ်မှုအောက်ရှိ အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်း များအား တင်ဒါစနစ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် တင်ဒါများ ခေါ်ယူအပ်ပါသည် -
(က )	ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံနှင့်ကုန်တင်ယာဉ်ရပ်နားစခန်း၊ ကားကြီးဝင်း(၁)၊ ရုံးဟောင်း အဆောက်အအုံ (၁)လုံး ငှားရမ်းခြင်း၊
( ခ )	ကျိုက္ကဆံယာဉ်အပိုပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးစခန်း ရေချိုး/သန့်စင်ခန်း အမှတ်(၂)၊
( ဂ )	ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံနှင့်ကုန်တင်ယာဉ်ရပ်နားစခန်း ရိုးကြီးချောင်းပတ်လမ်း အမှတ်(၄) ယာဉ်ရပ်နားခကောက်ခံသည့်လုပ်ငန်း။
၂။	တင်ဒါပုံစံနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ၄၆ လမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ (၁၂)ထပ်ခွဲရုံး၊ (၇)လွှာရှိ၊ ပြည်သူ့ ကျန်းမာရေးနှင့်စျေးများလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့၊ စျေးများနှင့်ကုန်စည်ပွဲရုံများ စီမံ ခန့်ခွဲရေးရုံး ( အခွန်ဌာန ) တွင် ရုံးချိန်အတွင်း ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ် အချက်အလက်များ သိရှိလိုပါက ၀၉ - ၄၂၀၁၄၄၁၁၂ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း မေးမြန်း စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
တင်ဒါရောင်းချမည့်ရက် - ၂၅-၁၁-၂၀၁၉(တနင်္လာနေ့)
တင်ဒါအရောင်းပိတ်မည့်ရက် - ၁၉-၁၂-၂၀၁၉(ကြာသပတေးနေ့)(၁၃:၀၀) နာရီ
တင်ဒါကျင်းပမည့်နေ့ရက် - ၂၀-၁၂-၂၀၁၉(သောကြာနေ့)၊နံနက်(၁၀:၀၀)နာရီ
တင်ဒါကျင်းပမည့်နေရာ	 - မြို့တော်ခန်းမ၊ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ
၁။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ (၄၈)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်မှူးဗထူးလမ်း ဘေးရှိ မြေနေရာ၌ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ကြီးကြပ်မှုဖြင့် Myanmar V-Pile Co., Ltd မှဆောင်ရွက်သော ဗိုလ်ဗထူးတန်ဖိုးမျှတအိမ်ရာစီမံကိန်း (ဒုတိယအဆင့်) တွင် ၄ခန်းတွဲ ၈ထပ်တိုက် (၂၇)လုံး ( ၈၆၄ ခန်း ) ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ U-600 တိုက်ခန်းများမှာ ၂၀၁၉ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလကုန်နှင့် U-900 တိုက်ခန်းများမှာ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇူလိုင်လကုန်တွင် အပ်နှံနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ U-600 တိုက်ခန်းဝယ်ယူခွင့်ရရှိသူများသည် ပဉ္စမအရစ်ထိ ကျသင့်ငွေပေးသွင်းပါရန်နှင့် U-900 တိုက်ခန်းဝယ်ယူခွင့်ရရှိသူများသည် ဒုတိယအရစ်ထိ ကျသင့်ငွေများအား အမြန်လာရောက် ပေးသွင်းပါရန် (၁၇-၁၀-၂၀၁၉) ရက်နေ့နှင့် (၁၉-၁၀-၂၀၁၉) ရက်နေ့ထုတ် နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများ တွင် ထည့်သွင်းကြေငြာပြီးဖြစ်ပါသည်။
၂။ ယခုအခါ (၁-၁၁-၂၀၁၉) ရက်နေ့အထိ U-600 အဆောက်အဦများနှင့် U-900 အဆောက်အဦ များမှ တိုက်ခန်းဖိုးပေးသွင်းရန် အောက်ပါအတိုင်းကျန်ရှိပါသည် -
- U-600 ဒုတိယအရစ် - ၁၁ ခန်း
- U-600 တတိယအရစ် - ၁၈ ခန်း
- U-600 စတုတ္ထအရစ် - ၂၇ ခန်း
- U-600 ပဉ္စမအရစ် - ၆၀ ခန်း
- U-900 ဒုတိယအရစ် - ၂၈၄ ခန်း
၃။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အပိုဒ်(၂) ပါ တိုက်ခန်းဖိုးပေးသွင်းရန် ကျန်ရှိသူများမှ တိုက်ခန်းဖိုးကျသင့်ငွေများ အမြန်လာရောက်ပေးသွင်းပါရန် ထပ်မံနှိုးဆော်အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။
၁။	ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီရှိ လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့များတွင် အသုံးပြုရန် အတွက် လိုအပ်သောအောက်ဖော်ပြပါ ပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်နေရာအရောက် ကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူ လိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့်လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ ပေးသွင်းနိုင်ပါကြောင်း ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-­
(က) HDPE ပိုက်နှင့် ပိုက်ဆက်ပစ္စည်း (၁၆)မျိုး ၄၅၂၉ လုံး
(ခ) ပိုက်ဆက်စက် (၄)မျိုး/ Valves (၃)မျိုး ၇ လုံး/၅ လုံး
(ဂ) Thermoplastic(အဖြူ/အ၀ါ) ၅၀၀ တန်
(ဃ) Glass Beads ၅၀ တန်
(င) Concrete Primer ၅၀၀ Drums
(စ) Reflective Sheeting HIP Tape (ဖြူ/နီ/ဝါ/ပြာ) ၈၀ လိပ်
(ဆ) သင်္ဘောဆေး(ဖြူ/နီ/ဝါ) ၃၅၀၀ ဂါလံ
(ဇ) Flexible Pole ၃၀၀၀ ခု
(စျ) လုပ်ငန်းသုံးစိမ်းလန်းဝတ်စုံ/ မိုးကာအင်္ကျီ ၃၁၁၄ စုံ/ ၁၅၅၇ ထည်
(ည) သစ်ခုတ်လွှ 36ʺ/25ʺ ၅ လုံး/ ၁၀ လုံး
(ဋ) ဘေးလွယ်မြက်ဖြတ်စက် ၅၀ လုံး
၂။	အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို ၁၈-၁၁ -၂၀၁၉ ရက်မှစ၍ ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို ၄ - ၁၂ -၂၀၁၉ ရက်နေ့ ၁၂:၀၀ နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန်ဖြစ်ပါ သည်။ တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်မည့်ရက်အား ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်။
(က) ကတ္တရာ(၆၀/၇၀) ၂၆၀၀ တန်
(ခ) ရေရောကတ္တရာ	 ၅၀ တန်
(ဂ) ပုံနှိပ်စက္ကူ ၂၈၅၀ ထုပ်
(ဃ) နော်ဝေသတင်းစာစက္ကူ ၂၀၀၀ ထုပ်
(င) CTP (Thermal Plate) ၁၀၀၀ ချပ်
(စ) ပုံနှိပ်မင်(အနက်) ၃၀၀ kg
၂။	အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို ၈- ၁၁ -၂၀၁၉ ရက်မှစ၍ ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို ၂၂-၁၁ -၂၀၁၉ ရက်နေ့ ၁၂:၀၀ နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန်ဖြစ်ပါ သည်။ တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်မည့်ရက်အား ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်။
၁။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သည် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီပိုင် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့်စျေးများလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့ (စျေးများနှင့်ကုန်စည်ပွဲရုံများစီမံခန့်ခွဲရေး) ကွပ်ကဲမှုအောက်ရှိ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊
ပိတောက်မြိုင်စျေးနှင့် တာမွေမြို့နယ်၊ ရာပြည့်စျေးတို့၏ သန့်စင်ခန်းဝင်ခ ကောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်းများအား အငှားချထားရန်အတွက် အိတ်ပိတ်တင်ဒါ အဆိုပြုလွှာများ တင်သွင်းနိုင်ပါကြောင်း ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-
၂။ တင်ဒါပုံစံရောင်းချမည့်ရက် - (၁.၁၁.၂၀၁၉) ရက်မှ (၂၉.၁၁.၂၀၁၉)ရက်နေ့ထိ
၃။ တင်ဒါပုံစံရောင်းချမည့်နေရာနှင့် တင်သွင်းရမည့်နေရာ - မြို့တော်ခန်းမ (ဒုတိယထပ်)၊ စျေးများဌာန ၊ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
၄။ တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်နောက်ဆုံးရက် - ၂၉.၁၁.၂၀၁၉ (သောကြာနေ့) ၁၃ : ၀၀ နာရီ
၅။ တင်ဒါစည်းကမ်းနှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များသိရှိလိုပါက ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ စျေးများဌာန၏ တယ်လီဖုန်းနံပါတ် - ၃၇၆၇၀၈ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
(က) Mini Truck (Pick-up) (၄၆) စီး
(ခ) Saloon (၁၅) စီး
(ဂ) Micro Bus (၁) စီး
(ဃ) City Bus (၃) စီး
(င )	 Double Cab (၁၄) စီး
(စ) Single Cab (၁) စီး
(ဆ) သံချောင်းလုံး (၇မျိုး) (၂၅၃၁.၆၃၅)တန်
(ဇ) ဘိလပ်မြေ(ထိုင်း) (၁၀၀၃၆၆)အိတ်
၂။	အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို ၄ - ၁၁ -၂၀၁၉ ရက်မှစ၍ ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို ၂ -၁၂ -၂၀၁၉ ရက်နေ့ ၁၂:၀၀ နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန်ဖြစ်ပါ သည်။ တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်မည့်ရက်အား ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်။
1.	The Government of the Republic of the Union of Myanmar has receivedaloan from Japan International Cooperation Agency (JICA) toward the cost of Greater Yangon Water Supply Improvement Project (MY-P5), Lagunbyin WTP and Nyaunghnapin WTP No.1 & No.2. Also need to include upgrading the existing dosing facilities of the Nyaunghnapin WTP No.1 & No.2. It is intended that part of the proceeds of the Contract for the Supply and Delivery of Poly Aluminium Chloride.
2.	Bidding will be conducted through procedures in accordance with the applicable Guidelines for Procurement under Japanese ODA Loans, and is open to all Bidders from eligible source countries, as defined in the Loan Agreement.
3.	The Yangon City Development Committee now invites sealed Bids from eligible and qualified Bidders for the procurement of the Supply and Delivery of Poly Aluminium Chloride (“the Goods”).
4.	Interested eligible Bidders may obtain further information from and inspect the Bidding Documents at the office of Engineering Department (Water and Sanitation) , Yangon City Development Committee at 12 1/2 Storey Office Building, No.390, Merchant Road, Yangon, Myanmar.
5.	A complete set of Bidding Documents may be purchased by interested Bidders on the submission ofawritten application to the address above, and upon payment ofanon-refundable fee 50,000 Myanmar Kyats.
6.	The provisions in the Instructions to Bidders and in the General Conditions of Contract are the provisions of the Standard Bidding Documents under Japanese ODA Loans for the Procurement of Goods.
7.	Bids must be delivered to the above address at or before 14:00 on5December 2019.
8.	Bids will be opened in the presence of the Bidders’ representatives who choose to attend at 14:00 PM on5December 2019 at the office of Engineering Department (Water and Sanitation), Yangon City Development Committee, 12 1/2 Storey Office Building, No.390, Merchant Road, Botahtaung Township, Yangon, Myanmar.
Email : lagunbyin@gmail.com
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း မြို့နယ်အလိုက်ရောင်းချမည့် မြေကွက်နေရာများအတွက် အသိပေးခြင်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း မြို့နယ်အလိုက်ရောင်းချမည့် မြေကွက်နေရာများကို သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးများတွင် သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါကြောင်းနှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကာလတန်ဖိုးစိစစ်သတ်မှတ်ရေးအဖွဲ့မှ မြို့နယ်အလိုက်သတ်မှတ်ထားသောဈေးနှုန်းများကို အခြေပြု၍ ရောင်းချမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
၁။	ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီရှိ လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့များတွင် အသုံးပြုရန် အတွက် လိုအပ်သောအောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်နေရာအရောက် ကျပ်ငွေ ဖြင့်ဝယ်ယူလိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့်လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ ပေးသွင်းနိုင် ပါကြောင်းဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-¬
(က) ဒီဇယ်ဆီ ၅၅၀၀၀၀ ဂါလံ
(ခ) ပရီမီယံဒီဇယ်ဆီ ၁၅၀၀၀၀ ဂါလံ
(ဂ) ဘိလပ်မြေ (ပြည်တွင်း) ၁၈၁၃၉၀၀ အိတ်
(ဃ) မြစ်ကျောက်စရစ် ၃၇၈၀၀ ကျင်း
(င )	 လိပ်သဲကျောက်(၃)မျိုး ၉၅၀၀ ကျင်း
(စ ) မြစ်သဲကြမ်း ၁၈၇၅၀ ကျင်း
၂။	အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို ၄-၁၀-၂၀၁၉ ရက်မှစ၍ ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို ၁၇-၁၀-၂၀၁၉ ရက်နေ့ ၁၂:၀၀ နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန်ဖြစ်ပါ သည်။ တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်မည့်ရက်အား ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်။
၁။	ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ရေရရှိရေးနှင့်ရေပေးဝေရေးလုပ်ငန်းတာဝန်ခံ အဖွဲ့သည် ရန်ကုန်-ပုသိမ်လမ်း တိုးချဲ့အဆင့်မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ရေပိုက်လိုင်းဆက်သွယ်ခြင်း လုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်သော အောက်ဖော်ပြပါ ပိုက်နှင့်ပိုက်ဆက်ပစ္စည်းများကို ဌာနအရောက် ကျပ်ငွေ ဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့် လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ ပေးသွင်း နိုင်ပါကြောင်း ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-
(က) 630mmØ HDPE ပိုက်နှင့်ပိုက်ဆက်ပစ္စည်း(၃)မျိုး (၄၀၁) လုံး
(ခ) 6"Ø PVC ပိုက်နှင့်ပိုက်ဆက်ပစ္စည်း (၃)မျိုး (၈၃၃) လုံး
၂။	အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို ၂၇- ၉ -၂၀၁၉ ရက်မှစ၍ ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို ၂၅-၁၀-၂၀၁၉ ရက်နေ့ ၁၂:၀၀ နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်မည့်ရက်အား ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်။
၃။	တင်ဒါပုံစံအား မြို့တော်ခန်းမ(ပထမထပ်) ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး ဌာနစုတွင်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို ဖုန်းအမှတ်- ၀၁၃၈၈၇၃၂ သို့ ရုံးချိန် အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
၁။	ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ စီမံခန့်ခွဲရေး၊ ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနှင့်ပြန်ကြားရေးဌာန ကြီးကြပ်မှုအောက်ရှိ ဒေးဇတ်-သရက်ပင်ချောင်ကူးတို့ ကောက်ခံသည့်လုပ်ငန်းအား တင်ဒါ စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန်အတွက်တင်ဒါ ခေါ်ယူအပ်ပါသည်။
၂။	တင်ဒါပုံစံနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ၄၆လမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ (၁၂)ထပ်ခွဲရုံး၊(၇)လွှာရှိ၊ စီမံခန့်ခွဲရေး၊ ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနှင့်ပြန်ကြားရေးဌာန (အခွန်ဌာန)တွင် ရုံးချိန်အတွင်းဝယ်ယူ နိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ် အချက်အလက်များသိရှိ လိုပါက ၀၉-၇၉၉၂၃၉၇၇၀ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း မေးမြန်း စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
တင်ဒါရောင်းချမည့်ရက် - ၂၃-၈-၂၀၁၉(သောကြာနေ့)
တင်ဒါအရောင်းပိတ်မည့်ရက် - ၁၆-၉-၂၀၁၉(တနင်္လာနေ့) (၁၃:၀၀)နာရီ
တင်ဒါကျင်းပမည့်နေ့ရက် - ၁၇-၉-၂၀၁၉(အင်္ဂါနေ့)၊နံနက်(၁၀:၀၀)နာရီ
၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် အသားထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင်များ လျှောက်ထားနိုင်
၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် (၁-၁၀-၂၀၁၉ မှ ၃၀-၉-၂၀၂၀) ရက်နေ့ထိ ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ တိရစ္ဆာန်ဆေးကုနှင့် အသားထုတ်လုပ်ရုံများဌာနက သတ်မှတ်ထားသော သတ်ရုံနှင့်နေရာများတွင် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုမည့် အသားထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင် (ကျွဲ၊ နွား၊ သိုး၊ ဆိတ်) ရွာသာကြီး၊ (ဝက်) ရွာသာကြီး၊ (ဝက်) ရွာမ၊ (ကျွဲ၊ နွား၊ သိုး၊ ဆိတ်) မွေးမြူရေးနှင့် မွေးမြူရေးထွက်ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေးဇုန်၊ လှိုင်သာယာ၊ (သိုး၊ ဆိတ်) ရွှေပြည်သာ၊ မြို့နယ်တွင်း အသားထုတ်လုပ်ခွင့်(ဒလမြို့နယ်/ ကျွဲ၊ နွား၊ ဝက်)နှင့် (ဆိပ်ကြီးခနောင်တိုမြို့နယ်/ ကျွဲ၊ နွား)လိုင်စင်တို့၏ အသားထုတ်လုပ်ခွင့် လိုင်စင်လျှောက်လွှာများကို တစ်စုံလျှင် (၃၀၀၀ိ/-) နှုန်းဖြင့် (၂၉-၈-၂၀၁၉) ရက်နေ့မှစ၍ တိရစ္ဆာန်ဆေးကုနှင့် အသားထုတ်လုပ်ရုံများဌာန (ရုံးချုပ်)၊ (၁၂)ထပ်ခွဲရုံး၊ သတ္တမထပ်၊ (၄၆)လမ်းနှင့် ဗိုလ်မြတ်ထွန်းလမ်းကြား၊ ကုန်သည်လမ်း၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်တွင် ဝယ်ယူ၍ (၆-၉-၂၀၁၉) ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား ပြန်လည်တင်ပြလျှောက်ထားရမည်။
၁။	ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ လမ်း၊ တံတားဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့ ကြီးကြပ်မှုအောက်ရှိ အောက်ဖော်ပြပါလုပ်ငန်းများ အငှားချထားခြင်း၊ ကတ္တားအဟောင်းများနှင့်အဆောက်အဦအဟောင်းများ ရောင်းချခြင်းအား တင်ဒါစနစ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက်တင်ဒါများခေါ်ယူအပ်ပါသည်-
(က) သံသုမာယာဉ်ရောင်းဝယ်ရေးစခန်း ယာဉ်ဝင်ခ ကောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်း၊
(ခ ) လှိုင်ယာဉ်ရောင်းဝယ်ရေးစခန်း ယာဉ်ဝင်ခကောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်း၊
(ဂ ) အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း ယာဉ်ဝင်ခကောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်း၊
(ဃ) ဒဂုံ-ဧရာပွဲရုံနှင့်အဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း ယာဉ်ဝင်ခ၊ယာဉ်ရပ်နားခကောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်း၊
(င ) ဒဂုံမြောက်ယာဉ်မောင်းသင်လေ့ကျင့်ရေးစခန်း ယာဉ်ဝင်ခ၊ လေ့ကျင့်ကြေးကောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်း၊
(စ ) ဒဂုံ-ဧရာပွဲရုံနှင့်အဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်းရှိ နားနေဆောင်၊နားနေခကောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်း၊
(ဆ) သံသုမာယာဉ်ရောင်းဝယ်ရေးစခန်းရှိ ရေချိုး/သန့်စင်ခန်း၊
(ဇ ) အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်းရှိ ရေချိုး/သန့်စင်ခန်း အမှတ်(၃)၊
(ဈ) အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်းရှိ ရေချိုး/သန့်စင်ခန်း အမှတ်(၄)၊
(ည) ဒဂုံ-ဧရာပွဲရုံနှင့်အဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်းရှိ ရေချိုး/သန့်စင်ခန်း အမှတ်(၁-က၊ခ)၊
(ဋ )	 ဒဂုံ-ဧရာပွဲရုံနှင့်အဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်းရှိ ရေချိုး/သန့်စင်ခန်း အမှတ်(၂)၊
(ဌ ) လှိုင်ယာဉ်ရောင်းဝယ်ရေးစခန်းရှိ သန့်စင်ခန်း အမှတ်(၁)၊
(ဍ ) လမ်းအသုံးပြုခကောက်ခံခဲ့သည့်ဂိတ်များရှိ ကတ္တားအဟောင်းများနှင့်အဆောက်အဦအဟောင်းများ၊
၂။	တင်ဒါပုံစံနှင့်စည်းကမ်းချက်များကိုဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊၄၆လမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ( ၁၂ ) ထပ်ခွဲရုံး၊ (၇)လွှာရှိ လမ်း၊ တံတားဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့ ၊ယာဉ်ရပ်နားစခန်းများစီမံခန့်ခွဲရေးရုံးတွင် ရုံးချိန်အတွင်းဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များသိရှိလိုပါက လမ်း၊ တံတားဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့၊ ယာဉ်ရပ်နားစခန်းများစီမံခန့်ခွဲရေးရုံးသို့ဖြစ်စေ၊ ဖုန်း ၀၉-၅၀၅၄၂၉၁ သို့ဖြစ်စေ ရုံးချိန်အတွင်း မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
တင်ဒါရောင်းချမည့်ရက် - ၂၀-၈-၂၀၁၉(အင်္ဂါနေ့)
တင်ဒါအရောင်းပိတ်မည့်ရက် - ၁၇-၉-၂၀၁၉(အင်္ဂါနေ့)(၁၃:၀၀)နာရီ
တင်ဒါကျင်းပမည့်နေ့ရက် - ၁၉-၉-၂၀၁၉(ကြာသပတေးနေ့)၊နံနက်(၁၀:၀၀)နာရီ
တင်ဒါကျင်းပမည့်နေရာ	 - မြို့တော်ခန်းမ၊ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး နှင့်ဈေးများ လုပ်ငန်းတာဝန်ခံ အဖွဲ့ကြီးကြပ်မှု အောက်ရှိအောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းများအား တင်ဒါစနစ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက်တင်ဒါများ ခေါ်ယူအပ် ပါသည်-
(က) နံ့သာကုန်းစက်ဘီးနှင့်ယာဉ်အပိုပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးစခန်း ယာဉ်ဝင်ခ ကောက်ခံခြင်း၊
(ခ) ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံနှင့်ကုန်တင်ယာဉ်ရပ်နားစခန်း ယာဉ်ဝင်ခ၊ ယာဉ်ရပ်နားခ ကောက်ခံခြင်း၊
(ဂ) စော်ဘွားကြီးကုန်းပွဲရုံနှင့် ကုန်တင်ယာဉ်ရပ်နားစခန်း ယာဉ်ဝင်ခ၊ ယာဉ်ရပ်နားခ ကောက်ခံခြင်း၊
(ဃ) မင်းဓမ္မစားသောက်ဆိုင်ဝင်း ယာဉ်ဝင်ခ၊ ယာဉ်ရပ်နားခ ကောက်ခံခြင်း၊
(င) ကျိုက္ကဆံယာဉ်အပိုပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးစခန်း ယာဉ်ဝင်ခ၊ ယာဉ်ရပ်နားခ ကောက်ခံခြင်း၊
(စ) ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံနှင့်ကုန်တင်ယာဉ်ရပ်နားစခန်း ဆိပ်ကမ်းကပ်ခနှင့် ကုန်တင်ကုန်ချ ဆိပ်ကမ်းခွန် ကောက်ခံခြင်း၊
(ဆ) နံ့သာကုန်းစက်ဘီးနှင့်ယာဉ်အပိုပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးစခန်း ယာယီပစ္စည်း စုပုံခွန်ကောက်ခံခြင်း၊
(ဇ)	 ကျိုက္ကဆံယာဉ်အပိုပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးစခန်း ယာယီပစ္စည်းစုပုံခွန် ကောက်ခံခြင်း၊
(ဈ) ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံနှင့်ကုန်တင်ယာဉ်ရပ်နားစခန်း အမှတ်(၁) ရေချိုး/ သန့်စင်ခန်း၊
(ည) ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံနှင့်ကုန်တင်ယာဉ်ရပ်နားစခန်း အမှတ်(၂) ရေချိုး/ သန့်စင်ခန်း၊
(ဋ) စော်ဘွားကြီးကုန်းပွဲရုံနှင့်ကုန်တင်ယာဉ်ရပ်နားစခန်း ရေချိုး/ သန့်စင်ခန်း၊
(ဌ) ကျိုက္ကဆံယာဉ်အပိုပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးစခန်း အမှတ်(၁) ရေချိုး/ သန့်စင်ခန်း၊
(ဍ) ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံနှင့်ကုန်တင်ယာဉ်ရပ်နားစခန်း ရုံးဟောင်း အဆောက်အအုံ ငှားရမ်းခြင်း၊
၂။ တင်ဒါပုံစံနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ၄၆လမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ (၁၂) ထပ်ခွဲရုံး၊ (၇)လွှာရှိ၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့်ဈေးများလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့၊ ဈေးများနှင့် ကုန်စည်ပွဲရုံများ စီမံခန့်ခွဲရေးရုံး(အခွန်ဌာန)တွင် ရုံးချိန်အတွင်းဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ် အချက်အလက်များသိရှိလိုပါက ၀၉-၄၂၀၁၄၄၁၁၂ သို့ ရုံးချိန်အတွင်းမေးမြန်း စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
တင်ဒါအရောင်းပိတ်မည့်ရက် ၁၃-၉-၂၀၁၉ (သောကြာနေ့) (၁၃:၀၀)နာရီ
တင်ဒါကျင်းပမည့်နေ့ရက် ၁၇-၉-၂၀၁၉ (အင်္ဂါနေ့)၊နံနက်(၁၀:၀၀)နာရီ
တင်ဒါကျင်းပမည့်နေရာ မြို့တော်ခန်းမ၊ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
ဖိုင်ဘာကေဘယ်သွယ်တန်းထားသော ကုမ္ပဏီများ၊ ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများသို့
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုဖြင့် ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်လုပ်ငန်းများ စနစ်တကျ တရားဝင်သွယ်တန်းနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ Pilot Project အဖြစ် ပြည်လမ်း (ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်းနှင့် လေဆိပ် လမ်းဆုံကြား)တွင် ကောင်းကင်ကြိုးများအဖြစ် ဆောင်ရွက်ထားရှိသော Fiber ကြိုးများကို မြေအောက်ကြိုးများအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အဆိုပါ လမ်းအပိုင်းတွင် Fiber ကြိုး သွယ်တန်းထားရှိသော ကုမ္ပဏီများ/ ဌာနဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ အနေဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များနှင့်အတူ ၃၁-၇-၂၀၁၉ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ မြို့တော်ခန်းမ(ဒုတိယထပ်)၊ လမ်း၊ တံတား ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတာဝန်ခံ အဖွဲ့၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(လမ်းနှင့်တံတား)သို့ လာရောက် ဆက်သွယ်ပေးပို့ကြပါရန် အသိပေး ကြေညာအပ်ပါသည်-
(၁) ကြိုးအမျိုးအစားနှင့် Fiber Core အရေအတွက်
(၂) အသုံးပြု တပ်ဆင်ထားသည့် အစနေရာနှင့် အဆုံးနေရာ
(၃) Fiber Core များ ထပ်မံဖြန့်ခွဲ အသုံးပြုပုံ(Core Plan, Design)
မြို့တော်နယ်နိမိတ်အတွင်း မွေးမြူထားသော အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်(ခွေး၊ ကြောင်)များအား ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးဥပဒေနှင့်အညီ မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိရာ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်မှတ်ပုံတင်လျှောက်လွှာပုံစံကို ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့်စျေးများလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့၊ တိရစ္ဆာန်ဆေးကုနှင့်အသားထုတ်လုပ်ရုံများဌာန၏ကုသရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးဌာနခွဲ(ခရိုင်ရုံး)များ၊မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီရုံးများတွင်လည်းကောင်း၊ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ Website တွင် Download ပြုလုပ်၍လည်းကောင်း ရယူပြီး သတ်မှတ်ပုံစံတွင်လိုအပ်သည်များကိုဖြည့်စွက်၍ သက်ဆိုင်ရာ ခရိုင်နယ်မြေအလိုက် အောက်ဖော်ပြပါနေရာများတွင်သွားရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်-
ကုသရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးဌာနခွဲ(အရှေ့ပိုင်းခရိုင်) အသားထုတ်လုပ်ရေးဌာနခွဲ(ဝက်)ရွာသာကြီးဝင်း(ညောင်နှစ်ပင်မှတ်တိုင်အနီး)၊ အမှတ်(၂)လမ်းမကြီး၊ ရွာသာကြီးကျေးရွာ၊ ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း)မြို့နယ်။
ကုသရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးဌာနခွဲ(အနောက်ပိုင်းခရိုင်) ဟံသာဝတီလမ်းနှင့်ကမ်းနားလမ်းထောင့် (ဆင်မလိုက်မှတ်တိုင်အနီး၊ သရက်တောမြောက်ရပ်ကွက်၊ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်။
ကုသရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးဌာနခွဲ(တောင်ပိုင်းခရိုင်) အမှတ်(၃၉၉)၊ ကုန်သည်လမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ၁၂(၁/၂)ထပ်(တိုးချဲ့ရုံး)(၆)လွှာ၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်။
ကုသရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးဌာနခွဲ(မြောက်ပိုင်းခရိုင်) အမှတ်(၉)၊ အောက်ကြည့်မြင်တိုင်လမ်း(ဆင်မလိုက်စျေးအနီး)၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်။
MYANMAR South East Asia Disaster Risk Management Project
Assignment Title: Independent Dam Safety and Risk Assessment for Gyobyu, Phugyi and Hlawga Reservoirs
Reference No. C3-CS2
The Government of the Republic of the Union of Myanmar has received financing from the World Bank toward the cost of the South East Asia Disaster Risk Management Project, and intends to apply part of the proceeds to finance the consulting services for Independent Dam Safety and Risk Assessment for Gyobyu, Phugyi and Hlawga Reservoirs.
The objectives of this assignment are to assist Yangon City Development Committee (YCDC) as the responsible entity for water supply to Yangon City and the Gyobyu, Phugyi and Hlawga reservoir owners and operators to (i) Assess the safety condition of the dams and appurtenant structures in accordance with the international and national standards as well as the World Bank's Operation Manual (WB OP / BP 4.37) for dam safety; (ii) Assess the potential risks due to potential failure of the dams to local communities and assets, including assets to be financed as part of this project; (iii) Prepareadam safety report including any safety issues and recommendation of remedial measures along with conceptual design and preliminary cost estimates.
The Consulting Services (“the Services”) shall consist of the following works for Gyobyu, Phugyi and Hlawga reservoirs and appurtenance: (i) Site Visits, Data Collection and Safety Checking; (ii) Detailed Dam Safety/ Reservoir and Risk Assessment Analyses and Evaluation; (iii) Preparation of Dam Safety and Risk Assessment Report; (iv) Preparation of Conceptual Designs and Cost Estimates.
The Yangon City Development Committee with the Building Engineering Department, Building Control Authority will be implementing the Project and now invites eligible consulting firms (“Consultants”) to indicate their interest in providing the Services. Interested Consultants must provide specific information demonstrating that they have the required qualifications and relevant experience to perform the Services.
The short listing criteria are: (i) Specific experience relevant to the assignment: Sound knowledge and experience in the fields of dam design, dam safety, geotechnical, seismic and hydraulic engineering with at least 15 years' experience including: (a) Dam safety assessment inspections (b) Extensive dam design (including upgrading and rehabilitation), construction and operation of dams, reservoirs and associated structures (c) Extensive experience undertaking detailed risk and hazard assessments (flood and seismic) (d) Expertise in hydraulic and geotechnical (appraisal) engineering, numerical modeling and associated industry software packages for inter alia seepage, stress-strain, slope stability, flood routing, dam break analysis, and inundation mapping (e) At least three past projects of similar scope and nature; (ii) Relevant experience in Myanmar and or the region (highly desirable)
Interested Consulting firms are requested to provide specific information and past project examples to demonstrate their ability to meet each of the shortlisting criteria/ sub-criteria above. Individual CV's of proposed 'team members' need not be supplied at this stage (individual team members will be evaluated at RFP stage) and will not be taken into consideration. The details of similar assignments carried out (including contract reference and scope of work undertaken) should be provided. Failure to do so may result in Consulting Firms not being evaluated.
The attention of interested Consultants is drawn to paragraph 1.9 of the World Bank's Guidelines: Selection and Employment of Consultants [under IBRD Loans and IDA Credits & Grants] by World Bank Borrowers dated January 2011 and revised in July 2014. (“Consultant Guidelines”), setting forth the World Bank's policy on conflict of interest.
The draft Terms of References can be obtained through email.
Expressions of interest must be delivered inawritten form to the address below (in person, or by mail, or by fax, or by e-mail) by 4.00 pm on July 9, 2019 (local Myanmar time).
Contact Person: Daw Hnin Ei Win
Position : Section Head Engineer
Building Engineering Department, Building Control Authority
4th Floor, 10 Storied Office Building
Corner of Sepin Street & 34th Street
Kyauktada Township, Yangon, Postal Code-- 11182,
E-mail: ycdcedb@gmail.com and ycdcedb@ycdc.gov.mm
1.	The Government of the Republic of the Union of Myanmar has receivedaLoan from Japan International Cooperation Agency toward the cost of the Greater Yangon Water Supply Improvement Project Phase 2. It is intended that part of the proceeds of this Loan will be applied to eligible payments under the contract resulting from the bidding for which this prequalification is conducted.
2.	The Yangon City Development Committee intends to prequalify contractors and/or firms for Renovation of Kokkine Service Reservoir and Construction of Distribution Networks in Zone 1 (Low Subzone).
-	Renovation of the existing Kokkine Service Reservoir having its design capacity of 20MG (90,920m3)
-	Construction of distribution main pipe of Ductile Iron Pipe (DIP, DN450-1500mm) with total length of approx. 21.0km, including pipe jacking for railway crossing (DN800mm x L=70.0m, DN1500mm x L=88.0m)
-	Construction distribution network of HDPE pipe (OD110-630mm) with total length of approx. 250.0 km
-	Replacement and new installation of house connections and water meters, with total number of 113,900 connections (including both existing and new connections)
3.	It is expected that Invitation for Bids will be made in September 2019.
4.	Prequalification will be conducted through procedures in accordance with the applicable Guidelines for Procurement under Japanese ODA Loans, and is open to all Applicants from eligible source countries, as defined in the Loan Agreement.
5.	Interested eligible Applicants may obtain further information from and inspect the Prequalification Documents at the office of Head of Department, Engineering Department (Water and Sanitation), Yangon City Development Committee from 9:30am to 4:30pm.
6.	A complete set of the Prequalification Documents may be purchased by interested Applicant(s) on the submission ofawritten Application to the address above and upon payment ofanonrefundable fee of MMK20,000 (Twenty thousand Myanmar Kyat).
7.	Applications for prequalification should be submitted in sealed envelopes, delivered to the address above by 15 July 2019, and be clearly marked “Application to Prequalify for Package No. ICB-04 Renovation of Kokkine Service Reservoir and Construction of Distribution Networks in Zone 1 (Low Subzone) under the Greater Yangon Water Supply Improvement Project Phase 2.”
(၁.၄.၂၀၁၉) ရက်နေ့သည် အစိုးရဘဏ်ပိတ်ရက်ဖြစ်ပါသဖြင့် နေ့ချင်းပြီး ငွေသွင်းဆောင်ရွက်ရသည့် အမှုတွဲများအား လက်ခံဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိပါကြောင်း ကြိုတင်အသိပေးမေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
ရန်ကုန်မြို့တော်မဟာသင်္ကြန်ပွဲတော်တွင် ရေဆက်သွယ် ကစားလိုသူများ ခွင့်ပြုမိန့် လျှောက်ထားရန်
မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၈၀ မဟာသင်္ကြန်ပွဲတော်ရက်များအတွင်း ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီပိုင် ရေပိုက်လိုင်း၊ အင်းလျားကန် နှင့် ကန်တော်ကြီးကန် တို့မှ ရေကို ဆက်သွယ် ကစားလိုသည့် ကိစ္စရပ်များ စိစစ်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန်အတွက် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ ရေရရှိရေးနှင့် ရေပေးဝေရေး လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့ အင်ဂျင်နီယာဌာန(ရေနှင့်သန့်ရှင်းမှု) သို့ ၁၃.၄.၂၀၁၉ရက်နေ့ (သင်္ကြန်အကြို့နေ့) နေ့လည်(၁၂:၀၀)နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ ယာယီရေ ဆက်သွယ်ရန်အတွက် ခွင့်ပြုမိန့် လျှောက်ထားကြရမည်။ ယာယီ ရေဆက်သွယ်ခွင့် လျှောက်လွှာများကို မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးရှိ မြို့နယ်(ရေ/သန့်)တာဝန်ခံရုံးများနှင့် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ (၁၂)ထပ်ခွဲတိုးချဲ့ရုံးသစ် ပဉ္စမထပ် (ဗိုလ်မြတ်ထွန်းလမ်းနှင့် ၄၆လမ်းကြား ကုန်သည်လမ်းပေါ်) ရှိ ရေရရှိရေးနှင့် ရေပေးဝေရေးလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့ အင်ဂျင်နီယာဌာန(ရေနှင့်သန့်ရှင်းမှု)ရုံးခန်းတွင် အခမဲ့ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။
ခွင့်ပြုမိန့်လျောက်ထားရာ၌ သတ်မှတ်လျောက်လွှာတွင် မြို့နယ်(ရေ/သန့်)တာဝန်ခံ၏ မှတ်ချက်ရယူပြီး တင်ပြလျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ရေဆက်သွယ်မှုကို မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးရှိ အင်ဂျင်နီယာဌာန(ရေနှင့်သန့်ရှင်းမှု)ဝန်ထမ်းများက ရေဆက်သွယ်သူများ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် စည်ကမ်းချက်များနှင့်အညီ ရေကစားမဏ္ဍပ်သို့ ရေဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ကော်မတီပိုင်ရေပိုက်လိုင်းများ၊ အင်းလျားကန်၊ ကန်တော်ကြီးကန် နှင့် အခြားမြေစိုက်ကန်များမှ ရေကိုဆက်သွယ်၍ ရေကစားခြင်းမပြုရန်နှင့် ကော်မတီပိုင် မီးသတ်ပိုက်ခေါင်းများမှ ဆက်သွယ်၍ ရေကစားခြင်း လုံးဝ(လုံးဝ) မပြုရန်နှင့် ပြုလုပ်ပါက တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ နယ်နိမိတ်အတွင်း အဆောက်အဦဆောက် လုပ်ခွင့်ပါမစ် ရယူရေး လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ ပိုမိုလွယ်ကူ မြန်ဆန်စေရန် လက်ရှိကျင့်သုံးနေသော ဆောက်လုပ်ခွင့်ပါမစ်စနစ်အား Risk Based System ဖြင့် ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်နိုင်ရေး အတွက် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇွန်လမှစ၍ အမှုတွဲများလက်ခံ ဆောင်ရွက်ရာတွင် Building Categorization Matrix (BCM) အားအသုံးပြုကာ Risk ခွဲခြား သတ်မှတ်၍ စတင်စမ်းသပ် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြိုတင် အသိပေး ကြေညာအပ် ပါသည်။ လိုအပ်သည့် စာရွက်စာတမ်းများကိုလည်း Risk ပေါ်မူတည်၍ တောင်းခံသွားမည်ဖြစ် ပါသည်။ အမှုတွဲစတင် လက်ခံရာတွင် Risk ခွဲပြီး ဆောင်ရွက်သည့်အတွက် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ပိုမိုရှိပြီး ကြာမြင့်ချိန်၊ ကုန်ကျစရိတ်များအား လက်ခံသည့်အချိန်တွင် ချက်ခြင်းသိရှိနိုင်မည်လည်း ဖြစ်ပါသည်။ Risk ခွဲခြားသတ်မှတ်ပြီးဖြစ်သဖြင့် အများပြည်သူသို့ ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသော အဖွဲ့ အစည်းအားလုံးအတွက် အဆောက်အဦဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ မှန်ကန်စွာ ရရှိနိုင်ပြီး ခွင့်ပြုရာ တွင်လည်းကောင်း၊ တည်ဆောက်ပြီးချိန်၌ စီမံခန့်ခွဲရာတွင်လည်းကောင်း စီမံခန့်ခွဲမှု ပိုမိုကောင်းမွန် ရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။ ထိုသို့ (BCM) အားအသုံးပြုကာ Risk ခွဲခြားသတ်မှတ်၍ အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ခွင့် ပေးခြင်းအား ပိုမိုလျင်မြန်လွယ်ကူပြီး ထိရောက်မှုရှိစေရန် နိုင်ငံတကာနည်းတူ ICT နည်းပညာသုံး online submission စနစ်ဖြင့်ဆက်လက် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွား မည်ဖြစ်ပါကြောင်းလည်း အများသိစေရန် တပါတည်း အသိပေး ကြေညာအပ်ပါသည်။
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး နယ်နိမိတ်အတွင်း ဆောက်လုပ်မည့် ၃ထပ်နှင့် အထက်အဆောက်အအုံများ ဆောက်လုပ်ခွင့်တင်ပြရာတွင် အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းများကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးပညာရှင်အဖွဲ့(CQHP) ထောက်ခံချက်ဖြင့် မြေသားစမ်းသပ်မှုလုပ်ငန်း လိုင်စင်ရရှိထားသည့် ကုမ္ပဏီများမှ တင်ပြလာသော မြေသား စမ်းသပ်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာ (Soil Investigation Report) များကို လက်ခံ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ မြေသားစမ်းသပ်မှုလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ ရက်နေ့တွင် CQHP အဖွဲ့နှင့်ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့များ စုပေါင်းဆွေးနွေးသည့် အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရ မြေသားစမ်းသပ်မှုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် မြေသားစမ်းသပ်မှု လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါအချက်များကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၁) ရက်နေ့မှ စတင်၍ ဖြည့်စွက်လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် အသိပေး ကြေညာအပ်ပါသည်-
Soil Report သက်တမ်းအား မြေသားစမ်းသပ်သည့်အချိန်မှစ၍ ၄ နှစ် သက်တမ်း အထိသာ အကျုံးဝင်သည်ဟု သတ်မှတ်ရန်။
စတုရန်းပေ ၂၅၀၀ နှင့် အောက်ရှိသောမြေကွက်များအတွက် မြေသားစမ်းသပ် ရမည့် Bore Hole အရေအတွက်အား အနည်းဆုံး ၂ ကျင်း စမ်းသပ်ရန်။
စတုရန်းပေ ၂၅၀၀ နှင့် ၅၀၀၀ ကြားရှိသောမြေကွက်များအတွက် မြေသား စမ်းသပ်ရမည့် Bore Hole အရေအတွက်အား အနည်းဆုံး ၃ ကျင်း စမ်းသပ်ရန်။
စတုရန်းပေ ၅၀၀၀ နှင့် အထက်ရှိသော မြေကွက်များအတွက် မြေသားစမ်းသပ် ရမည့် Bore Hole အရေအတွက်အား ပထမမူလ စတုရန်းပေ ၅၀၀၀ အတွက် ၃ ကျင်း နှင့် ၅၀၀၀ ထက်ပိုသော စတုရန်းပေအတွက် စတုရန်းပေ ၅၀၀၀ လျှင် ၁ ကျင်း နှုန်းဖြင့် စမ်းသပ်ရန်။
Loan No.: 60800-MM
Assignment Title: National Social Safeguards Consultant
The Republic of the Union of Myanmar has received financing from the International Development Association (IDA) in the form ofacredit toward the cost of Myanmar Southeast Asia Disaster Risk Management Project. The Yangon City Development Committee (YCDC), an implementing agency for the Project, intends to applyaportion of the proceeds of this credit for Consulting Services.
YCDC wishes to invite eligible Individual Consultant to express his/her interest in providing his/her services as National Social Safeguards Consultant.
The National Social Safeguards Consultant shall be responsible for the following tasks inter alia: (i) Provide technical oversight for the social screening of sub-projects identified under the project, ensuring the screening process complies with the ESMF and RPF; and advice on the site-specific safeguards instruments required (e.g. Environmental and Social Management Plan, Resettlement Plans …etc.); (ii) Assist YCDC and International Social Consultant with the review of contractors' proposals regarding social safeguards requirements and identify gaps not covered by the proposed mitigation and social measures and/or budget; (iii) Support the design, preparation, and implementation of the Social Safeguards Training Program for the Project coordinating as necessary with social safeguards capacity building initiatives taking place in Myanmar, in coordination with YCDC's safeguards focal points; (iv) Advise YCDC on stakeholder and community engagement, including grievance redress mechanism (GRM) establishment and work with YCDC is to ensure the effectiveness of the GRM; (v) Supervise the Contractor's performance, and handling of site-specific social issues, and provide corrective instructions if needed; (v) Prepare periodical social monitoring reports, including reports on social part of ESMP implementation status to YCDC and prepare social supervision statement during the construction phase (vi) orient staff of implementing agency and contractor on the Bank's social safeguards policy requirements, standards and procedures; and assess implementing agency capacity on social safeguards and recommend appropriate capacity building measures.
It is envisaged that the services will be carried out on basis for 500 days (300 days of full time and 200 days of part time) over 54 months with an expected start of April/May 2019. The location of the service will be at YCDC in Yangon.
The successful candidate must have (Essential Qualifications and Knowledge/Experience): (i) At least in Master's degree in social science or related fields; (ii) Minimum5years' experience in Myanmar or in the region regarding to the compliance of social safeguards policies including involuntary resettlement; (iii) Experience in moderating and facilitating group discussions in public preferred; (iv) Excellent written and oral communication skills in English language and Myanmar language; (v) Knowledge and experience of working with social safeguards policies of the World Bank and/or Asian Development Bank preferred; (vi) Knowledge and experience of working with Myanmar legislations related to involuntary resettlement and GRM preferred.
The attention of interested Consultants is drawn to paragraph 1.9 of the World Bank's Guidelines: Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers January 2011, revised July 2014 (“Consultant Guidelines”), setting forth the World Bank's policy on conflict of interest.
Further information can be obtained at the address below during office hours [9.30 a.m. to 4.30 p.m., Monday to Friday].
Expressions of interest must be delivered inawritten form to the address below (in person, or by mail, or by fax, or by e-mail) by February 27, 2019 before 3:00 p.m.
NATIONAL ENVIRONMENTAL SAFEGUARDS CONSULTANT
Assignment Title: National Environmental Safeguards Consultant
Reference No.: C4-CS5
YCDC wishes to invite eligible Individual Consultant to express his/her interest in providing his/her services as National Environmental Safeguards Consultant.
The National Environmental Safeguards Consultant shall be responsible for the following tasks inter alia: (i) Provide technical oversight for the environmental screening of sub-projects identified under the project, ensuring the screening process complies with the ESMF; and advice on the site-specific safeguard instruments required (e.g. Environmental and Social Management Plan, etc.); (ii) Assist YCDC and International Environmental Consultant with the review of contractors' proposals regarding environmental safeguards requirements and identify gaps not covered by the proposed mitigation and environmental measures and/or budget; (iii) Support the design, preparation, and implementation of the Environmental Safeguards Training Program for the Project coordinating as necessary with environmental safeguards capacity building initiatives taking place in Myanmar, in coordination with YCDC's safeguards focal points; (iv) Supervise the Contractor's performance, and handling of site-specific environmental issues, and provide corrective instructions if needed; (v) Prepare periodical environmental monitoring reports, including reports on environmental part of ESMP implementation status to YCDC and prepare environmental supervision statement during the construction phase (vi) orient staff of implementing agency and contractor on the Bank's environmental safeguards policy requirements, standards and procedures; and assess implementing agency capacity on environmental safeguards and recommend appropriate capacity building measures.
The successful candidate must have (Essential Qualifications and Knowledge/Experience): (i) At least in Master's degree in environmental management, environmental engineering, or related fields; (ii) Minimum5years' experience in Myanmar or in the region regarding to the compliance of environmental safeguards policies including environmental management; (iii) Experience in moderating and facilitating group discussions in public preferred; (iv) Excellent written and oral communication skills in English language and Myanmar language; (v) Knowledge and experience of working with environmental safeguards policies of the World Bank and/or Asian Development Bank preferred; (vi) Knowledge and experience of working with Myanmar legislations related to ESIA preferred.
(Request for Expression of Interest - REOI)
၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ မြို့တွင်း(၆)မြို့နယ်ရှိ‌ ယာဉ်ရပ်နားကန့်သတ်ဇုန် များတွင် Smart Parking လုပ်ငန်းကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ပြည်တွင်း/ ပြည်တွင်းပြည်ပဖက်စပ်ကုမ္ပဏီများအား စိတ်ပါဝင်စားမှုဖော်ပြခြင်းအဆိုပြုလွှာများ တင်သွင်းနိုင်ရန် ဖိတ်ခေါ် အပ်ပါသည်
‌Smart Parking ဆောင်ရွက်မည့်တည်နေရာ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့တွင်း (၆) မြို့နယ်ရှိ လမ်းမကြီးများ
၂။ EOI အဆိုပြုလွှာများကို ၂၈-၁-၂၀၁၉ ရက်နေ့မှစ၍ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ မြို့တော်ခန်းမ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(လမ်းနှင့်တံတား) တွင် ရုံးချိန်အတွင်း ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်
၃။ EOI အဆိုပြုလွှာ စာရွက်စာတမ်းများအပြည့်အစုံကို အထက်ဖော်ပြပါဌာနသို့ ၂၇-၂-၂၀၁၉ ရက်နေ့(၁၅း၀၀)နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရမည်။ နောက်ကျတင်သွင်းသော EOI အဆိုပြု လွှာများကို လက်ခံမည် မဟုတ်ပါ။
၄။ EOI နှင့် စပ်လျဉ်း၍ သိရှိလိုသော အချက်များကို ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(လမ်းနှင့်တံတား)၊ တယ်လီဖုန်း အမှတ်(၀၉-၅၁၀၃၂၅၀)သို့ ရုံးချိန် အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်း ဆောက်လုပ်သည့် အဆောက်အအုံများကို ကြီးကြပ်ဆောက်လုပ်ရန်အတွက် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီက အင်ဂျင်နီယာလိုင်စင်များအား စိစစ်ထုတ်ပေးခဲ့ရာ အဆိုပါလိုင်စင်များသည် ၃၁-၃-၂ဝ၁၈ ရက်နေ့ တွင် သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည်ဖြစ်ပြီး၊ ၁-၄-၂ဝ၁၈ ရက်နေ့မှစ၍ မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာကောင်စီ၊ မြန်မာနိုင်ငံဗိသုကာကောင်စီများတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသော အင်ဂျင်နီယာ/ဗိသုကာများဖြင့်သာ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်း ကြီးကြပ်ဆောက်လုပ်ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း ၁၅-၃-၂ဝ၁၈ ရက်နေ့ သတင်းစာများတွင် ထည့်သွင်းကြေညာခဲ့ပြီး ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။
၂။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီအနေဖြင့် ၁-၄-၂ဝ၁၈ ရက်နေ့မတိုင်မီ ခွင့်ပြုချက် တင်ပြထားသော ဆောက်လုပ်ခွင့် အမှုတွဲများနှင့် ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီး ဆောက်လုပ်ဆဲ အဆောက်အအုံများတွင် မူလကြီးကြပ်ခဲ့သော လိုင်စင်အင်ဂျင်နီယာများ(LS)၊ အဆောက်အအုံ အင်ဂျင်နီယာများ(SEC)၊ Accredited Checker (AC)များအား ဆောင်ရွက်ဆဲများဖြစ်သဖြင့် ဖြေလျော့ပြီး ဆောင်ရွက်ခွင့်ပေးလျက်ရှိရာ အချိန်ကာလ(၇)လကျော်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်၍ မူလ အင်ဂျင်နီယာများဖြင့် ဆောင်ရွက်ဆဲရှိနေသည့် အဆောက်အအုံများအားလုံးအား ၁-၄-၂ဝ၁၉ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရအင်ဂျင်နီယာ/ဗိသုကာများဖြင့် ပြောင်းလဲ ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)တွင် အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ခွင့်ပြုမိန့် တင်ရာ၌ ပုံစံများတွင် လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် ကော်မတီ အသိအမှတ်ပြုလိုင်စင်ရကန်ထရိုက်တာများ၏ လက်မှတ်အတု၊တံဆိပ်တုံးအတုများဖြင့် တင်ပြနေ ကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိရသဖြင့် ၁.၁၂.၂၀၁၈ ရက်နေ့မှစ၍ အမှုတွဲ တင်ရာတွင် ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ အသိအမှတ်ပြုလိုင်စင်ရကန်ထရိုက်တာများသို့ ထုတ်ပေးထားသော ကတ်ပြားမူရင်းနှင့် တင်ပြမှသာ လက်ခံဆောင်ရွက်ရရှိမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်။
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)တွင် အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ခွင့်ပြုမိန့် တင်ရာ၌ ပုံစံများတွင် လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် မှတ်ပုံတင် အင်ဂျင်နီယာ/ဗိသုကာများ၏လက်မှတ်အတု၊တံဆိပ်တုံးအတုများဖြင့် တင်ပြနေကြောင်း စစ်ဆေး တွေ့ရှိရသဖြင့် ၁.၁၂.၂၀၁၈ ရက်နေ့မှစ၍ အမှုတွဲ တင်ရာတွင် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီမှ မှတ်ပုံတင်အင်ဂျင်နီယာ/ ဗိသုကာများသို့ အခမဲ့ထုတ်ပေးထားသော ကတ်ပြားမူရင်းနှင့် တင်ပြမှသာ လက်ခံဆောင်ရွက်ရရှိမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်။
Assignment Title: Component3Preparation of Detailed Engineering Designs and Bidding Documents for the seismic retrofitting of 20 buildings in Yangon, and Construction Management and Supervision of the Works
Position: Section Head Engineer
4th Floor, 10 Storeyed Office Building,
Corner of Sepin Street & 34th Street,
Postal Code - 11182
Tel: +95 1 374366
E-mail: ycdcedb@gmail.com and
၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် အသားထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင်များ လျှောက်ထားနိုင်
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် အသားထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင်များ လျှောက်ထားနိုင် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် (၁-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၃၀-၉-၂၀၁၉)ရက်နေ့ထိ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင် သာယာရေးကော်မတီ၊ တိရစ္ဆာန်ဆေးကုနှင့်သားသတ်ရုံများဌာနက သတ်မှတ်ထားသော သတ်ရုံနှင့်နေရာများတွင် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုမည့် အသားထုတ်လုပ်ခွင့် လိုင်စင် (ကျွဲ၊နွား၊သိုး၊ဆိတ်)ရွာသာကြီး၊ (ဝက်)ရွာသာကြီး၊ (ဝက်)ရွာမ၊(ကျွဲ၊နွား၊သိုး၊ဆိတ်)မွေးမြူရေးနှင့်မွေးမြူရေးထွက်ကုန်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်ရေးဇုန်၊လှိုင်သာယာ၊(သိုး-ဆိတ်)ရွေပြည်သာ၊ မြို့နယ်တွင်းအသားထုတ်လုပ်ခွင့် (ဒလမြို့နယ်/ကျွဲ၊နွား၊ဝက်)နှင့် (ဆိပ်ကြီးခနောင်တို မြို့နယ်/ကျွဲ၊နွား)လိုင်စင်တို့၏ အသားထုတ်လုပ်ခွင့် လိုင်စင်လျှောက်လွှာများကို တစ်စုံလျှင် (၃၀၀၀/-)နှုန်းဖြင့် (၃၁-၈-၂၀၁၈) ရက်နေ့မှစ၍ တိရစ္ဆာန်ဆေးကုနှင့်သားသတ်ရုံများဌာန (ရုံးချုပ်)၊(၁၂)ထပ်ခွဲ ရုံး၊ သတ္တမထပ်၊(၄၆)လမ်းနှင့် ဗိုလ်မြတ်ထွန်းလမ်းကြား၊ကုန်သည်လမ်း၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်တွင် ဝယ်ယူ၍ (၇-၉-၂၀၁၈)ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား ပြန်လည်တင်ပြလျှောက်ထားရမည်။
ရန်ကုန်မြို့တွင်း(၆)မြို့နယ်အတွင်း လမ်းမကြီးများနှင့် အမည်တပ်လမ်းများတွင် ၁-၁၀-၂၀၁၈ ရက်နေ့မှစတင်၍ ယာဉ်ရပ်နားခများ ပြန်လည်ကောက်ခံသွား မည်ဖြစ်ပါသည်။ ယာဉ်ရပ်နားခကောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်းကို လုပ်ငန်းရှင်များသို့ စျေးပြိုင် တင်ဒါစနစ်ဖြင့်ခေါ်ယူ၍ ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ရာ ကောက်ခံမည့်နှုန်းထားမှာ တစ်နာရီလျှင်(၂၀၀)ကျပ် နှုန်းဖြင့် နံနက် (၀၈:၀၀) နာရီမှ ညနေ (၁၈:၀၀)နာရီထိသာ ကောက်ခံမည်ဖြစ်ပြီး သတ်မှတ်ထားသောအချိန်၏ ပြင်ပအချိန် များကို လတ်တလောအခြေအနေတွင် အခမဲ့ ရပ်နားခွင့် ပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း မိဘပြည်သူများသို့ ကြိုတင်အသိပေး မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
8. Bids will be opened in the presence of the Bidders' representatives who choose to attend at 14:00 PM on 30th August 2018 at the office of Engineering Department (Water and Sanitation), Yangon City Development Committee, 12 1/2 Storey Office Building, No.390, Merchant Road, Botahtaung Township, Yangon, Myanmar.
Tel	:+ 959254017233
E-mail: ycdcws@gmail.com, thetlwin400@gmail.com
မြေငှားစာချုပ်(ဂရန်)သက်တမ်းတိုးဆောင်ရွက်ခြင်းအပေါ် နှစ်အလိုက်ဒဏ်ကြေးသတ်မှတ်မှုအခြေအနေ ၁၀-၃-၂၀၁၄ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ကော်မတီဝင်များအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း(၁၀/၂၀၁၄) ဆုံးဖြတ်ချက်အပိုဒ်(က/၄၇)အရမြေငှားစာချုပ်(ဂရန်)သက်တမ်းတိုးအမှုတွဲများတွင် ဂရန်သက်တမ်းပြတ်တောက်ပါက (၁)နှစ်လျှင် ၁ဝဝဝဝဝိ/-(ငွေကျပ်တစ်သိန်းတိတိ) ကောက်ခံရန် ဆုံးဖြတ်ထားမှုအားသိရှိနိုင်ပါရန် အသိပေးနှိုးဆော်အပ်ပါသည်။
၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်း ဆောက်လုပ်သည့်အဆောက် အအုံများကို ကြီးကြပ်ဆောက်လုပ်ရန်အတွက် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီက အင်ဂျင်နီယာလိုင်စင်များအား စိစစ်ထုတ်ပေးထားခဲ့ရာ အဆိုပါလိုင်စင်များသည် ၃၁.၃.၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည်ဖြစ်ပြီး၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧပြီလ(၁)ရက်နေ့မှစ၍ မြန်မာနိုင်ငံ အင်ဂျင်နီယာကောင်စီ၊ မြန်မာနိုင်ငံဗိသုကာကောင်စီများတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသော အင်ဂျင်နီယာ/ ဗိသုကာများဖြင့်သာ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်း ကြီးကြပ်ဆောက်လုပ် ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။
၂။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်း ကြီးကြပ်ဆောက်လုပ်ခွင့်ရရှိသည့် အင်ဂျင်နီယာ/ဗိသုကာများသည် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီတွင် မှတ်ပုံတင်ကြေးထပ်မံ ပေးဆောင်ရန် မလိုအပ်ကြောင်းနှင့် ကြီးကြပ်ဆောက်လုပ်ခွင့်ရှိသည့် အဆောက်အအုံ အမျိုးအစား၊ အဆောက်အအုံအမြင့်တို့ကိုလည်း သက်ဆိုင်ရာကောင်စီများ၏ သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြု မည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။
၃။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အပိုဒ်(၁)နှင့် အပိုဒ်(၂)ပါအချက်များကို ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ၏ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ လိုင်စင်ရယူထားသော အင်ဂျင်နီယာများ အနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာကောင်စီများနှင့် လိုအပ်သလို ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါရန် ဖြည့်စွက်ဖော်ပြ အပ်ပါသည်။
၂၀၁၈၊ (၆)လ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် အသားထုတ်လုပ်ခွင့် လိုင်စင်များ လျှောက်ထားနိုင်
၁။	၂၀၁၈ခုနှစ်၊ (၆)လ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် (၁-၄-၂၀၁၈မှ ၃၀-၉-၂၀၁၈)ရက်နေ့ထိ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ တိရစ္ဆာန်ဆေးကုနှင့် သားသတ်ရုံများဌာနက သတ်မှတ်ထားသော သတ်ရုံနှင့်နေရာများတွင် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုမည့် အသားထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင် (ကျွဲ၊ နွား၊ သိုး၊ ဆိတ်)ရွာသာကြီး၊ (ဝက်)ရွာသာကြီး၊ (ဝက်)ရွာမ၊ (ကျွဲ၊ နွား၊ သိုး၊ ဆိတ်)မွေးမြူရေးနှင့် မွေးမြူရေးထွက်ကုန်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်ရေးဇုန်၊ လှိုင်သာယာ၊ (သိုး၊ဆိတ်)ရွှေပြည်သာ၊ မြို့နယ်တွင်း အသားထုတ်လုပ်ခွင့်(ဒလမြို့နယ်/ကျွဲ၊ နွား၊ ဝက်) နှင့် ဆိပ်ကြီးခနေတိုမြို့နယ်/ ကျွဲ၊နွား) လိုင်စင်တို့၏ အသားထုတ်လုပ်ခွင့် လိုင်စင်လျှောက်လွှာများကို တစ်စုံလျှင် (၃၀၀၀ိ/-)နှုန်းဖြင့် (၂၇-၂.၂၀၁၈)ရက်နေ့မှစ၍ တိရစ္ဆာန်ဆေးကုနှင့် သားသတ်ရုံများဌာန(ရုံးချုပ်)၊ (၁၂)ထပ်ခွဲရုံး၊ သတ္တမထပ်၊ (၄၆)လမ်းနှင့် ဗိုလ်မြတ်ထွန်းလမ်းကြား၊ ကုန်သည်လမ်း၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်တွင် ဝယ်ယူ၍ (၉-၃-၂၀၁၈)ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား ပြန်လည်တင်ပြလျှောက်ထားရမည်။
ရန်ကုန်မြို့တော်နေ ပြည်သူများသို့ အသိပေးပန်ကြားချက်
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသည် ရန်ကုန်မြို့တော်နယ်နိမိတ်အတွင်း ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်စေရေးနှင့် သန့်ရှင်းသာယာလှပစေရေးတို့အတွက် အဖက်ဖက်မှ အဆင့်မြှင့်ဆောင်ရွက်ပေး လျက်ရှိရာ ရန်ကုန်မြို့တော်နယ်နိမိတ်အတွင်း ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်များနှင့်ပတ်သက်၍ယာယီဆိုင်းဘုတ်များ၊ LED ဆိုင်းဘုတ် များ၊ မြေစိုက်ဆိုင်းဘုတ်များ၊ Vinyl ကြော်ငြာများ၊ခြံစည်းရိုးနံရံကပ်ဆိုင်းဘုတ်များနှင့် နံရံဆေးခြယ် ဆိုင်းဘုတ် များအား သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ခွင့်ပြုဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
သို့ရာတွင် မြို့တော်နေပြည်သူအချို့မှာ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ ခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲ အဆောက်အဦးများ၊ဓါတ်တိုင်များ၊ခုံးကျော်တံတားများ၏ နေရာအချို့တွင် ကြော်ငြာများတပ်ဆင်ခြင်း၊ကပ်ခြင်း၊ ချိတ်ဆွဲခြင်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိရပါသည်။
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ဥပဒေ ပုဒ်မ ၆၁ အဆောက်အအုံဆိုင်ရာ တားမြစ်ချက်များ၊ ပုဒ်မခွဲ (ဍ)တွင် “မည်သူမျှ ကော်မတီ၏ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်စိုက်ထူခြင်း၊ တပ်ဆင်ခြင်း၊ကပ်ခြင်း၊ချိတ်ဆွဲခြင်း သို့မဟုတ် ရေးဆွဲခြင်း မပြုရ”ဟူ၍ ပြဌာန်းထားရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။
သို့ဖြစ်ပါ၍ အဆိုပါ ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်များ၊ စာရွက်များ ၊Vinyl များစိုက်ထူခြင်း၊ကပ်ခြင်း၊ ချိတ်ဆွဲခြင်း၊ ရေးဆွဲခြင်းများဆောင်ရွက်ရာ၌ ဥပဒေနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ကြပါရန်နှင့် လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိပါက ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးဥပဒေနှင့်အညီ ထိရောက်စွာ အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးနှိုးဆော်အပ်ပါသည်။
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုဖြင့် ဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်လုပ်ငန်းများ အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ လုပ်ကိုင်နိုင်ရေး အတွက် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများ၊ ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း လိုင်စင်ရကုမ္ပဏီများနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း၍ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှု လိုင်စင်ရကုမ္ပဏီအချို့သည် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီနယ်နိမိတ်အတွင်း Fiber Optic Cable နှင့် ဆက်စပ် ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာများ၊ Wifi ချိတ်ဆက်မှုကိရိယာများ တပ်ဆင်ချိတ်ဆွဲခြင်းနှင့် ဆက်သွယ်ရေးတိုင်များစိုက်ထူခြင်းတို့ကို တရားဝင် ခွင့်ပြုချက် ရယူခြင်းမရှိဘဲ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိရပါသည်။
ဆက်သွယ်ရေး ဥပဒေအခန်း(၁၃)၊ ပုဒ်မ(၄၁)အရ “သက်ဆိုင်ရာမြေနှင့် အဆောက်အအုံ ပိုင်ရှင် (သို့မဟုတ်) ယင်းမြေနှင့်အဆောက်အအုံ Right of Way ကို စီမံခန့်ခွဲခွင့်ရှိသူနှင့် ညှိနှိုင်း၍ ကာလသတ်မှတ်ချက် ပါဝင်သော နှစ်ဦးနှစ်ဖက် သဘောတူညီချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ခွင့်ရရှိသည့် နေရာတွင် ဆောင်ရွက်နိုင်သည်”ဟုပါရှိသည်နှင့်အညီသာ ဆောင်ရွက်ရန် ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ အသိပေးထားပြီးဖြစ်ပါသည်။
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ တရားဝင် ခွင့်ပြုချက်ရယူ­­­­ထားသော အဖွဲ့ အစည်းမှာ MPT နှင့် Eager Communication Group နှစ်ခုသာရှိပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီနယ်နိမိတ်အတွင်းတွင် တရားဝင်ခွင့်ပြုချက် ရယူထား ခြင်းမရှိဘဲ လုပ်ငန်း­­ဆောင်ရွက်ထားသော ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် (၃၁-၁၂-၂၀၁၇) ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသို့ တရားဝင်ခွင့်ပြုမိန့် လာရောက် လျှောက်ထားကြပါရန်နှင့် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း လာရောက်ဆက်သွယ်ခြင်းမရှိသော ကုမ္ပဏီများ မှ ဆောင်ရွက်ထားသည့် Fiber Optic Cable များ၊ ဆက်သွယ်ရေးတိုင်များနှင့် ဆက်စပ် ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာများ၊ Wifi ချိတ်ဆက်မှု ကိရိယာများအား ဖြုတ်သိမ်းသွားမည့်အပြင် တည်ဆဲဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့်အညီ အရေးယူ ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
ရန်ကုန်မြို့တော်နေပြည်သူများအနေဖြင့်လည်း တရားဝင်ခွင့်ပြုချက် ရယူထားခြင်းမရှိသော ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီများနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုကြပါရန် အသိပေးနှိုးဆော် အပ်ပါသည်။
၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ ဆောင်ရွက်သည့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရွှေပြည်သာမြို့နယ်စက်မှုလမ်းနှင့် ပိတောက်လမ်းထောင့်ရှိ ရွှေပြည်သာတန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာ စီမံကိန်းမှ တိုက်ခန်းမဲပေါက်သူများအားမူလစည်ကမ်းချက်တွင်ပါရှိသည့်အတိုင်း တိုက်ခန်းဖိုးငွေ လက်ငင်းပေးသွင်း၍ အခန်းလက်ရောက်ရယူရန် ၂၄-၃-၂၀၁၆ ရက်နေ့ မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာ နှင့် ကြေးမုံသတင်းစာတို့တွင်လည်းကောင်း ၊ ၂၂-၃-၂၀၁၆ ရက်နေ့တွင် မြို့တော်သတင်းစာတွင် လည်းကောင်း ထည့်သွင်းကြေညာပြီးဖြစ်ပါသည်။
၂။ တိုက်ခန်းမဲပေါက်သူများစာရင်းအား www.ycdc.gov.mm Website ၌ကြေညာ ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။
၃။ သို့သော် တိုက်ခန်းမဲပေါက်၍ ဝယ်ယူခွင့်ရရှိသူများအနေဖြင့် တိုက်ခန်းဖိုးငွေများအား ယနေ့အထိလာရောက်ပေးသွင်းခြင်းမရှိပါသဖြင့် (၁၅-၁၂-၂၀၁၇) ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ တိုက်ခန်းဖိုးငွေများလာရောက်ပေးသွင်းကြရန် အသိပေး အကြောင်းကြားပါသည်။
၄။ အထက်အပိုဒ်(၃)ပါ တိုက်ခန်းဖိုးငွေ ပေးသွင်းရမည့် သတ်မှတ်ရက်အထိ တိုက်ခန်းဖိုးငွေ များလာရောက်ပေးသွင်းခြင်းမရှိပါက တိုက်ခန်းဝယ်ယူခွင့်ရရှိသူများစာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ မှော်ဘီအုတ်စက်ရုံမှ ထုတ်လုပ်သော အရည် အသွေးမြင့်စံချိန်မီ ( 9" x 4" x 3" )၁၀ပေါက်စက်ကြီးအုတ်များကို စက်ရုံအထိုင်စျေး အုတ်တစ်ချပ် ၁၀၀ ကျပ်နှုန်းဖြင့် မည်သူမဆို လွတ်လပ်စွာ ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း	-	၀၉ ၇၈၄၅၅၄၉၃၃၊ ၀၉ ၃၀၁၀၀၇၇၀၊ ၀၉ ၇၉၈၃၈၀၄၁၄၊ ၀၉ ၇၉၈၂၆၁၀၉၉
၁။	ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး နယ်နိမိတ်အတွင်း ဆောက်လုပ်မည့် အဆောက်အအုံများ Pile ရိုက်ခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရာတွင် စည်းကမ်းတကျ ဆောင်ရွက်မှုရှိစေရန်၊ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အဆောက်အဦများ၊ လမ်းများ၊ ရေမြောင်းများ ပလက်ဖောင်းများ ထိခိုက်မှုမရှိအောင် ဆောင်ရွက်စေရန်နှင့် အဆိုပါ ဆောင်ရွက်ချက်များကို တာဝန်ယူ၊ တာဝန်ခံမှုရှိစေရန် အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းများ ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေး ပညာရှင်အဖွဲ့မှ ထောက်ခံချက် ပေးထားသည့် Pile ရိုက်ခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသော ကုမ္ပဏီ(၄၃)ခုအား လိုင်စင်ထုတ်ပေးခဲ့၍ ကြေညာခဲ့ပြီး ယခုထပ်မံ၍ ထောက်ခံချက်ရရှိသည့် အောက်ဖော်ပြပါ ကုမ္ပဏီ(၇)ခုအား လိုင်စင်ထုတ်ပေးထားပြီး ဖြစ်ပါသည်-
(က) Myanmar D & C Engineering Company No.E3B, Hlaing Yadanar Villa, Thazin St, Hlaing Township, Yangon.
E-mail: dinhnguyenpe@gmail.com, pyaephyokywe7@gmail.com.
(ခ) ရွှေအုတ်ခဲ ဆောက်လုပ်ရေး အမှတ်(၄၄)၊ ဆောင်းနှင်းသဇင်လမ်း၊ FMI City၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်။
(ဂ) CROWN ADVANCED CONSTRUCTION COMPANY LIMITED အမှတ်(၄၅)၊ ဦးထွန်းညိုလမ်း၊ စက်မှုဇုံ(၃)၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်။
(ဃ) BOSTOM Co., Ltd. တိုက်(ဘီ)၊အခန်း(၁၀၀၅)၊ ရွှေဟင်္သာကွန်ဒို၊ ရွှေဟင်္သာလမ်းနှင့် ပြည်လမ်းထောင့်၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်။
(င) Asia Express (YGN) Bored & Press Piling Co., Ltd. အမှတ်(၂၇၇)၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း နှင့် ၃၈လမ်းထောင့်၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်။
01-291106, 09-8601823, 09-795326942
(စ) DTCN HOLDING (MYANMAR) CO., LTD. အမှတ်(၃၂)၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး(၅)လမ်း၊ အမှုထမ်းရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မြို့နယ်။
(ဆ) LUCKY CONCRETE PRECAST PRODUCT MANUFACTURING CO., LTD. No.217/222, U Tun Nyo Street, Industry Zone(1), Dagon Seikan Township.
၂။	(၁.၁.၂၀၁၆)ရက်နေ့မှစ၍ အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ခွင့် တင်ပြရာတွင် ဤကော်မတီမှ အသိအမှတ်ပြု Pile ရိုက်ခြင်း လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရယူထားသည့် ကုမ္ပဏီများကိုသာ လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
၃။	သို့ဖြစ်ပါ၍ အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ခွင့် တင်ပြမည့်သူများ သိရှိနိုင်ပါရန်နှင့် Pile ရိုက်ခြင်းလုပ်ငန်း လိုင်စင်လျှောက်ထားလိုသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားပိုင် ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် အင်ဂျင်နီယာဌာန (အဆောက်အအုံ)သို့ အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းများကြီးကြပ် စစ်ဆေးရေး ပညာရှင်အဖွဲ့၏ ထောက်ခံချက် ပူးတွဲတင်ပြ၍ လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
၄။	အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)၊ (၁၀)ထပ်ရုံးသို့ ရုံးချိန်အတွင်းလာရောက်၍ ကိုယ်တိုင် သော်လည်းကောင်း၊ ဖုန်း-၀၁-၃၇၄၀၇၇၊ ၀၁-၃၇၄၀၅၅ သို့လည်းကောင်း ဆက်သွယ် စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
The Republic of the Union of Myanmar Yangon Region Government Yangon City Development Committee Invitation for Bids
Name of Project:	Installation, Maintenance and Operation of Street Furniture Items in the City of Yangon
1.	YCDC invites bids from the interested bidders for the Installation , Maintenance and Operation of Street Furniture Items and the grant of an exclusive right to advertise on the street furniture items in the City of Yangon.
2.	The interested bidders may obtain further information about this invitation for bids from the following office during office hours: Engineering Department (Road and Bridge), Yangon City Development Committee, City Hall , Yangon. Telephone o. 09-43193314
3.	A complete set of bidding Documents may be purchased upon submission ofawritten application to the above address and upon payment ofanon-refundable fee of Kyat 50000 (fifty thousand kyats only) to YCDC.
4.	Bids documents shall be delivered in person to the above office on or before 15 hrs. on 17th February 2017. Electronic bidding will not be permitted. Any bid submitted after the designated date and time will be rejected.
5.	All Bids must be accompanied by bid security (tender guarantee) in the amount of Kyat 300,000,000 or USD 250000 issued by local bank as described in the bidding documents.
6.	Bids will be opened inasession to be held at the office of Yangon City Development Committee in the presence of representatives of the bidders on the date and time as may be notified to the bidders.
၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ကြီးကြပ်မှုဖြင့် အောင်မြင်တိုးတက်ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက်မှဆောင်ရွက်သည့် ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ (၄၂)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်မင်းရောင်လမ်းနှင့်မင်းရဲကျော်စွာလမ်းထောင့်၊ ဗိုလ်မင်းရောင်တန်ဖိုးမျှတအိမ်ရာစီမံကိန်းရှိ တိုက်ခန်းများအား ၂ဝ၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ၊ ပထမပတ်မှစ၍ တိုက်ခန်းဝယ်ယူထားသူများထံသို့ အခန်းအပ်နှံပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
၂။ သို့ဖြစ်ပါ၍ တိုက်ခန်းဝယ်ယူခွင့်ရရှိသူများမှ တိုက်ခန်းတန်ဖိုးငွေအကျေပေးသွင်းပြီးသူများအား ဌာနမှ အဆောက်အအုံနေထိုင်ခွင့်စာချုပ်များ ချုပ်ဆိုထုတ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသဖြင့် အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)သို့ လာရောက်ဆက်သွယ်ပါရန်နှင့် တိုက်ခန်းဖိုးငွေပေးချေရန် ကျန်သူများအနေဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်သွားရန် အသိပေးအပ်ပါသည်-
(က) တိုက်ခန်းဖိုးငွေပေးချေရန် ကျန်သူများအနေဖြင့် ပေးချေရန်ကျန်ငွေများအားပေးသွင်းရန်။
(ခ) ဘဏ်ချေးငွေစနစ်ဖြင့် ဝယ်ယူထားသူများအနေဖြင့် ဘဏ်သို့ပေးသွင်းရမည့်ငွေများအား ပေးသွင်းရန်နှင့် ဘဏ်ထောက်ခံချက်နှင့်အတူ တင်ပြဆောင်ရွက်ရန်။
YANGON CITY WATER SUPPLY IMPROVEMENT PROJECT
The Water and Sanitation Department of the Yangon City Development Committee (YCDC) is upgrading its potable water supply system by constructinganew water treatment plant and implementing disinfection facilities at existing water supply facilities throughout the city.
YCDC is exploringanumber of disinfection options one of which is the use of liquid sodium hypochlorite. There is no sodium hypochlorite manufacturing facility in Myanmar. YCDC would have to source the required product from international suppliers and determine how to transport and arrange deliveries to water supply facilities in Yangon City. Before proceeding with an international competitive bid, YCDC would like to confirm technical and logistic requirements in order to develop qualification criteria and tender documents.
General requirements are expected to be as follows:
Liquid sodium hypochlorite (NaOCl):12.5 percent available chlorine, capable of meeting American Water Works Standard B-300-99 or equivalent standard for potable water supply.
TSS <= 0.15 % by weight, free alkali as NaOH by weight 0.1% to 1.0%.
Chlorate concentration less than 2.5 g/L upon delivery.
The supplier shall be responsible for transferring the liquid sodium hypochlorite into storage tanks at the delivery sites.
Estimated annual requirement: - 8,760 m3
Delivery amount and schedule: - 120 m3 every5days
Delivery locations in Yangon:
23 m3/5days
Nyaunghnapin WTP No.1
26 m3/5days
Nyaunghnapin WTP No.2
Hlawga No.1 Pump Station
29 m3/5days
Yegu Pump Station
3 x 20 m3
16 m3/5days
Delivery quantities and schedules may vary depending on actual water production and demands. Liquid sodium hypochlorite consumption at each location is an estimate only and YCDC would not be bound by these amounts in its contract with the supplier.
Interested suppliers should provide the following information:
Manufacturers name and country of origin. Location of production facility.
Manufacturing method and applicable standards.
Experience with bulk supply and delivery of liquid sodium hypochlorite for potable water supply or wastewater treatment.
Typical commercial terms used on similar supply and delivery contracts.
Method for placing an order: fixed schedule and fixed amount vs delivery ofavarying amount within 72 hours after telephone notification by YCDC.
Product specifications: available chlorine g/l (minimum and maximum).
Manufacturer’s certified laboratory report showing: total suspended solids, excess sodium hydroxide content in g/l, iron mg/l, copper mg/l, and nickel mg/l.
Proposed shipping method to Yangon: by land (containers on flatbed truck vs tanker truck) or containers by air, capacity of tanker trucks or containers, number of trucks and containers. Proposed Incoterms for shipping e.g. C.I.P.
Description of customs clearance procedures and timeframes for land transportation.
Description of tanker truck unloading procedures and equipment for unloading directly into the liquid storage tanks and feeding facilities.
Description of container delivery procedures and unloading equipment: indicate the size and number of containers per truck. Indicate how the containers will be unloaded and how they should be stored by YCDC. Describe how the empty containers will be managed by the supplier (loading and transporting back to the manufacturer or toarecycling facility).
Estimated shipment delivery times from the time the product is manufactured to delivery at site including any time spent in clearing customs.
Methods for acceptance sampling and testing prior to unloading.
Description of delivery safety equipment, safety training and emergency response plans for spills and accidents.
Availability of staff for engineering and technical assistance with the application of its product, and disposal and handing of residues and sludge produced by the application of liquid sodium hypochlorite.
This isarequest for information only and no contract award will be made asaresult of this process.
YCDC will proceed with an International Competitive Bid for the procurement of goods fora1 year contract when there is adequate information to do so. It is expected that hypochlorination facilities would be ready to start operations in January 2019.
Further information can be obtained at the address below during office hours from Monday to Friday between 09:30 am to 04:30pm.
Information should be delivered inawritten form to the address below in person, by mail or email by October 15 2016 at 12 noon Yangon time.
၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်း ဆောက်လုပ်မည့် အဆောက်အအုံများ Pile ရိုက်ခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရာတွင် စည်းကမ်းတကျဆောင်ရွက်မှုရှိစေရန်၊ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အဆောက်အဦများ၊ လမ်းများ၊ ရေမြောင်းများ ပလက်ဖောင်းများ ထိခိုက်မှုမရှိအောင် ဆောင်ရွက်စေရန်နှင့် အဆိုပါဆောင်ရွက်ချက်များကို တာဝန်ယူ၊ တာဝန်ခံမှုရှိစေရန် အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံတည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းများ ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးပညာရှင်အဖွဲ့မှ ထောက်ခံချက်ပေးထားသည့် Pile ရိုက်ခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသော ကုမ္ပဏီ(၂၅)ခုအား လိုင်စင်ထုတ်ပေးခဲ့၍ ကြေညာခဲ့ပြီး ယခုထပ်မံ၍ထောက်ခံချက်ရရှိသည့် အောက်ဖော်ပြပါကုမ္ပဏီ(၁၈)ခုအား လိုင်စင်ထုတ်ပေးထားပြီးဖြစ်ပါသည်-
အမှတ်(၁၂)၊ (၄)လွှာ၊ ဖျာပုံလမ်း၊ကျွန်းတောအလယ်ရပ်ကွက်၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်။ 01-514454, 09-5020218
အမှတ်(၆၀၈/ဘီ၊ ၆၀၉/အေ)၊ ယုဇနတာဝါ၊ ရွှေဂုံတိုင်။ 01-558294,01- 558321,01-555269, E-mail:ahyoneoo@myanmar.com.mm, ahyoneoo1985@gmail.com
(ဂ) Myanmar Zhi De GeotecHnical
ENGINEERING Services Co.,Ltd. အမှတ်(၂၂/အေ)၊ ရွာမကျောင်းလမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်။ 09-43194928
(ဃ) Myat Mi Ba Company Limited.
အမှတ်(၁၁၁)၊ ရန်ကုန်-အင်းစိန်လမ်းမကြီး၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်။ 95-1-2305385, 516212, 682710,706883, 09-5124590, E-mail:headoffice@myatmiba.com
Capital Leasing Ltd. အမှတ်(၄၀၃/အေ)၊ C(8)၊ ယောမင်းကြီးလမ်း၊ ယောမင်းကြီးရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့နယ်။ 09-977921662
Delight Piling Co.,Ltd.
အမှတ်(၀၀၈)၊ (ဘီ)ဘလောက်၊ နှင်းဆီလမ်း၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ Highway Complex, ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ 01-523836, 01-532028, E-mail:info@delightengg.com, delightconstruction2009@gmail.com.
(ဆ) Taw Win Family Construction Co.,Ltd.
အမှတ်(၄၅)၊တော်ဝင်စင်တာ၊ပြည်လမ်း၊ ပြည်အနောက်ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့နယ်. 01-8600034,01-8600035,01-8600036,01-8600037 ,E-mail: tawwinfamily09@gmail.com
GREAT MYANMAR SERVICES
အမှတ်(၄၆၉)၊မန္တလေးလမ်း၊စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)မြို့နယ် 09-5157878,09-73051898, 09-794116313
GEO FOUNDATIONS & CONSTRUCTION CO.,LTD.
အမှတ်(၁၉၂/အေ)၊သစ္စာလမ်း၊(၁၂ )ရပ်ကွက်၊ရန်ကင်းမြို့နယ်, 09-440472526,09-421011615,01-2336387
(ည) Mate Swe Taw Concrete Pole, Construction & Engineering Co.,Ltd.
အမှတ်(၇၄)၊တပင်ရွှေထီးလမ်း၊(၁)ရပ်ကွက်၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ 01-686784, 09-5129282, 09-5133280
(ဋ) GEOLAB(MYANMAR) CO.,LTD.
အမှတ်(၄၁၃/၄၁၄)၊အောင်သစ္စာလမ်း၊ (၄၈)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း) မြို့နယ်။ 5077153, 09-8625068, 09-5003281 . E-mail: csc1999@gmail.com, geolab.myanmar@gmail.com
(ဌ) GD Myanmar Co.,Ltd.
အမှတ်(၃၂)၊ပိတောက်ရိပ်သာ(၁)လမ်း၊ မင်္ဂလာဒုံဥယျာဉ်မြို့တော်၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် 09-254233334 E-mail: gdmyanmar.co@gmail.com
Myanmar Zhong Fei Company Limited
အမှတ်(၁/၈)၊ဓမ္မာရုံလမ်း၊ဘောက်ထော်ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမြို့နယ် , 09-780509511, 09-250434558, 09-250980869, 09453403524
(ဎ) CJ PILING (MYANMAR) CO.,LTD.
အမှတ်(၅၇-၅၈)၊ အခန်း(၄၀၂)၊ခေမာသီလမ်း၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်။
09-420093994,09-5114875, E-mail: zawaung238@gmail.com, lsdg172@gmail.com
(ဏ) Dragon Power Engineering Co.,Ltd.
အမှတ်(၂၀၅)၊အနော်ရထာလမ်း၊ လှိုင်သာယာစက်မှုဇုန်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်။ 01-9648086,09-428024002, 09-5019469, E-mail: kyawswar.min@umgroups.com
(တ) K B G Piling & Construction Co.,Ltd.
အမှတ်(၁၀၁၈)၊သီရိရိပ်သာကွန်ဒို၊ (၉)မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်။ 09-420119207,09-425284771
(ထ) Tek Bumi Co.,Ltd.
အမှတ်(၂၁၂/၂၁၅)၊ Ground Floor စံပယ်မာဃလမ်း၊ ဟံသာရိပ်မွန်အိမ်ရာ၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်။ 09-5153441, 01-512695
(ဒ) Asia Geotechnique International Limited
အမှတ်(၄၃/W)၊ သီရိမွန်(၈)လမ်း၊ သီရိမွန်အိမ်ရာ၊ (၁၅)ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်။ 01-681771, 01-681863, 09-797719672, 09-973078612
၂။ (၁.၁.၂၀၁၆)ရက်နေ့မှစ၍ အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ခွင့် တင်ပြရာတွင် ဤကော်မတီမှ အသိအမှတ်ပြု Pile ရိုက်ခြင်း လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရယူထားသည့် ကုမ္ပဏီများကိုသာလက်ခံဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
၃။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ခွင့်တင်ပြမည့်သူများ သိရှိနိုင်ပါရန်နှင့် Pile ရိုက်ခြင်းလုပ်ငန်း လိုင်စင်လျှောက်ထားလိုသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားပိုင်ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် အင်ဂျင်နီယာဌာန (အဆောက်အအုံ)သို့ အထပ်မြင့် အဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းများကြီးကြပ် စစ်ဆေးရေးပညာရှင်အဖွဲ့၏ ထောက်ခံချက်ပူးတွဲတင်ပြ၍ လျှောက်ထား နိုင်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
၄။	အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)၊ (၁၀)ထပ်ရုံး သို့ ရုံးချိန်အတွင်းလာရောက်၍ ကိုယ်တိုင်သော်လည်းကောင်း၊ ဖုန်း-၀၁-၃၇၄၀၇၇၊ ၀၁-၃၇၄၀၅၅ သို့လည်းကောင်း ဆက်သွယ် စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
The Government of the Republic of the Union of Myanmar Yangon City Development Committee
1. The Government of the Republic of the Union of Myanmar has receivedaLoan from Japan International Cooperation Agency toward the cost of the Greater Yangon Water Supply Improvement Project. It is intended that part of the proceeds of this Loan will be applied to eligible payments under the contract resulting from the bidding for which this prequalification is conducted.
2. The Head of Department, Engineering Department (Water and Sanitation), Yangon City Development Committee intends to prequalify contractors and/or firms for:
- Supply of domestic water meters with approx. 50,000 nos.
- Supply of bulk water meters with approx.60 nos.
3. It is expected that Invitation for Bids will be made in October 2016.
5. Interested eligible Applicants may obtain further information from and inspect the Prequalification Documents at the office of Head of Department, Engineering Department (Water and Sanitation), Yangon City Development Committee from 9:30 a.m. to 4:30 p.m.
6. A complete set of the Prequalification Documents may be purchased by interested Applicant(s) from 17 May to 31 May 2016 on the submission ofawritten Application to the address below and upon payment ofanon-refundable fee of MMK 15,000.
7. Applications for prequalification should be submitted in sealed envelopes, delivered to the address below by 12:00 noon - July 20, 2016, and be clearly marked “Application to Prequalify for Greater Yangon Water Supply Improvement Project Contract Package No. ICB-05”.
- Construction of distribution main and service pipeline with approx. 300 km in length in distribution zone7& 8.
- Construction of 60 district metering facilities including installation of district meters procured under contract ICB-05.
- Installation of service connections including 50,000 water meters procured under contract ICB-05.
7. Applications for prequalification should be submitted in sealed envelopes, delivered to the address below by 12:00 noon - July 20, 2016, and be clearly marked “Application to Prequalify for Greater Yangon Water Supply Improvement Project Contract Package No. ICB-04”.
IFP No.: PQ-ICB-03
Construction ofa700mm diameter treated water transmission pipeline below the Bago River using tunneling method.
Crossing length: approx. 820m.
Tunnel internal diameter: ≥ 1,000 mm.
Treated water transmission pipeline: internal diameter ≥ 700 mm
Shafts: depth ≥32m, diameter ≥5 m
7. Applications for prequalification should be submitted in sealed envelopes, delivered to the address below by 12:00 noon - July 20, 2016, and be clearly marked “Application to Prequalify for Greater Yangon Water Supply Improvement Project Contract Package No. ICB-03”.
Treated water transmission pipeline with approx. 21 km in length from the transmission pumping station at Lagunbyin WTP to service reservoirsSR7 and SR8.
Treated water transmission pipeline with approx. 26 km in length from the transmission pumping station located at service reservoir SR8 to Thilawa SEZ.
7. Applications for prequalification should be submitted in sealed envelopes, delivered to the address below by 12:00 noon - July 12, 2016, and be clearly marked “Application to Prequalify for Greater Yangon Water Supply Improvement Project Contract Package No. ICB-02”.
The construction of an administration building at the Lagunbyin Water Treatment Plant including the procurement and installation of laboratory equipment.
The procurement and installation ofaSCADA system including sensors for the Lagunbyin WTP and the transmission and distribution system.
Construction of disinfection facilities at4locations.
The construction ofatreated water transmission pumping station at the Lagunbyin Water Treatment Plant (7,900 m3/hr) including the procurement and installation of pumps.
The construction of two reinforced concrete service reservoirs: SR7=21,000 m3 and SR8=28,000 m3.
The construction ofadistribution pumping station at SR7 including procurement and installation of distribution pumps (5,280 m3/hr)
The construction ofadistribution and transmission pumping station at SR8 including procurement and installation of distribution pumps (5,280 m3/hr) and transmission pumps to serve the Thilawa SEZ (1,750 m3/hr).
7. Applications for prequalification should be submitted in sealed envelopes, delivered to the address below by 12:00 noon - July 12, 2016, and be clearly marked “Application to Prequalify for Greater Yangon Water Supply Improvement Project Contract Package No. ICB-01”.
၁။	ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်း ဤဌာန၏ ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် ဆောက်လုပ်ပြီးစီးလျက်ရှိသည့် အချို့သော ကန်ထရိုက်တိုက်နှင့် ကိုယ်ပိုင်အဆောက်အအုံများသည် အကြောင်းအမျိုးမျိုးဖြင့် အဆောက်အအုံပြီးစီးကြောင်း လက်မှတ်(BCC)လျှောက်ထားရယူခြင်းမရှိဘဲ အဆောက်အအုံများတွင် နေထိုင်အသုံးပြုလျက်ရှိသဖြင့် ဤဌာနမှ စိစစ် အရေးယူရလျက်ရှိပါသည်။
၂။	၂ဝ၁၃ ခုနှစ် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၆၁။(င)တွင် မည်သူမျှဆောက်လုပ်ပြီးသော အဆောက်အအုံတစ်ခုတွင်ဖြစ်စေ၊ ယင်းအဆောက်အအုံ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုတွင်ဖြစ်စေ၊ ကော်မတီ၏ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ဝင်ရောက်နေထိုင်ခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်းမပြုရ ဟု ပြဌာန်းထားပါသည်။
၃။	အဆောက်အအုံပြီးစီးကြောင်းလက်မှတ်(BCC)လျှောက်ထားရယူခြင်းမရှိဘဲ နေထိုင်အသုံးပြုလျက်ရှိသည့် ကန်ထရိုက်တိုက်နှင့် ကိုယ်ပိုင်အဆောက်အအုံများ၏ လိုင်စင်ကန်ထရိုက်တာများနှင့် မြေရှင်များအနေဖြင့် ၃၁.၃.၂ဝ၁၆ ရက်နေ့မတိုင်မီ ဤဌာနသို့ အဆောက်အအုံပြီးစီးကြောင်း လက်မှတ်(BCC) လျှောက်ထားရယူကြရန် သတင်းစာများတွင် အသိပေးကြေညာခဲ့ခြင်းကြောင့် ဤဌာနသို့ အဆောက်အအုံပြီးစီးကြောင်း လက်မှတ်(BCC) လျှောက်ထားလာသည့် အမှုတွဲများအား ဖြေလျော့၍ စိစစ်ခွင့်ပြုပေးလျက်ရှိသည့်အပြင် သတ်မှတ်ရက်ပြည့်သော်လည်း ဆက်လက်လျှောက်ထားနေဆဲ အဆောက်အအုံများ ရှိနေသေးကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိရပါသည်။
၄။	သို့ဖြစ်ပါ၍ အဆောက်အအုံပြီးစီးကြောင်းလက်မှတ်(BCC)များအား ၃ဝ.၆.၂ဝ၁၆ ရက်နေ့အထိ ရက်တိုး၍ ခွင့်ပြုသွားမည်ဖြစ်ပြီး လျှောက်ထားလာပါက ဖြေလျော့မှုဖြင့် စိစစ်ခွင့်ပြုပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း လျှောက်ထားခြင်းမရှိပါက သက်ဆိုင်ရာလိုင်စင်ကန်ထရိုက်တာ၊ မြေရှင်နှင့် နေထိုင်သူများကို တည်ဆဲဥပဒေနှင့်အညီ အရေးယူဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ထပ်မံအသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။
၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့်မြေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာနမှ မြေစီမံမှုလုပ်ငန်း များအား e-applicationဖြင့် Online မှ မြို့နယ်(၁၃)မြို့နယ်အား ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိရာ မြေစီမံမှုလျှောက်ထား မည့် ပြည်သူလူထုများအနေဖြင့် ၃ဝ-၃-၂ဝ၁၆ ရက်နေ့မှစ၍ Online ဖြင့်လျှောက်ထားခြင်းများကို (ရွှေပြည်သာ၊ လှိုင်သာယာ၊ မဂင်္လာဒုံ၊ မရမ်းကုန်း၊ အင်းစိန်)မြို့နယ်များအား ထပ်တိုးဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
၂။ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့်မြေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာနတွင် အောက်ပါ မြို့နယ်များအား မြေစီမံခန့်ခွဲမှုများကို ၁-၄-၂ဝ၁၆ ရက်နေ့မှစ၍ မြို့တော်ခန်းမရှိ Online Service ဌာနတွင် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းမပြုတော့ဘဲ Internet အသုံးပြုနိုင်လျှင် မိမိနေအိမ်မှလည်းကောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်စည်ပင် သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးများမှလည်းကောင်း လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်-
၃။ ထိုသို့လျှောက်ထားမည်ဆိုပါက အောက်ပါအတိုင်း လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါသည်-
(က) Browser Y.C.D.C ၏ Web Site (www.ycdc.gov.mm) သို့ ဝင်ရောက်ပါ။
(ခ) Online ဝန်ဆောင်မှုများမှ အိမ်ခြံမြေဂရန် ကိုရွေးပါ။
(ဂ) လျှောက်လွှာများမှ မြေပုံကူး/လျှောက်ထားလိုသည့်ကိစ္စ ကိုရွေးပါ။
(ဃ) မြေပုံကူးလျှောက်ထားခြင်းလျှောက်လွှာပုံစံအား အချက်အလက်များဖြည့်စွက်ပါ။ (အနီရောင် ပြထားသော အချက်အလက်များကို မဖြစ်မနေ မှန်ကန်စွာ ဖြည့်စွက်ရပါမည်။)
(င) e-mail လိပ်စာရှိပါက ဖြည့်စွက်ပေးရပါမည်။
(စ) လိုအပ်သည့် စာရွက်စာတမ်းများကို Select File ကိုနှိပ်၍ Scan ဖတ်ပြီး Attach ဖိုင်တွဲပို့ ပေးရပါမည်။
(ဆ) လျှောက်ထားပါသည် ကိုနှိပ်ရပါမည်။
(ဇ) လျှောက်လွှာလက်ခံကြောင်း ဌာနကပြန်ကြားသည့် Token အမှတ်---------- ကိုမှတ်သား ထားရပါမည်။
(စျ) e-mail လိပ်စာဖော်ပြထားပါလျှင် အကြောင်းကြားခြင်းများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ (SMS) ပေးပို့ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
၄။ လျှောက်လွှာလက်ခံကြောင်း အပိုဒ်(၂)(ဇ)ပါ Token အမှတ် လက်ခံရရှိသည်ဆိုပါက လျှောက်ထားမှု အမျိုးအစားအလိုက် မူရင်းနှင့်တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးနိုင်ရန် Online မှပင်အကြောင်းကြားခေါ်ယူပါမည်။ မြို့တော်ခန်းမ သို့မပျက်မကွက်လာရောက်ပြသအစစ်ဆေးခံရပါမည်။ (ပထမအကြိမ်လာရောက်ခြင်း)
၅။စစ်ဆေးပြီးပါက ဝန်ဆောင်ခပေးသွင်းရန်အတွက် မြို့တော်ခန်းမတွင်တစ်ပါတည်း ပေးသွင်းနိုင်ပါ သည်။ တစ်ပါတည်းမပေးသွင်းနိုင်ပါက လျှောက်ထားသည့် မြို့နယ်ရှိ နီးစပ်ရာမြို့တော်စည်ပင်ဘဏ်ခွဲများ (သို့) ဧရာဝတီဘဏ်ခွဲများတွင် တိုက်ရိုက်ပေးသွင်းနိုင်ရေး ငွေသွင်းချလံအမှတ်ကို Online မှအကြောင်းကြား ပါမည်။ အဆိုပါနီးစပ်ရာဘဏ်များသို့ သွားရောက်ပြီး ၎င်းငွေသွင်းချလံအမှတ်ကို ပြသ၍ ငွေပေးသွင်းရန် ဖြစ်ပါသည်။
၆။ ဌာန၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရ စိစစ်ဆောင်ရွက်ပြီး သတင်းစာကြော်ငြာရန်လိုအပ်သည့် လျှောက်ထား မှုများအတွက် ဌာနမှ တာဝန်ယူကြော်ငြာသည့် သတင်းစာကြော်ငြာခငွေအား ဌာနသို့လာရောက် ပေးသွင်းရမည် ဖြစ်ပါသည်။ (ဒုတိယအကြိမ်လာရောက်ခြင်း)
၇။ သီးခြား သတင်းစာကြော်ငြာရန် လိုအပ်ပါက ဌာနမှပေးသည့် ကြော်ငြာပုံစံဖြင့် သက်ဆိုင်ရာသတင်းစာ တိုက်များတွင် ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင် ငွေသွင်းသတင်းစာကြော်ငြာထည့်သွင်းဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပြီး သတင်းစာ ပါပြီးနောက်ရက်တွင် အဆိုပါသတင်းစာများအား ဌာနသို့ မပျက်မကွက်ပြန်လည်ပေးပို့ ပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။(ဒုတိယနှင့်တတိယအကြိမ်လာရောက်ခြင်း)
၈။Online ဖြင့် မြေစီမံမှုလျှောက်ထားခြင်းများအပေါ် ဌာနမှစိစစ်ခွင့်ပြုပြီးပါက လျှောက်ထားသည့် မြေပုံမြေရာဇဝင်အား ဌာနတွင်ကိုယ်တိုင်ထုတ်ယူခြင်း(သို့မဟုတ်) လျှောက်ထားစဉ် Token အမှတ်ဖြင့် သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးများ၌လည်း ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။ (မြေပုံ/မြေရာဇဝင်များကို မိမိအိမ်မှ Printer ဖြင့် ထုတ်ယူခွင့်မရှိဘဲ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးများရှိ ဌာနက သတ်မှတ် ထုတ်ပေးထားသော စာရွက်ဖြင့်သာ ခွင့်ပြုထားသည့် မြေပုံ/မြေရာဇဝင်ကို ထုတ်ယူပြီး စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ရုံး တွင် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။) (မှတ်ချက်။ မိမိအိမ်တွင် Internet အသုံးပြုနိုင်ပြီး Printer ရှိ၍ထုတ်ယူပါက မှတ်ပုံတင်စာချုပ်ရုံးက ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။)
၉။ ဂရန်သစ်လျှောက်ထားခြင်းများတွင် ဌာနမှ ခွင့်ပြုပြီး၊ ဝန်ဆောင်ခငွေပေးသွင်းပြီးသည့်အချိန်တွင် ဂရန်စာအုပ်၌ အငှားချထားခြင်းခံရသူ ကိုယ်တိုင်လက်မှတ်ရေးထိုး ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်သဖြင့် မြို့တော်ခန်းမသို့ လာရောက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
၁၀။ အထက်အပိုဒ်(၂)ပါမြို့နယ်များမှအပ စည်ပင်သာယာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ ကျန်မြို့နယ်များဖြစ်သည့် '' သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ အလုံမြို့နယ်၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ လသာမြို့နယ်၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်၊ တာမွေမြို့နယ်၊ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ကမာရွတ်မြို့နယ် ''တို့သည် လက်ရှိအတိုင်း မြို့တော်ခန်းမရှိ OSS ခန်းမတွင် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါကြောင်းအသိပေး အပ်ပါသည်။
မှတ်ချက်။ ထိုသို့အဆင့်ဆင့်ဆောင်ရွက်မှုများတွင် မိမိလျှောက်ထားမှုအခြေအနေသည် မည်သည့် အဆင့်ရောက်ရှိနေပြီကို သိရှိရန်နှင့် ဌာနမှအကြောင်းကြားခြင်းများကို သိရှိရန်အတွက် လျှောက်လွှာ အခြေအနေ ပြစာရင်းမှ လျှောက်ထားသည့် လျှောက်လွှာအမျိုးအစား၊ မှတ်ပုံတင်အမှတ်၊ Tokenအမှတ် တို့ကို ဖြည့်စွက်ပြီး အချိန်နှင့်တပြေးညီ ကြည့်ရှုစစ်ဆေး နိုင်ပါသည်။
၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်း ဤဌာန၏ ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့်ဆောက်လုပ်ပြီးစီးလျက်ရှိသည့် အချို့သော ကန်ထရိုက်တိုက်နှင့် ကိုယ်ပိုင်အဆောက်အအုံများသည် အကြောင်းအမျိုးမျိုးဖြင့် အဆောက်အအုံပြီးစီးကြောင်း လက်မှတ် (BCC) လျှောက်ထားရယူခြင်းမရှိဘဲ အဆောက်အအုံများတွင် နေထိုင်အသုံးပြုလျက်ရှိသဖြင့် ဤဌာနမှ စိစစ် အရေးယူရလျက်ရှိပါသည်။
၂။ ၂ဝ၁၃ ခုနှစ် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၆၁။(င)တွင် မည်သူမျှဆောက်လုပ်ပြီးသော အဆောက်အအုံတစ်ခုတွင်ဖြစ်စေ၊ ယင်းအဆောက်အအုံ၏ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုတွင်ဖြစ်စေ၊ ကော်မတီ၏ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ဝင်ရောက်နေထိုင်ခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်းမပြုရ ဟု ပြဌာန်းထားပါသည်။
၃။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အဆောက်အအုံပြီးစီးကြောင်းလက်မှတ်(BCC)လျှောက်ထားရယူခြင်းမရှိဘဲ နေထိုင် အသုံးပြုလျက်ရှိသည့် ကန်ထရိုက်တိုက်နှင့် ကိုယ်ပိုင်အဆောက်အအုံများ၏ လိုင်စင်ကန်ထရိုက်တာ များနှင့် မြေရှင်များအနေဖြင့် ၃၁.၃.၂ဝ၁၆ ရက်နေ့မတိုင်မီ ဤဌာနသို့ အဆောက်အအုံပြီးစီးကြောင်း လက်မှတ် (BCC)လျှောက်ထားရယူကြရန် အသိပေးအပ်ပါသည်။
၄။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း လျှောက်ထားပါက ဖြေလျော့မှုဖြင့် စိစစ်ခွင့်ပြုပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် သတ်မှတ်ရက် အတွင်း လျှောက်ထားခြင်းမရှိပါက သက်ဆိုင်ရာလိုင်စင်ကန်ထရိုက်တာ၊ မြေရှင်နှင့် နေထိုင်သူများကို တည်ဆဲဥပဒေနှင့်အညီ အရေးယူဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။
၁။	ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်း ဆောက်လုပ်မည့် အဆောက်အအုံများအတွက် မြေသားစမ်းသပ်မှု (Soil Test) လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် မြေသားစမ်းသပ်ခြင်း နှင့်ပတ်သက်၍ ပိုမိုတိကျသော ရလဒ်များ ရရှိလာစေပြီး တင်ပြချက်များအပေါ်တွင် တာဝန်ယူ၊ တာဝန်ခံမှု ရှိစေရန်အတွက် အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းများကြီးကြပ် စစ်ဆေးရေးပညာရှင်အဖွဲ့မှ ထောက်ခံချက်ပေးထားသည့် မြေသားစမ်းသပ်မှု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသော ကုမ္ပဏီ(၁၆) ခုအား လိုင်စင်ထုတ်ပေးထားပြီးဖြစ်ပါသည်-
(က) Mya Yar Pin Engineering & Consulting Group
အမှတ်(၂)၊ မြောင်းမြလမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်။
01-524163, 01-523855, 09-73216969, 09-8598795
CECC (Civil Engineer's Construction Co.Operative Limited.)
အမှတ်(၅၈/၆၄)၊ထီးတန်းအိမ်ရာ၊ ကမ်းနားလမ်း၊ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်။
09-5404572, 01-220962, 01-222649
(ဂ) UNO Consultant Geotechnical Engineering Group
တိုက်(၃)၊ဝေဇယန္တာရိပ်သာ(၁)လမ်း၊လမ်းသွယ်(၁)၊ မိချောင်းကန်အပိုင်း(၁)၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်။
09-5112557, 01-573019, 01-565249
(ဃ) Tek Bumi Co.,Ltd.
အမှတ်(၂၁၂/၂၁၅)၊ Ground Floor စံပယ်မာဃလမ်း၊ ဟံသာရိပ်မွန်အိမ်ရာ၊ကမာရွတ်မြို့နယ်။
အမှတ်(၁၁၃၆/A+B)၊ သုမင်္ဂလာလမ်း၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်။
01-561431, 09-420107757, 09-420107767
AMT Geotechnical Engineering Group
အမှတ်(၉၃)၊ မြေညီ၊ ဘုန်းကြီးလမ်း၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်။
(ဆ) Geotechnics Myanmar Company Limited.
ပထမထပ်၊ စံပြရန်ကင်းစျေး၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်။
JGS (Japan Geological Survey Laboratory Services Co.,Ltd.)
အမှတ်(၆-C)၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊ ပင်လုံအိမ်ရာ၊ ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ်။
အမှတ်(၁၃၁)၊ ပင်လုံ(၃)လမ်း၊ (၂၇/၄)ရပ်ကွက်၊ ရွှေပင်လုံအိမ်ရာ၊ ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ်။
(ည) SUNTAC TECHNOLOGIES
အခန်း(၇)၊ တိုက်(၅)၊ Myanmar ICT Park၊ လှိုင်မြို့နယ်။
(ဋ) Future Force Engineering Co.,Ltd.
အမှတ်(၁၅၅)၊ ရာဇာဓိရာဇ်လမ်း၊ (၄၀)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ်။
(ဌ) Electrum Public Co.,Ltd.
အမှတ်(၅၉)၊ သီရိမင်္ဂလာလမ်း၊ ဖော့ကန်ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မြို့နယ်။
Energy World Co.,Ltd.
အမှတ်(၁၅၁)၊ (၃)လွှာ၊ (၄၆)လမ်းနှင့်ဗိုလ်ချုပ်လမ်းထောင့်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်။
09-420122226, 09-254972300, 09-254972400, 09-254972500
(ဎ) STRATA Geotechnical Investigation Co.,Ltd.
အမှတ်(၂၂)၊ (၁၆၆)လမ်း၊ တာမွေမြို့နယ်။
09-450025535, 09-49205962, 01-543063
(ဏ) International Integrated Services (Geol Mark Co.,Ltd.)
အမှတ်(၃၅)၊ အောင်ဇေယျလမ်း၊ စက်မှုဇုံ(၇)၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်။
(တ) GEOLAB(MYANMAR) Co.,Ltd.
အမှတ်(၄၁၄)၊ အောင်သစ္စာလမ်း၊ U-10၊ (၄၈)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ်။
၂။	(၁.၁၀.၂၀၁၅)ရက်နေ့မှစ၍ အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ခွင့်တင်ပြရာတွင် တင်ပြရမည့် Soil Report များကို အထက် ဖော်ပြပါ ဤကော်မတီအသိအမှတ်ပြု မြေသားစမ်းသပ်မှုလုပ်ငန်း လိုင်စင်ရယူထားသည့် ကုမ္ပဏီများ၏ Soil Report များကို သာ လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
၃။	သို့ဖြစ်ပါ၍ အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ခွင့် တင်ပြမည့်သူများ သိရှိနိုင်ပါရန်နှင့်မြေသားစမ်းသပ်မှုလုပ်ငန်း လိုင်စင်(Soil Test Licence) လျှောက်ထားလိုသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားပိုင်ကုမ္ပဏီများမှ အင်ဂျင်နီယာဌာန (အဆောက်အအုံ)သို့ အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းများကြီးကြပ် စစ်ဆေးရေးပညာရှင်အဖွဲ့၏ ထောက်ခံချက်ပူးတွဲတင်ပြ၍ လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်း ဆောက်လုပ်မည့် အဆောက်အအုံများ Pile ရိုက်ခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရာတွင် စည်းကမ်းတကျ ဆောင်ရွက်မှုရှိစေရန်၊ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အဆောက်အဦများ၊ လမ်းများ၊ ရေမြောင်းများ ပလက်ဖောင်းများ ထိခိုက်မှုမရှိအောင် ဆောင်ရွက်စေရန်နှင့် အဆိုပါ ဆောင်ရွက်ချက်များကို တာဝန်ယူ၊ တာဝန်ခံမှုရှိစေရန် အထပ် မြင့်အဆောက်အအုံတည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းများ ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးပညာရှင်အဖွဲ့မှ ထောက်ခံချက် ပေးထားသည့် Pile ရိုက်ခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နေသော အောက်ဖော်ပြပါကုမ္ပဏီ(၁၅)ခုအား လိုင်စင်ထုတ်ပေးထားပြီးဖြစ်ပါသည်-
အခန်း(၉၀၁၊၉၀၂)၊ တိုက်(၁၀၇၊၁၀၉) ဝါဝါဝင်းတာဝါ၊အနော်ရထာလမ်းနှင့်စဉ့်အိုးတန်းလမ်းထောင့်၊ လသာမြို့နယ်။ +951-250911, 250922,252493, 395696
Win Piling Group (A division of Waterworks Engineering Group Services Co.,Ltd)
အမှတ်(၁၈)၊ လမ်းသစ်လမ်း၊ အင်းစိန်မြို့နယ်။ 09-5014942, 01-644506
Golden Tri Star Co.,Ltd ပထမထပ်၊အလုံတာဝါ၊ River View Garden Houshing ကမ်းနားလမ်း၊ အလုံမြို့နယ်။ 01-211430, 09-977830493, 09-977830506, 09-8613588
City Press Pile Construction Co.,Ltd အမှတ်(၃၈)၊ မြေညီထပ်၊ တရုတ်ကျောင်းလမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်။ 09-252546017, 09-252546018, 09-252546019, 09-73166853
Positive Pioneer Co.,Ltd အမှတ်(၂၁၆/၂၂၂)၊4(A+B)၊ ဗိုလ်မြတ်ထွန်းအိမ်ရာ၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်းနှင့် ဗိုလ်မြတ်ထွန်းလမ်းထောင့်၊ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်။ 09-431635561, 01-200593, 01-200595, 09-420031990, 09-5156668
GEO-TECH PILE Co.,Ltd. အမှတ်(၅၂/၆၀)၊ မြေညီထပ်၊ ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ 01-380309, 01-388428, 01-253313
DE PA WADDY Co.,Ltd (Pile Foundation Services & Construction) အမှတ်(၂၈၈/၂၉၀)၊ အခန်းအမှတ်(၄၀၂/၄၀၃)၊ (၄)လွှာ MWEA တာဝါ၊ ရွှေတိဂုံဘုရားလမ်း၊ ဒဂုံမြို့နယ်။ 01-389374, 01-389378, 01-389620
Han Myanmar Construction Co.,Ltd အမှတ်(၁၉/၂၀)၊ မြဝတီမင်းကြီးလမ်းနှင့် ဦးရွှေမြူလမ်းထောင့်၊ စက်မှုဇုံ(၄)၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်။ 09-250499632, 09-791633327
Glory Hope Construction & Piling Co.,Ltd အမှတ်(၁၂၆)၊ ဒုတိယထပ်(ဝဲ)၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်။ 01-392236,09-421095680, 09-43146402
Joyance International Co.,Ltd အမှတ်(၉)၊ ငါးမာန်အောင်ဘုရားလမ်း၊ (၃၃)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ်။ 09-5302149, 09-977100200, 09-977100300
Dolphin Ayeyarwady Pile Construction Co.,Ltd တိုက်(၁၉)၊ အခန်း(၂၀၁)၊ ငုဝါလမ်း၊ အေးရိပ်မွန်အိမ်ရာ၊ လှိုင်မြို့နယ်။ 01-530488,09-5016753,09-775016753,09-5200302,09-775200302, Fax. 09-51-653343
Winner Super Diamond Pile Co.,Ltd W.S.D GROUP အမှတ်(၅၆)၊ မြေညီ၊ (၄၄)လမ်း၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်။ 09-381964,09-73131288,09-73150482, 09-977909888. Email-wsdmyanmar@gmail.com
နေကမ္ဘာမြန်မာဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက် Tower (A), Unit(A), Room(1-A)(Royal Sin Min Condo) Corner of Stand Road & Ahlon Road, Ahlon Township, Yangon. Ph-951-218023,959-8600970, Hp:959-5022717, Email: complete.rich@gmail.com
International Integrated Services Company Limited No.(47), (67)Quarter, Yadanar Road, Dagon Sate Kan Township, Yangon, Myanmar Tel: 09-73045577, 09-5215629. Fax: 01-450990 Email: iis@myanmar.com.mm
Win Empire Construction Co.,Ltd အမှတ်(၈၂/အေ)၊ ကျိုက်ဝိုင်းဘုရားလမ်း၊ မရမ်းကုန်းမြိုနယ်။ 09-788888134
၂။ ((၁.၁.၂၀၁၆)ရက်နေ့မှစ၍ အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ခွင့် တင်ပြရာတွင် ဤကော်မတီမှ အသိအမှတ်ပြု Pile ရိုက်ခြင်း လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရယူထားသည့် ကုမ္ပဏီ များကိုသာ လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
၃။	သို့ဖြစ်ပါ၍ အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ခွင့် တင်ပြမည့်သူများ သိရှိနိုင်ပါရန်နှင့် Pile ရိုက်ခြင်းလုပ်ငန်း လိုင်စင်လျှောက်ထားလိုသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားပိုင် ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် အင်ဂျင်နီယာဌာန (အဆောက်အအုံ)သို့ အထပ်မြင့် အဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းများကြီးကြပ် စစ်ဆေးရေး ပညာရှင်အဖွဲ့၏ ထောက်ခံချက် ပူးတွဲတင်ပြ၍ လျှောက်ထား နိုင်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
၄။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)၊ (၁၀)ထပ်ရုံးသို့ ရုံးချိန်အတွင်းလာရောက်၍ ကိုယ်တိုင် သော်လည်းကောင်း၊ ဖုန်း-၀၁-၃၇၄၀၇၇၊ ၀၁-၃၇၄၀၅၅ သို့လည်းကောင်း ဆက်သွယ် စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
လိုင်စင်ကန်ထရိုက်တာနှင့် လိုင်စင်အင်ဂျင်နီယာများ သိရှိရန် အသိပေးကြေညာချက်
၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်း အဆောက်အအုံများအား တာဝန်ယူကြီးကြပ်ဆောက်လုပ်ရန် အတွက် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)မှ စည်းကမ်းများသတ်မှတ်၍ ကန်ထရိုက်တာလိုင်စင်နှင့် အင်ဂျင်နီယာလိုင်စင်များ ထုတ်ပေးခဲ့ပါသည်။
၂။ သို့ရာတွင် အချို့သော လိုင်စင်ကန်ထရိုက်တာနှင့် လိုင်စင်အင်ဂျင်နီယာတို့သည် အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ခွင့် မလျှောက်ထားမီ မြေပြင်သို့ သွားရောက်ကြည့်ရှုခြင်းမပြုဘဲ မြေပြင်အခြေအနေနှင့် မကိုက်ညီဘဲ ဆောက်လုပ်ထားသော ပုံစံများနှင့် ခွင့်ပြုချက်မရမီဆောက်လုပ်ထားသည့်အဆောက်အအုံပုံစံများတွင် အခကြေးငွေယူ၍ အလွယ်တကူလက်မှတ် ရေးထိုးကြခြင်း၊ ဆောက်လုပ်ခွင့်ရရှိပြီးပါကလည်း လုပ်ငန်းခွင်အား စနစ်တကျမကြီးကြပ်သဖြင့် စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်မှုနှင့် ပုံစံကွဲလွဲမှုများဖြစ်ပေါ်ခြင်းတို့ကြောင့် ဌာနမှ လိုင်စင်ရုပ်သိမ်းအရေးယူမှုများ ဆောင်ရွက်ရခြင်းအပေါ် အရေးယူခံရသည့် အဆောက်အအုံသည် မိမိတို့နှင့်ပတ်သက်မှုမရှိကြောင်း၊ လက်မှတ်ရေးထိုးပေးခြင်းသာဖြစ်ကြောင်း စသည်ဖြင့် အကြောင်း အမျိုးမျိုးပြ၍ အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ကြီးကြပ်ခြင်းမှ နှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုရန်နှင့် အရေးယူခံရခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုရန် ပြန်လည်တင်ပြနေကြကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။
၃။	သို့ဖြစ်ပါ၍ လိုင်စင်ကန်ထရိုက်တာနှင့် လိုင်စင်အင်ဂျင်နီယာများအနေဖြင့် မိမိတာဝန်ယူလက်မှတ်ရေးထိုးသည့် လုပ်ငန်းခွင်သို့ သွားရောက်ကြည့်ရှုပြီး ဌာန၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်ကိုက်ညီသည့်ပုံစံများကိုသာ တာဝန်ယူလက်မှတ် ရေးထိုးကြရန်နှင့် မိမိတာဝန်ယူလက်မှတ်ရေးထိုးတင်ပြ၍ ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးသော အဆောက်အအုံများကို ခွင့်ပြုပုံစံပါအတိုင်း စည်းကမ်းနှင့်အညီ ဆောက်လုပ်စေရေးကြပ်မတ်ဆောင်ရွက်ကြရန် အသိပေးအပ်ပါသည်။ မိမိတာဝန်ယူလက်မှတ်ရေးထိုးသည့် အဆောက်အအုံတွင် စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်မှုများပေါ်ပေါက်ပါက ထိရောက်စွာအရေးယူမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် လိုအပ်ပါက လိုင်စင်ပိတ်သိမ်းသည်အထိ အရေးယူဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါ၍ အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြပြီး ပြစ်ဒဏ်လျော့ပေါ့ပေးရန် တင်ပြခြင်းကို လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးမည်မဟုတ်ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။
၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်း ဆောက်လုပ်မည့် အဆောက်အအုံများ Pile ရိုက်ခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရာတွင် စည်းကမ်းတကျဆောင်ရွက်မှုရှိစေရန်၊ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အဆောက်အဦများ၊ လမ်းများ၊ ရေမြောင်းများ ပလက်ဖောင်းများ ထိခိုက်မှုမရှိအောင် ဆောင်ရွက်စေရန်နှင့် အဆိုပါဆောင်ရွက်ချက်များကို တာဝန်ယူ၊ တာဝန်ခံမှုရှိစေရန် အထပ် မြင့်အဆောက်အအုံတည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းများ ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးပညာရှင်အဖွဲ့မှ ထောက်ခံချက်ပေးထားသည့် Pile ရိုက်ခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသော ကုမ္ပဏီ(၅)ခုအား လိုင်စင်ထုတ်ပေးခဲ့၍ ကြေညာခဲ့ပြီး ယခုထပ်မံ၍ ထောက်ခံချက်ရရှိသည့် အောက်ဖော်ပြပါကုမ္ပဏီ(၂)ခုအား လိုင်စင်ထုတ်ပေးထားပြီးဖြစ်ပါသည်-
GEO-TECH PILE Co.,Ltd.
အမှတ်(၅၂/၆၀)၊ မြေညီထပ်၊ ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ 01-380309, 01-388428, 01-253313
DE PA WADDY Co.,Ltd (Pile Foundation Services & Construction)
အမှတ်(၂၈၈/၂၉၀)၊ အခန်းအမှတ်(၄၀၂/၄၀၃)၊ (၄)လွှာ, MWEA တာဝါ၊ ရွှေတိဂုံဘုရားလမ်း၊ ဒဂုံမြို့နယ်, 01-389374, 01-389378, 01-389620
၂။ (၁.၁.၂၀၁၆)ရက်နေ့မှစ၍ အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ခွင့် တင်ပြရာတွင် ဤကော်မတီမှ အသိအမှတ်ပြု Pile ရိုက်ခြင်း လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရယူထားသည့် ကုမ္ပဏီများကိုသာ လက်ခံဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။
၃။	သို့ဖြစ်ပါ၍ အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ခွင့်တင်ပြမည့်သူများ သိရှိနိုင်ပါရန်နှင့် Pile ရိုက်ခြင်းလုပ်ငန်း လိုင်စင်လျှောက်ထားလိုသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားပိုင်ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် အင်ဂျင်နီယာဌာန (အဆောက်အအုံ)သို့ အထပ်မြင့် အဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းများကြီးကြပ် စစ်ဆေးရေး ပညာရှင်အဖွဲ့၏ ထောက်ခံချက်ပူးတွဲတင်ပြ၍ လျှောက်ထား နိုင်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
၄။အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)၊ (၁၀)ထပ်ရုံး သို့ ရုံးချိန်အတွင်းလာရောက်၍ ကိုယ်တိုင်သော်လည်းကောင်း၊ ဖုန်း-၀၁-၃၇၄၀၇၇၊ ၀၁-၃၇၄၀၅၅ သို့လည်းကောင်း ဆက်သွယ် စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
၁။ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်း ဆောက်လုပ်မည့် အဆောက်အအုံများအတွက် မြေသားစမ်းသပ်မှု (Soil Test)လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် မြေသားစမ်းသပ်ခြင်း နှင့်ပတ်သက်၍ ပိုမိုတိကျသော ရလဒ်များ ရရှိလာစေပြီး တင်ပြ ချက်များအပေါ်တွင် တာဝန်ယူ၊ တာဝန်ခံမှုရှိစေရန်အတွက် အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းများကြီးကြပ် စစ်ဆေးရေးပညာရှင်အဖွဲ့မှ ထောက်ခံချက်ပေးထားသော မြေသားစမ်းသပ်မှု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသည့် ကုမ္ပဏီ(၁၁)ခုအား လိုင်စင်ထုတ်ပေးခဲ့၍ ကြေညာခဲ့ပြီး ယခုထပ်မံ လျှောက်ထားလာသည့် အောက်ဖော်ပြပါ ကုမ္ပဏီ(၄)ခုအား လိုင်စင်ထုတ်ပေးထား ပြီးဖြစ်ပါသည်-
Electrum Public Co.,Ltd.
အမှတ်(၅၉)၊ သီရိမင်္ဂလာလမ်း၊ ဖော့ကန်ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မြို့နယ်။ 09-43157295
အမှတ်(၁၅၁)၊ (၃)လွှာ၊ ၄၆ လမ်းနှင့် ဗိုလ်ချုပ်လမ်းထောင့်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်။ 09-420122226, 09-254972300, 09-254972400, 09-254972500
STRATA Geotechnical Investigation Co.,Ltd
အမှတ်(၂၂)၊ (၁၆၆)လမ်း၊ တာမွေမြို့နယ်။ 09-450025535, 09-49205962, 01-543063
International Integrated Services (Geol Mark Co.,Ltd.)
အမှတ်(၃၅)၊ အောင်ဇေယျလမ်း၊ စက်မှုဇုံ(၇)၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်။ 09-49571127, 09-5106723
၂။ (၁.၁၀.၂၀၁၅)ရက်နေ့မှစ၍ အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ခွင့် တင်ပြရာတွင် တင်ပြရမည့် Soil Report များကို ဤကော်မတီမှ အသိအမှတ်ပြု မြေသားစမ်းသပ်မှုလုပ်ငန်း လိုင်စင်ရယူထားသည့် ကုမ္ပဏီများ၏ Soil Report များကို သာ လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
၃။	သို့ဖြစ်ပါ၍ အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ခွင့် တင်ပြမည့်သူများ သိရှိနိုင်ပါရန်နှင့်မြေသားစမ်းသပ်မှုလုပ်ငန်း လိုင်စင်(Soil Test Licence)လျှောက်ထားလိုသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားပိုင်ကုမ္ပဏီများမှ အင်ဂျင်နီယာဌာန (အဆောက်အအုံ)သို့ အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းများကြီးကြပ် စစ်ဆေးရေးပညာရှင်အဖွဲ့၏ ထောက်ခံချက်ပူးတွဲတင်ပြ၍ လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
၁။	ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်း ဆောက်လုပ်မည့် အဆောက်အအုံများ Pile ရိုက်ခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရာတွင် စည်းကမ်းတကျဆောင်ရွက်မှုရှိစေရန်၊ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အဆောက်အဦများ၊ လမ်းများ၊ ရေမြောင်းများ ပလက်ဖောင်းများ ထိခိုက်မှုမရှိအောင် ဆောင်ရွက်စေရန်နှင့်အဆိုပါဆောင်ရွက်ချက်များကို တာဝန်ယူ၊ တာဝန်ခံမှုရှိစေရန် အထပ် မြင့်အဆောက်အအုံတည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းများ ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးပညာရှင်အဖွဲ့မှ ထောက်ခံချက်ပေးထားသည့် Pile ရိုက်ခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသော အောက်ဖော်ပြပါကုမ္ပဏီ(၅)ခုအား လိုင်စင်ထုတ်ပေးထားပြီးဖြစ်ပါသည်-
အခန်း(၉၀၁၊၉၀၂)၊ တိုက်(၁၀၇၊၁၀၉) ဝါဝါဝင်းတာဝါ၊ အနော်ရထာလမ်းနှင့်စဉ့်အိုးတန်းလမ်းထောင့်၊ လသာမြို့နယ်။
Golden Tri Star Co.,Ltd
ပထမထပ်၊အလုံတာဝါ၊ River View Garden Houshing	ကမ်းနားလမ်း၊ အလုံမြို့နယ်။ 01-211430, 09-977830493, 09-977830506, 09-8613588
City Press Pile Construction Co.,Ltd
အမှတ်(၃၈)၊ မြေညီထပ်၊ တရုတ်ကျောင်းလမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်။ 09-252546017, 09-252546018, 09-252546019, 09-73166853
Positive Pioneer Co.,Ltd
အမှတ်(၂၁၆/၂၂၂)၊4(A+B)၊ ဗိုလ်မြတ်ထွန်းအိမ်ရာ၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်းနှင့် ဗိုလ်မြတ်ထွန်းလမ်းထောင့်၊ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်။ 09-431635561, 01-200593, 01-200595, 09-420031990, 09-5156668
၃။	သို့ဖြစ်ပါ၍ အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ခွင့် တင်ပြမည့်သူများ သိရှိနိုင်ပါရန်နှင့် Pile ရိုက်ခြင်းလုပ်ငန်း လိုင်စင်လျှောက်ထားလိုသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားပိုင်ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် အင်ဂျင်နီယာဌာန (အဆောက်အအုံ)သို့ အထပ်မြင့် အဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းများကြီးကြပ် စစ်ဆေးရေးပညာရှင်အဖွဲ့၏ ထောက်ခံချက်ပူးတွဲတင်ပြ၍ လျှောက်ထား နိုင်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)မှ အောက်ဖော်ပြပါ လိုင်စင်ကန်ထရိုက်တာနှင့် လိုင်စင်အင်ဂျင်နီယာများမှာ ကော်မတီမှ သတ်မှတ်ထားသော လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ စည်းကမ်းချက်များအား လိုက်နာခြင်းမရှိဘဲ အကြိမ်ကြိမ် ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်သဖြင့် ကန်ထရိုက်တာလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင်နှင့် အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခွင့်လိုင်စင်လုပ်ကိုင်ခွင့်များအား ရာသက်ပန်ရုပ်သိမ်းထားကြောင်း၊ အမည်ပျက်စာရင်း(Black List)ရေးသွင်းထားကြောင်း အများသိစေရန် အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်-
(က) လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် လိုင်စင်ရကန်ထရိုက်တာများ
LC - ၃၈၄
ရာသက်ပန်ပိတ်သိမ်းပြီး Black List ရေးသွင်းခြင်း
(ခ) လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် လိုင်စင်ရအင်ဂျင်နီယာများ
ရာသက်ပန်ပိတ်သိမ်းပြီးBLACK LIST ရေးသွင်းခြင်း
ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် စည်းကမ်းမဲ့ဆောင်ရွက်နေမှုများနှင်ပတ်သက်၍အများသိစေရန် ကြေညာချက်
၁။	ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသည် ရန်ကုန်မြို့တော်အား သန့်ရှင်းသပ်ရပ်မှုရှိစေရေးအတွက် မြို့တော်နယ်နိမိတ်အတွင်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် လုပ်ငန်းများအား စဉ်ဆက်မပြတ်ကြပ်မတ်လျက်ရှိရာ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းခွင်များကိုလည်း စည်းကမ်းတကျဖြစ်စေရေး ကြပ်မတ်ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။
၂။	သို့ရာတွင် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်အချို့သည် လုပ်ငန်းခွင်မှ ထွက်ရှိသည့် မြေကြီးနှင့် စွန့်ပစ် ပစ္စည်းများ သယ်ယူရာ၌ မော်တော်ယာဉ်များတွင် လိုအပ်သောအဖုံးအကာများ စနစ်တကျ မဆောင်ရွက် ခြင်း၊ သတ်မှတ်ထားသည့်နေရာများ တွင် မစွန့်ပစ်ဘဲ စည်းကမ်းမဲ့စွန့်ပစ်ခြင်း၊ မြေသယ်ယာဉ်၏ဘီးများအား လုပ်ငန်းခွင်မှ အထွက်တွင် ရေဖြင့်ဆေးကြောရန် ပျက်ကွက်ခြင်းတို့ကြောင့် အများပြည်သူသုံးလမ်းများပေါ်တွင် အမြင်မတင့်တယ်သော ညစ်ပေမှုဖြစ်ပေါ်၍ စည်းကမ်းမဲ့စွာဖြင့် လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ကြသောကြောင့် ပြည်သူများ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ပေါ်ရကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိရပါသည်။
၃။	သို့ဖြစ်ပါ၍ လိုင်စင်ကန်ထရိုက်တာနှင့် လိုင်စင်အင်ဂျင်နီယာများသည် မိမိတို့ကြီးကြပ်ဆောက်လုပ်သည့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်များအား စနစ်တကျကြပ်မတ်ဆောင်ရွက်သွားကြရန်နှင့် စည်းကမ်းမ လိုက်နာမှု များအား စစ်ဆေး တွေ့ရှိပါက သက်ဆိုင်ရာလိုင်စင်ကန်ထရိုက်တာ၊ လိုင်စင်အင်ဂျင်နီယာတို့အား လိုင်စင်ပိတ်သိမ်း သည်အထိ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့်အညီ ထိရောက်စွာအရေးယူမည်ဖြစ်သည့်အပြင် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း ကိုလည်း သတ်မှတ်ဒဏ်ကြေးများ အပြင် အနည်းဆုံး(၁)လ ရပ်ဆိုင်းအရေးယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေး ကြေညာအပ်ပါသည်။
၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်း ဆောက်လုပ်မည့် အဆောက်အအုံများအတွက် မြေသားစမ်းသပ်မှု (Soil Test)လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် မြေသားစမ်းသပ်ခြင်း နှင့်ပတ်သက်၍ ပိုမိုတိကျသော ရလဒ်များ ရရှိလာစေပြီး တင်ပြ ချက်များအပေါ်တွင် တာဝန်ယူ၊ တာဝန်ခံမှုရှိစေရန်အတွက် အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းများကြီးကြပ် စစ်ဆေးရေးပညာရှင်အဖွဲ့မှ ထောက်ခံချက်ပေးထားသည့် မြေသားစမ်းသပ်မှု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသော ကုမ္ပဏီ(၁၂)ခုအနက် ဌာနသို့ မြေသားစမ်းသပ်မှုလုပ်ငန်းလိုင်စင် လာရောက်လျှောက်ထားသည့် ကုမ္ပဏီ(၆)ခုအား လိုင်စင်ထုတ်ပေးခဲ့၍ ကြေညာခဲ့ပြီး ယခုထပ်မံ လျှောက်ထားလာသည့် အောက်ဖော်ပြပါ ကုမ္ပဏီ(၅)ခုအား လိုင်စင်ထုတ်ပေးထားပြီးဖြစ်ပါသည်-
Geotechnics Myanmar Co.,Ltd
အမှတ်(၆-C)၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊ ပင်လုံအိမ်ရာ၊ ဒဂုံမြို့သစ် (မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ်။
FUKKEN CO.,LTD(Yangon Branch)
အခန်း(၇)၊ တိုက်(၅)၊ Myanmar ICT Park၊ လှိုင်မြို့နယ်
Future Force Engineering Co.,Ltd
၂။ (၁.၁၀.၂၀၁၅)ရက်နေ့မှစ၍ အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ခွင့် တင်ပြရာတွင် တင်ပြရမည့် Soil Report များကို ဤကော်မတီမှ အသိအမှတ်ပြု မြေသားစမ်းသပ်မှုလုပ်ငန်း လိုင်စင်ရယူထားသည့် ကုမ္ပဏီများ၏ Soil Report များကို သာ လက်ခံဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။
၃။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ခွင့် တင်ပြမည့်သူများ သိရှိနိုင်ပါရန်နှင့်မြေသားစမ်းသပ်မှုလုပ်ငန်း လိုင်စင်(Soil Test Licence)လျှောက်ထားလိုသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားပိုင်ကုမ္ပဏီများမှ အင်ဂျင်နီယာဌာန (အဆောက်အအုံ)သို့ အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းများကြီးကြပ် စစ်ဆေးရေးပညာရှင်အဖွဲ့၏ ထောက်ခံချက်ပူးတွဲတင်ပြ၍ လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
၄။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)၊ (၁၀)ထပ်ရုံး သို့ ရုံးချိန်အတွင်းလာရောက်၍ ကိုယ်တိုင်သော်လည်းကောင်း၊ ဖုန်း-၀၁-၃၇၄၀၇၇၊ ၀၁-၃၇၄၀၅၅ သို့လည်းကောင်း ဆက်သွယ် စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်း ဆောက်လုပ်မည့် အဆောက်အအုံများအတွက် မြေသား စမ်းသပ်မှု(Soil Test)လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် မြေသားစမ်းသပ်ခြင်း နှင့်ပတ်သက်၍ ပိုမိုတိကျသော ရလဒ်များ ရရှိလာစေပြီး တင်ပြချက်များအပေါ် တွင် တာဝန်ယူ၊ တာဝန်ခံမှုရှိစေရန် မြေသားစမ်းသပ်မှု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက် သည့် အောက်ပါကုမ္ပဏီများကို စိစစ်၍ လိုင်စင်ထုတ်ပေးထားပြီးဖြစ်ပါသည်-
Mya Yar Pin
အမှတ်(၂)၊ မြောင်းမြလမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်။ 01-524163, 01-523855,
CECC (Civil Engineer's
Construction Co.Operative Limited)
UNO Consultant Geotechnical
အမှတ်(၁၀၈)၊ ဝေဇယန္တာဥယျာဉ်(၄)လမ်း၊ မိချောင်းကန်အပိုင်း(၁)၊
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်။ 09-5112557, 01-573019, 01-571814
Tek Bumi Co.,Ltd
အမှတ်(၂၁၂/၂၁၅)၊ Ground Floor, စံပယ်မာဃလမ်း၊ ဟံသာရိပ်မွန်အိမ်ရာ
ကမာရွတ်မြို့နယ်။ 01-512695, 01-511519
GEO Friends Co.,Ltd
အမှတ်(၁၁၃၆/ဘီ)၊ သုမင်္ဂလာလမ်း၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်။
01-561431, 01-577035, 09-420107757, 09-420107767
အမှတ်(၉၃)၊ မြေညီ၊ ဘုန်းကြီးလမ်း၊
၂။ (၁.၁၀.၂၀၁၅)ရက်နေ့မှစ၍ အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ခွင့်တင်ပြရာတွင် တင်ပြရမည့် Soil Report များကို အထက်ဖော်ပြပါ ဤကော်မတီအသိအမှတ်ပြု မြေသားစမ်းသပ်မှုလုပ်ငန်း လိုင်စင်ရယူထားသည့် ကုမ္ပဏီများ၏ Soil Report များကိုသာ လက်ခံဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။
၃။ သို့ဖြစ်ပါ၍အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ခွင့် တင်ပြမည့်သူများ သိရှိနိုင်ပါရန်နှင့်မြေသားစမ်းသပ် မှုလုပ်ငန်းလိုင်စင်(Soil Test Licence)လျှောက်ထားလိုသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားပိုင်ကုမ္ပဏီများမှ အင်ဂျင်နီယာဌာန (အဆောက်အအုံ)သို့ လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
၄။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)၊ (၁၀)ထပ်ရုံးသို့ ရုံးချိန်အတွင်း လာရောက်၍ ကိုယ်တိုင်သော်လည်းကောင်း၊ ဖုန်း-၀၁-၃၇၄၀၇၇၊ ၀၁-၃၇၄၀၅၅ သို့လည်းကောင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
တိရစ္ဆာန်ဆေးကုနှင့်သားသတ်ရုံများဌာနအတွက် ဝယ်ယူမည့် ပစ်ကပ်ယာဉ်များ၏ Specifications
၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ တိရစ္ဆာန်ဆေးကုနှင့်သားသတ်ရုံများဌာနအတွက် အသုံးပြုရန်အတွက် ဝယ်ယူမည့် ပစ်ကပ်ယာဉ်များ၏ Specifications
Double Cab/ Extra Cab/ Pick-up ယာဉ်ငယ် (၃)စီး ဝယ်ယူပါမည်။
၃ Model Year မှာ ၂၀၀၄နှစ်နှင့် အထက် ဖြစ်ရမည်။
၄ ယာဉ်များမှာ (Reconditioned) အခြေအနေပြုပြင်ပြီးဖြစ်ရမည်။
၅ ဒီဇယ်သုံးယာဉ်များဖြစ်ပြီး Capacity အနည်ဆုံး ၀.၅တန် ရှိရမည်။
၆ ဂီယာစနစ်မှာ Manual/ Auto, 4x2 ဖြစ်ရမည်။
၇ ယာဉ်များအားလုံး၏ တာယာနှင့် ဘက်ထရီများအသစ်ဖြစ်ရမည်။
၈ ယာဉ်များအားလုံး၏ အဲယားကွန်းစနစ်ကောင်းမွန်ရမည်။
၉ ယာဉ်များအတွက် အာမခံကာလ (Warranty Period)ကို ကာလအတိုင်းအတာ တစ်ခုဖြင့်လည်းကောင်း၊ အသုံးပြုမည့် ကီလိုမီတာ ခရီးအကွာအဝေးဖြင့်လည်းကောင်း တိကျစွာ ဖော်ပြရမည်။
၁၀ အာမခံကာလအတွင်း ယာဉ်၏ အစိတ်အပိုင်းများပျက်စီးမှု (အင်ဂျင်/ အောက်ပိုင်း/ ဘရိတ်/ ဂီယာ/ ဘော်ဒီအားလုံး) ကို ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ယူ ပြုပြင်ပေးရမည်။
၁၁ ယာဉ်နှင့်ပတ်သက်သော ဝှီးတက်/ ယာဉ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ်/ ယာဉ်အာမခံစာအုပ် စသည့် စာရွက်စာတမ်းများ အပြည့်အစုံ ပါရှိရမည်။
ရေပုပ်စုပ်ယာဉ်ငှားရမ်းလိုပါက ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဒေါပုံမြို့နယ်၊ ယမုံနာစည်ပင်မော်တော်ယာဉ်ဌာနခွဲ၊ မင်းနန္ဒာလမ်းနှင့် ရှုခင်းသာလမ်းထောင့်၊ ဒေါပုံ သင်္ဘောကျင်းမှတ်တိုင်အနီး လူကိုယ်တိုင် လာရောက်၍ ငှားရမ်းလိုသော ယာဉ်အမျိုးအစားအလိုက် ကျသင့်ငွေ ပေးသွင်းပြီး ငှားရမ်းနိုင်ပါသည်။
သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးများ (လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ လသာမြို့နယ်၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၊ သာကေတမြို့နယ်၊ ဒေါပုံမြို့နယ်၊ ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်၊ ဒလမြို့နယ်၊ ဆိပ်ကြီးခနောင်တိုမြို့နယ် များမပါ) တွင် လူကိုယ်တိုင် လာရောက်၍ ငှားရမ်းလိုသော ယာဉ်အမျိုးအစားအလိုက် ကျသင့်ငွေပေးသွင်းပြီး ငှားရမ်းနိုင်ပါသည်။
၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သန့်ရှင်းရေးဌာနရှိ ခရိုင်၊ မြို့နယ်သန့်ရှင်းရေးတာဝန်ခံသိမ်းရေးနှင့် သန့်ရှင်းရေးဌာနရှိ ခရိုင်၊ မြို့နယ်သန့်ရှင်းရေးတာဝန်ခံရုံးများမှ ကြီးကြပ်၍ သန့်ရှင်းရေးဝန်ထမ်း၊ ယာဉ်၊ လှည်းများဖြင့် ဖြန့်ခွဲရုံးများမှ ကြီးကြပ်၍ သန့်ရှင်းရေးဝန်ထမ်း၊ ယာဉ်၊ လှည်းများဖြင့် ဖြန့်ခွဲချထားသော အမှိုက်ပုံးများ၊ အမှိုက်ကန်များနှင့် အဓိကလမ်းမကြီးများ၊ ချထားသော အမှိုက်ပုံးများ၊ အမှိုက်ကန်များနှင့် အဓိကလမ်းမကြီးများ၊ လမ်းမများ၏ လမ်းကြောင်းများအား နေ့စဉ်နံနက်ပိုင်းလင်းပြောင်အဖြစ် သတ်မှတ်ကာ အပြောင်သိမ်းဆည်းဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
၂။ သို့ရာတွင် အချို့လမ်းသွားလမ်းလာပြည်သူများ၏ စည်းကမ်းမဲ့ အမှိုက်စွန့်ပစ်မှုများကြောင့် မြို့နယ်အလိုက် အဓိကလမ်းမကြီးများနှင့် လမ်းမများတွင် သိမ်းဆည်းပြီးသော်လည်း၊ အမှိုက်များ ပြန့်ကျဲလျက်ရှိသဖြင့် မြို့နယ်အလိုက် နေ့လမ်းကြောင်းသန့်ရှင်းရေးကို နံနက်ပိုင်းလင်းပြောင်အပြင် ဝန်ထမ်းများတာဝန်ချထား၍ စောင့်ကြည့်သိမ်းဆည်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
၃။ လမ်းသွားလမ်းလာစည်းကမ်းမဲ့အမှိုက်စွန့်ပစ်သူများနှင့် မိဘပြည်သူများ သတိပြုလိုက်နာ ဆောင်ရွက်နိုင် စေရန်အတွက် ဌာနမှအောက်ပါသတိပေးချက်များပါရှိသော သတိပေးဆိုင်းဘုတ်များကို ဘတ်(စ်)ကား မှတ်တိုင် များတွင် စိုက်ထူသွားမည့်အပြင် ဘတ်(စ်)ကားမှတ်တိုင်အလိုက် ၂၄ဝ လီတာဆံ့အမှိုက်ပုံး (၁) ပုံးနှင့် ကွမ်းတံတွေးပုံး (၁) ပုံးစီတို့အား ချထားဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်-
ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ပါက ဒဏ်ငွေ ကျပ်၁ဝဝဝဝ ပေးဆောင်ရမည်။
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသည် မြို့တော်နေ ပြည်သူလူထု၏ အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ခွင့်များ လွယ်ကူလျင်မြန်စွာရရှိစေရန်အတွက် ဆောက်လုပ်ခွင့်လျှောက်ထားမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတ်မှတ်ထားသည့် စာရွက်စာတမ်း အထောက်အထား လိုအပ်ချက်များကို တတ်နိုင်သမျှဖြေလျော့၍ လျင်မြန်စွာဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပြီး ခွင့်ပြုချက်မရှိသောအဆောက်အအုံများ ဆောက်လုပ်ခြင်းမပြု ကြရန်၊ စည်းကမ်းလိုက်နာကြရန်၊ ပြည်သူလူထုကို အသိပေးခြင်းများဆောင်ရွက်	လျက်ရှိပါသည်။ သို့ရာတွင် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ ခွင့်ပြုချက်မရှိသော အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်မှုများနှင့် စည်းကမ်းမဲ့အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်မှုများမှာ လျော့နည်းသွားခြင်းမရှိဘဲ ပိုမိုများပြားလာခြင်းကြောင့် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ ခွင့်ပြုချက်မရှိသော အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာမြေရှင်၊ လိုင်စင်ကန်ထရိုက်တာ၊ လိုင်စင်အင်ဂျင်နီယာနှင့် ကန်ထရိုက်လိုင်စင်မရှိသော အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်သူတို့ကို တည်ဆဲဥပဒေနှင့်အညီထိရောက်စွာအရေးယူဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်း အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံ များဆောက်လုပ်ခွင့် ပြုရာ၌ ဘေးဝဲနှင့်ယာတွင် အထပ်မြင့် အဆောက်အအုံများရှိပါက နောင်တစ်ချိန်အငြင်းပွားမှု မဖြစ် စေရေး အတွက်မူလရှိပြီး အထပ်မြင့် အဆောက်အအုံများ၏ ဖြောင့်မတ်မှုအနေအထားကို တိုင်းတာခြင်း၊ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဆောက်လုပ်ပြီးစီးသွားသည့် အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံများ၏ ဖြောင့်မတ်မှုအနေအထားကို တိုင်းတာခြင်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန်၊ အဆောက်အအုံ တိုင်းတာရေး အင်ဂျင်နီယာလိုင်စင်များကို သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ စိစစ်ထုတ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ လျှောက်ထားလိုသူ အကြီးတန်းအင်ဂျင်နီယာလိုင်စင်ရပြီးသူ (သို့မဟုတ်) မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာ ကောင်စီမှ မှတ်ပုံတင်အင်ဂျင်နီယာ (Registered Engineer) လက်မှတ်ရရှိပြီး သူများသည် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ) သို့ (၁.၆.၂၀၁၄) နေ့မှ စတင်၍ လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း အသိပေးကြော်ငြာအပ်ပါသည်။
၃ ထပ်နှင့် အထက် (၈ ၁/၂ )ထပ် အထိ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ) မှ ဒီဇိုင်းစစ်ဆေးခြင်းကို ဖြေလျော့နိုင်မည့် အစီအစဉ်အကြောင်း သိကောင်းစရာ
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသည် အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)တွင် (၃)ထပ်နှင့် အထက် (၈၁/၂) ထပ်အထိ ဆောက်လုပ်မည့်အဆောက်အဦးများအတွက် ဒီဇိုင်းပုံစံတင်ပြရာ၌ စစ်ဆေးခြင်း အစီအစဉ်တွင် စစ်ဆေးချိန်များဖြေလျော့၍ ခွင့်ပြုမိန့်ကို မြန်မြန်ဆန်ဆန်ခွင့်ပြုနိုင်ရေးအား စီစဉ်နေမှုများကို လေ့လာဖော်ပြမည် ဖြစ်ပါသည်။
အများပြည်သူများအနေဖြင့် သာမန်အားဖြင့် ကိုယ်တိုင်သော်လည်းကောင်း၊ လိုင်စင်ရအင်ဂျင်နီယာ (ကန်ထရိုက်)များနှင့်သော်လည်းကောင်း၊ အဆောက်အဦးဆောက်လုပ်ရာတွင် (၃)ထပ်နှင့်အထက်၊ (၈၁/၂)ထပ် အထိသာ ဆောက်လုပ်လျက်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ထိုသို့ဆောက်လုပ်ရာတွင် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ တင်ပြစေရန် အင်ဂျင်နီယာဌာန (အဆောက်အအုံ) မှ သတ်မှတ်ချက်များထဲတွင် ဒီဇိုင်းပုံစံရေးဆွဲတင်ပြရခြင်းကိစ္စလည်း တစ်ခုအပါအဝင် ဖြစ်ပါသည်။
ထိုသို့တင်ပြသော Design (ပုံစံ)များကို ဌာနမှ တိုက်ရိုက်စစ်ဆေးပြီး ကိုက်ညီမှုရှိပါက ဆောက်လုပ်ရန် ခွင့်ပြုမိန့်ချမှတ်ပါသည်။ ခွင့်ပြုမိန့်ချမှတ်နိုင်ရေးတွင် ဒီဇိုင်းကို SEC (Structure Engineer Certificate) (ဒီဇိုင်းအင်ဂျင်နီယာလက်မှတ်ရ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသူ) တစ်ဦးတည်းက တာဝန်ယူ၍ တင်ပြရပါသည်။ အဆိုပါ တင်ပြသောဒီဇိုင်းတွင် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရသော်လည်းကောင်း၊ Quality control အရသော်လည်းကောင်း၊ ဆောက်လုပ်သည့်အပိုင်းတွင်ရှိလာနိုင်သည့် လိုအပ်ချက်အရလည်းကောင်း၊ ဒီဇိုင်းပြုပြင်တင်ပြရန် SEC ထံ ပြန်လည်ပေးအပ်သည့်အခါ SEC နှင့် ကန်ထရိုက် (သို့မဟုတ်) ဆောက်လုပ်မည့်လုပ်ငန်းရှင်တို့မှ ပြန်လည်တင်ပြရန် အချိန်ကြန့်ကြာနေမှုများရှိလာခဲ့ပါသည်။
ထိုအခါ အကျိုးတူပူးပေါင်းသော မြေရှင်ကသော်လည်းကောင်း၊ ကြိုပွိုင့်အဖြစ် အခန်း၀ယ်ယူသူများ အနေဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ ပြန်လည်တင်ပြရန် စေခိုင်းမှုအပေါ် အထင်မှား အမြင်မှားမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း၊ မရိုးဖြောင့်သော သဘောအဖြစ် ထင်မြင်ခြင်းများ ရံဖန်ရံခါရှိလာကြောင်း တွေ့ရှိလာရပါသည်။ ထို့ကြောင့် ယင်းအခြေအနေများတွင် အဓိကကျသည့်အချက်အား စိစစ်သောအခါ ဒီဇိုင်းပုံစံ ကို SEC တစ်ဦးတည်းတာဝန်ခံခြင်းထက် SEC ၏ တင်ပြသော ဒီဇိုင်းပုံစံကို ပြန်လည်၍ Checking လုပ်သောအဖွဲ့ Team (သို့မဟုတ်) Acareded Checker (AC) တစ်ဦးရှိရန် လိုအပ်လာကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ရပါသည်။
ဌာနသည် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ လမ်းညွှန်မှုကိုခံယူ၍ စင်္ကာပူနိုင်ငံရှိ BAC (Building And Construction Authority) ၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို လေ့လာခြင်း၊ အင်ဂျင်နီယာပညာရှင်ကြီးများ၏ အကြံဉာဏ်များရယူခြင်း၊ ဌာန၏ အကြံပေးပညာရှင်တို့၏ အကြံပြုချက်များရယူခြင်း၊ SEC များကို ဖိတ်ကြား၍ အခက်အခဲများ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ အောက်ပါအချက်များ လုပ်ဆောင်ရန် ရရှိလာခဲ့ပါသည်-
(၁) အဆောက်အအုံ၏ ဒီဇိုင်းပုံစံကို SEC တစ်ဦးတည် တာဝန်ယူစေခြင်းထက်၊ ဌာန၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်း Guid Line Check List တို့ကို ကြိုတင်အသိပေးပြီး၊ လိုအပ်ပါက training ပေးထားသော AC (Acarded Checken) တစ်ဦးကို Checking ပြုလုပ်နိုင်ရေးအတွက် AC လက်မှတ်ထုတ်ပေးကာ ဆောင်ရွက်စေရန်။
(၂) SEC ကို AC အဖြစ် တိုးမြှင့်ခွင့်ပြုနိုင်သော်လည်း ဒီဇိုင်းတစ်ခုတည်းကို SEC နှင့် AC တစ်ဦးတည်းက တာဝန်ယူတင်ပြမှုကို လက်မခံဘဲ၊ SEC ဒီဇိုင်းကို AC အခြားတစ်ဦးက စိစစ် Checking ပြုလုပ်ပြီး၊ အပြန်အလှန်လိုအပ်ချက်များအား ဒီဇိုင်းတွက်ချက်မှုအကြိမ် အနည်းဆုံး အရေအတွက်ဖြင့် စိစစ်တာဝန်ယူပြီးမှ ဌာနသို့တင်ပြစေရန်။
(၃) မြေပြင် Quality Control နှင့် Safety များကို Inspection team ဖွဲ့ပြီး အရည်အချင်း Quality ပြည့်မီသည့် License Suveyors (L.S) များဖြင့် စိစစ်ဆောင်ရွက်သွားရန်။
(၄) အရည်အသွေးပြည့်မီသည့် License Checker (LC) များပေါ်ထွက်လာရေး သင်တန်းပေး ဆောင်ရွက်သွားရန်။
(၅) လုပ်ငန်းစဉ်တိုင်း၌ စီမံချက်များရေးဆွဲပြီး မြန်မာအင်ဂျင်နီယာအသင်း MES နှင့် မြန်မာ အင်ဂျင်နီယာကောင်စီ MEC တို့၏ အကူအညီကို ရယူဆောင်ရွက်ရန်။
အထက်ဖော်ပြပါအချက်များကို ဆောင်ရွက်စေခြင်း၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ SEC တစ်ဦးတည်းက ဒီဇိုင်းပုံစံများ တာဝန်ယူမှုကြောင့် ဌာနနှင့် SEC အကြား ဒီဇိုင်းပုံစံလိုအပ်ချက်များအား လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ သတ်မှတ်ပုံစံနှုန်းများနှင့် ညီညွတ်သည်အထိ အကြိမ်ကြိမ်စိစစ်ဆောင်ရွက်နေသော အချိန်ကာလကို ဖြေလျော့ပြီး၊ SEC ကို AC က Checking လုပ်ပြီး၊ အပြန်အလှန် စိစစ်ရေးဆွဲစေ၍ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း စံချိန်စံညွှန်းနှင့် ကိုက်ညီသော ဒီဇိုင်းပုံစံကို ဌာနသို့ တင်ပြစေခြင်းဖြင့် ဌာနမှ Check Points များလောက်ကိုသာ စစ်ဆေးပြီး၊ ခွင့်ပြုမိန့် အမြန်ဆုံးရရှိစေရေး ဆောင်ရွက်နိုင်မည့်နည်းလမ်းအဖြစ် ရည်ရွယ်ဆောင်ရွက်စေခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
အဆောက်အဦးပုံစံဒီဇိုင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စစ်ဆေးရာတွင်လည်း အထပ်အမြင့်ပေါ်မူတည်၍ စစ်ဆေးမှုပုံစံ စစ်ဆေးသောအဖွဲ့များမှာ တူညီမှုမရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်-
(၁) (၃)ထပ်အထိ အဆောက်အအုံကို ဆောက်လုပ်ရန် တင်ပြချက်ပုံစံဒီဇိုင်းတွင် အောက်ဖော်ပြပါ သတ်မှတ်ချက်များရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်-
(က) ဒီဇိုင်းပုံစံတင်ပြမည့်မြေသည် ဂရန်မြေမဟုတ်ခြင်း၊ ဝယ်ယူသူသည် မှတ်ပုံတင်စာချုပ် စာတမ်းနှင့် ဝယ်ယူထားမှုမရှိခြင်းတို့ကြောင့် (၃)ထပ်ဆောက်လုပ်ရန် တင်ပြပါက သတင်းစာမှ ကန့်ကွက်သူရှိ/မရှိ ကြေငြာ၍ ကန့်ကွက်သူမရှိရန် လိုအပ်ခြင်း။
(ခ) အစိုးရပိုင်သော မြေမဟုတ်ကြောင်း တင်ပြနိုင်ရန် လိုအပ်ခြင်း။
(ဂ) ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ (သို့) အခြားအဖွဲ့အစည်း၊ ပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ လမ်းမြေကျူးကျော်ထားရှိမှု မရှိကြောင်း တင်ပြနိုင်ရန် လိုအပ်ခြင်း။
(ဃ) ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုခုနှင့် စပ်လျဉ်းပိုင်ဆိုင်သောမြေမဟုတ်ကြောင်း တင်ပြနိုင်ရန် လိုအပ်ခြင်းတို့ကို မှန်ကန်စွာတင်ပြနိုင်မည်ဆိုပါက ၃-ထပ်ကို (၁၂ပေ၊ ၉ပေ၊ ၉ပေ) အမြင့်များအတိုင်းသာ ဆောက်လုပ်ခွင့်ပြုပြီး၊ အမိုးကို ရိုးရိုးအမိုး (သွပ်/ အင်္ဂတေပြားအမိုး/ အုတ်ကျွတ်မိုး) သာ ဖြစ်ရမည်ဖြစ်ပြီး ကွန်ကရိအမိုး (Slap-roof) မိုးခွင့်မပြုရန် သတ်မှတ်ထားကြောင်း၊ ထိုသို့ပြည့်စုံပါက ဆောက်လုပ်ခွင့်ပြုမိန့် ရရှိနိုင်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
(၂) (၃)ထပ်နှင့် (၈၁/၂)ထပ်အထိ ဆောက်လုပ်မည့်ဒီဇိုင်းပုံစံများတွင် ဖော်ပြခဲ့သော (၃) ထပ်သည် ဂရန်မြေဖြစ်ပြီး မြေပုံမြေရာဇဝင်ပြည့်စုံပါက ဆောက်လုပ်မည့်ပုံစံအား အခြားအထပ်များ နည်းတူ ဌာန၏သတ်မှတ်ထားသော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း SEC က တာဝန်ယူဒီဇိုင်းပုံစံ ရေးဆွဲ၍ AC နှင့်အပြန်အလှန်စစ်ဆေး တင်ပြစေသော နည်းလမ်းဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
(၃) (၉) ထပ်မှ (၁၂၁/၂)ထပ်အထိ ဒီဇိုင်းပုံစံများအား ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးဌာနမှ တာဝန်ယူစစ်ဆေးမည်ဖြစ်ပြီး စစ်ဆေးသောအဖွဲ့မှာ (High-Rise Building Quality Control and inspection Team (HTC)) ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
(၄) (၁၂၁/၂)ထပ်နှင့် အထက်ကို နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီအစိုးရ လက်ထက်ကတည်းက ဖွဲ့စည်းတာဝန်ယူပေးခဲ့သော မြို့ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် အိုးအိမ်ဦးစီးဌာနမှ ပညာရှင်များ၊ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ အဖွဲ့ဝင်များ၊ ပြင်ပ ပညာရှင်များ၊ မြန်မာအင်ဂျင်နီယာအသင်း MES နှင့် မြန်မာအင်ဂျင်နီယာကောင်စီ MEC မှ ပညာရှင်များ ပါဝင်သော ဘုတ်အဖွဲ့ (CQHP) Committee For Quality Control of High Rise Building Project ဖြင့် ဒီဇိုင်းပုံစံများကို စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ အထက်ပါ အဖွဲ့အသီးသီးမှ စစ်ဆေးအတည်ပြုသော ပုံစံဒီဇိုင်းများကို ခွင့်ပြုမိန့်ထုတ်ပေးသောအခါတွင်မူ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)က ဆောင်ရွက်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ထို့ကြောင့် အဆောက်အအုံတစ်ခု၏ ပုံစံဒီဇိုင်းသည် အထပ်အမြင့်များပေါ်တွင် မူတည်ပြီး စစ်ဆေးသည့် အဖွဲ့ ကွဲပြားမှုရှိကြောင်း သိရှိရသကဲ့သို့ (၃)ထပ်နှင့် (၈၁/၂)ထပ်အထိ အဆောက်အအုံ ဒီဇိုင်းပုံစံများ တင်ပြရာတွင် ဆောက်လုပ်မည့်သူ၊ နေထိုင်မည့်သူများအတွက် ပိုမိုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေရေးအတွက် အချိန်ဖြေလျှော့မည့် နည်းလမ်းကိုပါ သက်ဆိုင်ရာဌာန၏ အင်ဂျင်နီယာအရာရှိကြီးတစ်ဦးမှ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များအား လေ့လာ သိရှိရသည့်အတိုင်း စုစည်းတင်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အန္တရာယ်ရှိ အဆောက်အအုံဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက် အနည်းငယ်ပြောင်း
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသည် အန္တရာယ်ရှိ အဆောက်အအုံများ စိစစ်ဖျက်သိမ်း အသစ်ဆောက် လုပ်ငန်းစဉ်များအနက်မှ အသစ်ဆောက်လုပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်သော လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုကို ယခင်ကဲ့သို့မဟုတ်ဘဲ မြေရှင်နှင့်နေထိုင်သူများကိုယ်တိုင် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်မည့်စနစ်သို့ ၂၀၁၃ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ(၁၀)ရက်မှစပြောင်းလဲ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိကြောင်း အင်ဂျင်နီယာဌာန (အဆောက်အအုံ)မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက The Trade Times ဂျာနယ်သို့ ပြောကြားသည်။
ယခင်က တင်ပြအန္တရာယ်ရှိ အဆောက်အအုံများကို ပထမအဆင့်အနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင်သောအဖွဲ့များဖြင့် လူနေထိုင်ရန် သင့်/မသင့် စစ်ဆေးသည်။ ဒုတိယ အဆင့်အနေဖြင့် နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများတွင် လိုအပ်သည်များ ကြေငြာသည်။ တတိယအဆင့်အနေဖြင့် ပိုင်ဆိုင်မှုမှန်သူ မြေရှင်ဖြစ်ပါက အဆိုပါမြေရှင်ရွေးချယ်သော ကန်ထရိုက်ဖြင့် လုပ်ငန်းများအား ဆက်လက်ဆောင်ရွက်စေသည်။ မြေရှင်အနေဖြင့် ပိုင်ဆိုင်မှုကို သတ်မှတ်ချက် အခိုင်အမာ ပြဆိုနိုင်ခြင်းမရှိ (သို့မဟုတ်)နိုင်ငံခြားသားပိုင်ဖြစ်ပါက ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ တင်ပြပြီး အဆိုပါအဆောက်အအုံတွင် နေထိုင်သူ အများစုဆန္ဒပြုရွေးချယ်သော ကန်ထရိုက်တာဖြင့် လုပ်ငန်းများအား ဆက်လက် လုပ်ကိုင်စေခဲ့သည်။ ထို့နောက်မှ မြေရှင်နှင့် နေထိုင်ကြသူများ ခံစားခွင့်အသီးသီးကို ညှိနှိုင်းခွဲဝေပြီး အသစ်ဆောက်လုပ်ထွက်ပေါ်လာမည့် အကျိုးအမြတ်ကို မြေရှင်နှင့်ကန်ထရိုက်တာတို့အား တစ်ဝက်စီ ပိုင်ဆိုင်စေသောစနစ်ကို အခန်းခွဲဝေယူစေခြင်းအားဖြင့် ကျင့်သုံးခဲ့သည်။
“အရင်တုန်းကတော့ အန္တရာယ်ရှိ အဆောက်အအုံတွေကို အသစ်ပြန်လည်ဆောက်လုပ်တဲ့ ကိစ္စတွေမှာ စည်ပင်က စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာကို ကြားဝင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာပေါ့။ အဲဒါက မြေရှင်လည်းရှိ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုလည်း ကိုက်ညီတဲ့အခြေအနေမျိုးရယ်၊ ပြီးတော့ ပိုင်ဆိုင်မှုကိုက်ညီတဲ့မြေရှင်မရှိဘဲ မဖြစ်မနေ အသစ်ဆောက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ အခြေအနေမျိုးတွေရယ်မှာ ကြားဝင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာပါ။ ပိုင်ဆိုင်မှု အခြေအနေမှာ နိုင်ငံခြားသားပိုင်အမည်ပေါက် ဖြစ်နေရင်တော့ ၁၉၈၇-မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်း လွှဲပြောင်းခြင်းကို ကန့်သတ်သည့်ဥပဒေအတိုင်း ပြည်ထဲရေးဒုတိယဝန်ကြီးပါဝင်တဲ့ စိစစ်ရေးအဖွဲ့ကို တင်ပြပြီးမှ သတ်မှတ်ချက်တွေအတိုင်း ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ အခုလို သတ်မှတ်ချက်တွေကို ပြောင်းလိုက်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းကတော့ အဆောက်အအုံအသစ်ကို ဆောက်လုပ်တဲ့အချိန်မှာ မလိုလားအပ်တဲ့ ပြဿနာတွေ မဖြစ်ပေါ်စေဖို့ အတွက်ပါ။ သတ်မှတ်ချက်အသစ်အရ ပိုင်ရှင်နဲ့ နေထိုင်သူတွေအနေနဲ့ အသစ်ဆောက်မယ့် အဆောက်အအုံကို သူတို့အချင်းချင်း ညှိနှိုင်းပြီး နှစ်သက်သလို လုပ်ပိုင်ခွင့်လည်း ရသွားတာပေါ့”ဟု ၎င်းကပြောသည်။
ပြောင်းလဲလိုက်သော သတ်မှတ်ချက်မှာ အန္တရာယ်ရှိ အဆောက်အအုံများ ဖျက်သိမ်းအသစ် ဆောက်လုပ်ငန်းစဉ်များအနက်မှ ပထမအဆင့်နှင့် ဒုတိယအဆင့်တို့ကို ယခင်အတိုင်း ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်သော်လည်း တတိယအဆင့် လုပ်ငန်းစဉ်မှာ ပိုင်ဆိုင်မှုမှန်သူ မြေရှင်သည် မိမိတို့ အစီအစဉ်ဖြင့် လုပ်ငန်းများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင် ညှိနှိုင်းခွဲဝေသွားနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ပိုင်ဆိုင်မှုစိစစ်ရန် လိုအပ်သော မြေရှင်များအနေဖြင့်မူ ကိုယ်တိုင်ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ တင်ပြပြီးမှ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားရမည်ဖြစ်သည်။ ပိုင်ဆိုင်မှုစိစစ်ရန် လိုအပ်သည့် မြေကွက်၊ အဆောက်အအုံများကို ယခင်ကတည်းက ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာသို့ တင်ပြဆောင်ရွက်ခဲ့ရသည်။
ရန်ကုန်မြို့တွင် အန္တရာယ်ရှိ အဆောက်အအုံများ ဖျက်သိမ်းအသစ်ဆောက်လုပ်ငန်းစဉ်များကို ၁၉၉၄ခုနှစ်မှ စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၃ခု ဒီဇင်ဘာလအထိ အဆောက်အအုံပေါင်း ၁၆၆၃လုံး ရှိသွားပြီဖြစ်သည်။ ထိုစာရင်းများအနက်မှ ၁၂၈၉ လုံးမှာ အသစ်တည်ဆောက်ပြီး ပိုင်ဆိုင်သူများထံ လွှဲပြောင်းအပ်နှံပြီးဖြစ်ကာ ၂၆၇ လုံးမှာမှာမူ ဆောင်ရွက်ဆဲ၊ တည်ဆောက်ဆဲ၊ လျာထားဆဲဖြစ်သည်။ ထိုဆောင်ရွက်ဆဲ အဆောက်အအုံများကိုမူ သတ်မှတ်ချက်ဟောင်းဖြင့်သာ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည်ဟု သိရသည်။
ထို့နောက်စာရင်းတွင် ကျန်ရှိသည့် အန္တရာယ်ရှိ အဆောက်အအုံ ၁၀၇ လုံး၏ဆောင်ရွက်ဖွယ်ရာများကိုလည်း အချိန်သုံးလအတွင်း ပြီးစီးအောင် အမြန်ဆုံးဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါ တာဝန်ရှိသူက ဆိုသည်။
“အဲဒီ အဆောက်အအုံတွေနဲ့ သက်ဆိုင်သူတွေကို ဆက်သွယ်ပြီး လုပ်ငန်းအမြန်ဆုံး လုပ်ကိုင်နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ သူတို့က ဆန္ဒရှိရင်တော့ သူတို့ကို သတ်မှတ်ချက်ဟောင်းနဲ့ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ပေးသွားဖို့ စဉ်းစားထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြန်မဆက်သွယ်ရင် ဒါမှမဟုတ် ဆန္ဒမရှိရင်တော့ အဲဒီ ၁၀၇ လုံးကို သတ်မှတ်ချက်အသစ်နဲ့ပဲ ဆောင်ရွက်စေမှာပါ”ဟုလည်း ရှင်းလင်းသည်။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီအနေဖြင့် ၂၀၁၃ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ (၁၀)ရက် နောက်ပိုင်းမှ စတင်တင်ပြလာသည့် အန္တရာယ်ရှိ အဆောက်အအုံအားလုံးကို ဤသို့ အသစ်ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်လိုက်သော မူအတိုင်း ကျင့်သုံးဆောင်ရွက် သွားလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။
The Trade Times-Issue 91
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်း အန္တရာယ်ရှိ အဆောက်အအုံများ သတ်မှတ်၍ အသစ်ပြန်လည်ဆောက်လုပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မူဝါဒသစ်ကို ချမှတ်ကာ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ ယခင်က အန္တရာယ်ရှိ အဆောက်အအုံအဖြစ် သတ်မှတ်ပေးပါရန် တင်ပြလာသည့် အဆောက်အအုံများကို စစ်ဆေးပြီး အန္တရာယ်ရှိ အဆောက်အအုံအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်း၊ အဆောက်အအုံသစ်တွင် မူလနေထိုင်သူများကို ကော်မတီမှ အန္တရာယ်အဆောက်အအုံ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ စိစစ်၍ ပြန်လည်နေရာချထားခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သော်လည်း မူဝါဒသစ်တွင် ကော်မတီအနေဖြင့် အန္တရာယ်ရှိ အဆောက်အအုံအဖြစ် စစ်ဆေးပေးပါရန် လျှောက်ထားတင်ပြလာသည့် အဆောက်အအုံများကို အန္တရာယ်ရှိ/မရှိ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးပြီး နေထိုင်သူများအတွက် အန္တရာယ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါက အန္တရာယ်ရှိ အဆောက်အအုံအဖြစ် သတ်မှတ်ကြေညာခြင်းကိုသာ ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး အဆောက်အအုံရှိ နေထိုင်သူများ ပြန်လည်နေရာချထားခြင်းကို ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းမပြုတော့ဘဲ နေထိုင်သူများနှင့် မြေရှင်တို့မှ မိမိအစီအစဉ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ သို့ပါ၍ အန္တရာယ်ရှိ အဆောက်အအုံအဖြစ် သတ်မှတ်ထားပြီး ပြန်လည် ဆောက်လုပ်ရခြင်း မရှိသေးသော အန္တရာယ်ရှိ အဆောက်အအုံများ၏ မူလနေထိုင်သူများနှင့် မြေရှင်တို့ အနေဖြင့် အဆောက်အအုံသစ် ဆောက်လုပ်ရန်ကိစ္စကို အမြန်ဆုံးညှိနှိုင်းပြီး ကော်မတီသို့ အမြန်ဆုံးလာရောက် ဆက်သွယ်တင်ပြရန်နှင့် ကော်မတီမှ သတ်မှတ်သည့် အချိန်ကာလအတွင်း ညှိနှိုင်းပြေလည်မှုမရရှိပါက အန္တရာယ်ရှိ အဆောက်အအုံ မူဝါဒအသစ်စာရင်းတွင် ထည့်သွင်းဆောင်ရွက်ပြီး မူလနေထိုင်သူများ ပြန်လည်နေရာချထားခြင်းကို ကော်မတီအနေဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးတော့မည် မဟုတ်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။
ဌာနမှူး ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)
သင်ဟာ မြေရှင်တစ်ဦးလား။ သင့်မြေကွက်မှာ ကန်ထရိုက်တိုက် အကျိုးတူ ပူးပေါင်းဆောက်လုပ်ချင်လို့ ကန်ထရိုက်ရှာနေပြီလား၊ ဒါဆိုရင် ဒါတွေသိဖို့လိုပါမယ်။
သင့်မြေကွက်ဟာ ဂရန်အမည်ပေါက် (အမည်ပေါက်သူ သက်ရှိထင်ရှား) ဖြစ်မယ်ဆိုရင် အကောင်းဆုံးပေါ့။ မြို့တော်စည်ပင်မှာ အချိန်ကာလ မကြာမြင့်စေရဘဲ ဆောက်လုပ်ခွင့် အမြန်ဆုံး ပါလိမ့်မယ်။ ဂရန် အမှန်၊ သတ်မှတ်ချက်တွေ ကိုက်ညီရင် အများဆုံး ၄၅ ရက်အတွင်းမှာ ဆောက်လုပ်ခွင့် ကျရပါစေ့မယ်လို့ မြို့တော်စည်ပင်က အာမခံထားတယ်။ သင့်မြေကွက်ပေါ် မူတည်ပြီး သတ်မှတ်ချက်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ အထပ်အမြင့် ရပါလိမ့်မယ်။ တစ်ခုပဲရှိမယ်။ ကန့်သတ်ထားတဲ့ဇုန် (ဥပမာ ရွှေတိဂုံစေတီအနီး) များထဲမှာဆိုရင်တော့ ဇုန်အလိုက်သတ်မှတ်ထားတဲ့ အမြင့်ပဲရလိမ့်မယ်။
ဂရန်အမည်ပေါက် မဟုတ်ဘဲ အရပ်စာချုပ်နဲ့ဝယ်ယူထားတဲ့မြေကွက်ဆိုရင်တော့ ရွေးချယ်ရမယ့် လမ်းကြောင်းနှစ်ခုရှိတယ်။ တစ်ခုကဂရန်ကို အမည်ပေါက်ပြန်လျှောက်ပြီးမှ ဆက်လုပ်ဖို့။ နောက်တစ်ခုကတော့ အရပ်စာချုပ်နဲ့ပဲ လျှောက်ထားပြီးဆက်လုပ်ဖို့။ ဂရန်အမည်ပေါက် ရပြီဆိုရင်တော့ အပေါ်စာပိုဒ်ကလိုပဲပေါ့။ အရပ်စာချုပ်နဲ့ လျှောက်ထားရင်တော့ စည်ပင်မှာ အချိန်နည်းနည်း ပိုပေးရပါလိမ့်မယ်။ စည်ပင်က ပထမဆုံး သင့်ရဲ့မြေကွက်ရာဇဝင်ကို မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့် မြေယာဌာနမှာ မေးမြန်းပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီဌာနက စိစစ်ပြီး သင့်မြေကွက်ဟာ အစိုးရမြေစာရင်းမပေါက်ဘူး၊ နိုင်ငံခြားသားပိုင်မြေ စာရင်းမပေါက်ဘူးဆိုရင် တိုင်းရင်းသားပိုင် မြေကွက်စာရင်းပေါက် ဖြစ်နေသည့်တိုင် ခွင့်ပြုနိုင်ကြောင်း စည်ပင်ကိုအကြောင်းပြန်ပါလိမ့်မယ်။ အချိန်ကတော့ သုံးပတ်လောက် ကြာနိုင်တယ်။ ပြီးရင် စည်ပင်က သတင်းစာမှာ ထည့်ပြီးတော့ ကန့်ကွက်ရန်ရှိမရှိ စိစစ်ပါဦးမယ်။ ကန့်ကွက်သူရှိရင်တော့ လိုအပ်သလို ဆက်လက်စိစစ်ပြီးမှ အတည်ပြုပါလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့မှ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေနဲ့အညီ ဆက်ပြီးဆောင်ရွက်မှာဆိုတော့ ကန့်ကွက်သူမရှိရင်တောင် စုစုပေါင်းကာလ အနည်းဆုံး နှစ်လခွဲလောက်ကြာမှ ဆောက်လုပ်ခွင့် ကျလာနိုင်ပါမယ်။ ကန့်ကွက်သူ ရှိရင်တော့ ပိုကြာမှာပေါ့။ အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့်တော့ အရပ်စာချုပ်နဲ့ဆိုရင် သုံးထပ်အထိပဲ ဆောက်လုပ်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။
အရပ်စာချုပ်အရ သင်ပိုင်ဆိုင်သော်လည်း သင့်မြေကွက်ဟာ မြေရာဇဝင်မှာ နိုင်ငံခြားသားပိုင်စာရင်း ပေါက်နေခဲ့ရင်တော့ စည်ပင်က ပြည်ထဲရေးဌာနမှာရှိတဲ့ မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းများ ကန့်သတ်တဲ့ အဖွဲ့ထံ ဆက်လက်တင်ပြပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီအဖွဲ့က စိစစ်ပြီး ခွင့်ပြုနိုင်မယ့် အနေအထား အချက်အလက်များတွေ့ရင် ခွင့်ပြုနိုင်ကြောင်း အကြောင်းပြန်ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီတော့မှ စည်ပင်က အပေါ်က လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေအတိုင်း ဆက်လုပ်သွားပါလိမ့်မယ်။ အချိန်ကတော့ လိုအပ်သလောက် ကြာနိုင်ပါတယ်။
မြေရှင်များ……ကန်ထရိုက်ကို ရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာတော့ သတိထားပါ။ အနည်းဆုံး သင် နှစ်မျိုးနှစ်စား တွေ့လိမ့်မယ်။ တရားဝင်လိုင်စင်ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ ကန်ထရိုက်တာ/ကုမ္ပဏီများနဲ့ တရားဝင်လိုင်စင် ကိုင်မထားတဲ့ (အငှားလိုင်စင်နဲ့လို့ပြောတတ်တဲ့) လိုင်စင်မဲ့ ကန်ထရိုက်တာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ လိုလားချက်တွေနဲ့ ညှိနှိုင်းယူတဲ့အခါမှာ တစ်ခါတစ်ရံ အလိုက်လျောနိုင်ဆုံး သူတွေက လိုင်စင်မဲ့ ကန်ထရိုက်တာတွေ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ သူတို့တွေအကြောင်းကို သိထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ပြဿနာဖြစ်တတ်တာများတဲ့ လိုင်စင်မဲ့ ကန်ထရိုက်တာတွေနဲ့ဆောက်မိလို့ တစ်စုံတစ်ရာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် စည်ပင်ကတော့ လိုင်စင်မဲ့ကန်ထရိုက်တာတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘာအာမခံချက်မှ ပေးမထားပါဘူး။ တရားဝင်လိုင်စင် ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ ကန်ထရိုက်များ၊ ကုမ္ပဏီများကတော့ ပြဿနာ နည်းပါတယ်။ စည်ပင်အနေနဲ့ ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းပေးနိုင်တယ်။ ဒီတော့ ကန်ထရိုက်ရွေးရင် ဒီအချက်တွေနဲ့စဉ်းစားပြီး ရွေးချယ်သင့်တယ်လို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။
မြေရှင်တွေအနေနဲ့ လက်ရှိအချိန်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာတချို့ကို သိထားသင့်ပါတယ်။ ခေတ်အခါအရ ဆင်ခြေဖုံးမြို့နယ်တွေမှာ ကန်ထရိုက်တိုက်တွေ အလျှိုအလျှိုပေါ်လာတယ်။ တချို့ကအဆင်ပြေပြေနဲ့ တိုက်ခန်းပေါ် တက်နေနိုင်ကြပြီ။ ဒါပေမယ့် တချို့ကတော့ ပြဿနာကိုယ်စီနဲ့ပါ။ ဆောက်ခွင့် မကျသေးဘဲဆောက်လို့ ဒဏ်ကြေးဆောင်ရတာနဲ့၊ ခွင့်ပြုတာထက် အမြင့်၊ အထပ်တွေ ပိုဆောက်မိလို့ ဒဏ်ကြေးဆောင်ရတာနဲ့၊ လုပ်ငန်းစဉ်အတိုင်း မလုပ်လို့ လူနေထိုင်ခွင့် မကျလာတာနဲ့ အမျိုးမျိုးသော ပြဿနာတက်နေတဲ့ အဆောက်အအုံပေါင်း ၁,၂ဝဝ ကျော်တောင် ရှိနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပြဿနာကင်းကင်း၊ စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာ စီးပွားရေးလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေ အဆင့်လိုက် လုပ်မယ့်ကန်ထရိုက်၊ သတ်မှတ်ချက်တွေ လိုက်နာမယ့် ကန်ထရိုက်တွေနဲ့သာ ညှိနှိုင်းပူးပေါင်းသင့်ပါတယ်။
သင်ဟာ ကန်ထရိုက်တိုက်ခန်း ဝယ်ယူနေထိုင် သို့မဟုတ် ဝယ်ယူမြှုပ်နှံဖို့ စဉ်းစားနေသူလား…..။ ဒါဆိုရင်တော့ အထက်က အချက်လေးတွေ သိထားပြီး ခေါင်းမရှုပ်ရစေဖို့ စည်းမျဉ်းကိုက်ညီပြီးတော့ တရားဝင်လူနေထိုင်ခွင့် ရရှိထားတဲ့ တိုက်ခန်းလေးတွေသာ ရွေးချယ်ပါ။ စျေးကြိုက်တယ်ဆိုပြီး အလျင်အမြန် ဆုံးဖြတ်ချက်ချ မိရင်တော့ ကံဆိုးရင် ရင်မောရပါလိမ့်မယ်။ ကြိုပွိုင့်ဝယ်မယ်ဆိုရင် ဆောက်မယ့်ကန်ထရိုက်တာ၊ မြေရှင်တို့ကို သေသေချာချာ စိစစ်ပြီးမှ ဆုံးဖြတ်သင့်ပါတယ်။
သင်ဟာလိုင်စင်မဲ့ ကန်ထရိုက်တာလား။ လိုင်စင်အမြန်ဆုံးလျှောက်ထားသင့်ပါပြီ။ အခုလက်ရှိအချိန်မှာ ဥပဒေတွေအရ လိုင်စင်မဲ့ ကန်ထရိုက်တွေကို တိုက်ရိုက် မထိခိုက်သေးပေမယ့် မြို့တော်စည်ပင်က နောင်ဆိုရင်လိုင်စင်မဲ့ ကန်ထရိုက်တာတွေကိုပါ အရေးယူနိုင်မယ့် ဥပဒေတွေ ရေးဆွဲ အတည်ပြုပြီး ဖြစ်နေပါပြီ။ နည်းဥပဒေတွေ ရေးဆွဲနေဆဲဖြစ်ပြီး အဲဒါအတည်ပြုပြီးသွားရင် မြေရှင်နဲ့ ပါဝင်ပတ်သက် သူများအားလုံး (ကန်ထရိုက်အစ ပန်းရန်အလယ် လက်သမားအဆုံး) အကုန်လုံးကို အရေးယူတော့ မယ်လို့ ပြောနေပါပြီ။ ဒါကြောင့် လုပ်သင့်တာလေးတွေ လုပ်ပြီး၊ မလုပ်သင့်တာလေးတွေ မလုပ်ရင် အကောင်းဆုံးပါ။
သင်ဟာ တရားဝင်လိုင်စင် ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ ကန်ထရိုက်တာ သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီလား။ ဒါဆိုရင် စည်ပင်က စစ်ဆေးခွင့်ပြုထားတဲ့ အတိုင်းအတာ၊ ပစ္စည်းအမျိုးအစား၊ အချိုးအစားများ အတိုင်း ဆောက်ပါ။ သင်ဆောက်လုပ်တဲ့ အဆောက်အအုံမှာကြီးမားတဲ့ ချွတ်ယွင်းချက်တွေ ဖြစ်ပေါ်တွေ့ရှိ လာခဲ့မယ်ဆိုရင်မြို့တော်စည်ပင်က သင့်ရဲ့လိုင်စင်ကိုပိတ်သိမ်းသည်အထိ အရေးယူနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလိုအရေးယူခဲ့မှုတွေလည်းရှိပါတယ်။
ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် ကန်ထရိုက်တိုက်နဲ့ တစ်နည်းတစ်ဖုံ ပတ်သက်မှု ရှိလာနိုင်စရာ အခြေအနေမျိုး ရှိနေရင်တော့ အောက်ပါ ဗဟုသုတလေးတွေ သိထားဖို့လိုပါမယ်။
အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် အဆောက်အအုံရဲ့အမြင့်ကို မြေကွက်မျက်နှာစာ လမ်းအကျယ်ရဲ့ နှစ်ဆအထိ၊ ဆောက်လုပ်မယ့် အဆောက်အအုံမျက်နှာစာရဲ့ သုံးဆအထိ ခွင့်ပြုနိုင်ပါမယ်။ ယနေ့ခေတ်အခါအရ မြေကွက်အကျယ် ၂,၅ဝဝ စတုရန်းပေနဲ့အထက်ဆိုရင်တော့ ကားပါကင်နေရာလိုပါမယ် (လက်ရှိအချိန် အတွက် ဒီသတ်မှတ်ချက်က မဖြစ်မနေလိုက်နာရမယ့် သတ်မှတ်ချက်ပါ)။ အဆောက်အအုံ အမြင့် ၆၂ ပေကျော်ရင်တော့ ဓာတ်လှေကားထည့်ပေးရပါမယ်။ အဆောက်အအုံရဲ့ နံဘေးဘက်မှာ တစ်ပေစီ ချန်ရပါမယ်။ အနောက်ဘက်မှာ လမ်းကြား/မီးတားလမ်းရှိရင် တစ်ပေချန်ရမှာဖြစ်ပြီး အဲဒါတွေမရှိရင် ခြောက်ပေချန်ရပါမယ်။
လုပ်ငန်းစဉ် အဆင့်ဆင့်တွေကို ပွဲစားမလို တိုက်ရိုက်လာရောက် တင်ပြနိုင်ပြီး မြေရှင်ဘက်က မြေမှန်၊ ဂရန်မှန်ပြီး ကန်ထရိုက်ဘက်က တင်ပြအဆောက်အအုံ ပုံစံမှန်၊ တင်ပြတွက်ချက်မှုတွေ မှန်မယ်ဆိုရင် ဆောက်လုပ်ခွင့်ဟာ စည်ပင်မှာ ၄၅ ရက်ထက်ပိုမကြာပါဘူး။ ပုံစံတွက်ချက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ လိုအပ်တာတွေရှိမယ်ဆိုရင် စည်ပင်ကခေါ်ယူပြင်ဆင်စေတဲ့အခါ ကျွမ်းကျင်သူများ ကိုယ်တိုင် သွားရောက် ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။ မကျွမ်းကျင်သူတွေ သွားမိမယ်ဆိုရင်တော့ ဆိုလိုရင်းတွေ မမိရင် အခေါက်ခေါက်အခါခါ ထပ်သွားရပြီး အချိန်တွေ အလဟဿကုန်ပါတယ်။
အားလုံးမှန်ပြီး စနစ်တကျ တင်ပြဆောင်ရွက်ရင် စစ်ဆေးခအနေနဲ့ တစ်စတုရန်းပေကို ၃၆ ကျပ်နှုန်းသာ ကျသင့်မှာပါ။ ဒါပေမယ့် ခွင့်ပြုမိန့်မကျမီ ကြိုဆောက်မိမယ်ဆိုရင်တော့ တစ်စတုရန်းပေကို ကျပ် ၂,၅ဝဝ နှုန်း (၄ဝ၊ ၆ဝ အကွက်ဆိုရင် သိန်း ၆ဝ ခန့်) ဒဏ်ကြေး၊ ခွင့်ပြုအမြင့်/အထပ်ထက် ကျော်လွန်ဆောက်မိရင်တော့ တစ်စတုရန်းပေကို ကျပ် ၁၅,ဝဝဝ နှုန်း (၄ဝ၊၆ဝအကွက်ဆိုရင် သိန်း ၃၆ဝ ခန့်) ဒဏ်ကြေးဆောင်ရပါလိမ့်မယ်။ လိုအပ်ရင် ပြန်လည်ဖြိုဖျက်စေတာတွေလည်း ရှိပါမယ်။ ဒဏ်ကြေး ဆောင်ပြီးနောက် အဆောက်အအုံကို လူနေထိုင်ခွင့်ပြုခဲ့မယ်ဆိုရင်တောင် အဆောက်အအုံရဲ့ကြံ့ခိုင်မှုကို တာဝန်မယူနိုင်တဲ့ စည်းတံဆိပ်အနီရောင်ဖြင့်သာ လူနေထိုင်ခွင့်ပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။
ခြံစည်းရိုးခတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အဲဒီမြေကွက်ဟာ ဂရန်အမည်ပေါက်ဖြစ်ရပါမယ်။ ဒီတော့ အခြေခံအားဖြင့် ဒီအချက်ကလေးတွေကိုသိထားမယ်၊ အသုံးချမယ်ဆိုရင် မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ အချိန်တွေ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကို ဆုံးရှုံးမှုမဖြစ်စေဘဲ အကျိုးရှိရှိ အသုံးချနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
၁၃၇၅ ခုနှစ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလဆန်း ၆ ရက်
( ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်)
၁။	ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သည် စီးပွားရေးမြို့တော်ဖြစ်သော ရန်ကုန်မြို့တော်အား မြို့တော်အင်္ဂါရပ်နှင့်ညီညွှတ်စေရန် အဘက်ဘက်မှ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ ထိုသို့ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ရန်ကုန်မြို့တော်အတွင်း လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှု လုံခြုံချောမွေ့စေရေးကိုလည်း ဉီးစားပေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
၂။	တည်ဆဲရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ ဉပဒေတွင် မည်သူမျှ ကော်မတီက သတ်မှတ်ထားသည့် ယာဉ်ရပ်ရန်နေရာမှအပ အခြားမည်သည့်နေရာတွင်မျှ ယာဉ်ရပ်နားခြင်း မပြုရဟု လည်းကောင်း၊ အများပြည်သူဆိုင်ရာ လမ်းနယ်နိမိတ်ပေါ်တွင် ယာဉ်များအကြောင်းမဲ့ကြာမြင့်စွာ ရပ်တန့်ခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း၊ ထားရှိခြင်း မပြုရဟုလည်းကောင်း ပြဌာန်းထားပြီးဖြစ်သည်။
၃။	သို့ပါ၍ ရန်ကုန်မြို့တော်ကို မြို့တော်အင်္ဂါရပ်နှင့်အညီဖြစ်စေရန်လည်းကောင်း၊ မြို့တော်အတွင်း ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်းများ ထိန်းသိမ်းရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေရန်လည်းကောင်း၊ ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုလျော့နည်းကာ အများပြည်သူသွားလာရေး အဆင်ပြေစေရန်လည်းကောင်း၊ လတ်တလော အခြေအနေတွင် အောက်ပါယာဉ်လမ်းကြောင်းများ၌ ခရီးသည်အတင်အချပြုရန်မှတစ်ပါး မည်သည့်ယာဉ်မျှ ရပ်နားခြင်းမပြုရန် ယာဉ်မရပ်ရနယ်မြေအဖြစ် သတ်မှတ်လိုက်သည်-
(၁) ထောက်ကြန့်လမ်းဆုံမှ ပြည်လမ်းအတိုင်း၊ ၄င်းမှ ဘုန်းကြီးလမ်းနှင့် ကမ်းနားလမ်းဆုံအထိ
(၂)	အင်းစိန်ဘူတာရုံလမ်းနှင့် အင်းစိန်လမ်းဆုံ (ဘီအိုစီမှတ်တိုင်အနီးမှ) အင်းစိန်လမ်းအတိုင်း လှည်းတန်းလမ်းဆုံအထိ
(၃) အောက်မင်္ဂလာဒုံလမ်းနှင့် ဘုရင့်နောင်လမ်းဆုံမှ ဘုရင့်နောင်လမ်းအတိုင်း သမိုင်းဘူတာရုံလမ်း၊ရွာမကျောင်းလမ်းဆုံ၊ ၄င်းမှ ဘုရင့်နောင်လမ်းအတိုင်း လှည်းတန်းလမ်းနှင့် နာနတ်တောလမ်းဆုံအထိ
(၄)	လှည်းတန်းလမ်းနှင့် နာနတ်တောလမ်းဆုံမှ ကြည့်မြင့်တိုင်ကမ်းနားလမ်း အတိုင်း၊ ဝါးတန်းလမ်းနှင့် ကမ်းနားလမ်းဆုံအထိ
(၅)	(လမ်းသစ်လမ်းနှင့် ဗဟိုလမ်းဆုံ(အင်းစိန်ပန်းခြံ)မှ ဗဟိုလမ်းအတိုင်း သမိုင်းဘူတာရုံ လမ်းဆုံ၊ ပါရမီလမ်းဆုံ၊ အုတ်ကျင်းဘူတာရုံလမ်းဆုံ၊ ၄င်းမှ ရွာမကျောင်းလမ်းမှတဆင့် ဗဟိုလမ်းအတိုင်း ဟံသာဝတီလမ်းအထိ)
(၆)	ပြည်လမ်းနှင့် မင်းဓမ္မလမ်းဆုံမှ မင်းဓမ္မလမ်းအတိုင်း ပါရမီလမ်းဆုံအထိ
(၇)	ပြည်လမ်းနှင့် အင်းလျားလမ်းဆုံမှ အင်းလျားလမ်းအတိုင်း ဓမ္မစေတီလမ်းအထိ
(၈)	ကျွန်းတောလမ်းနှင့် နာနတ်တောလမ်းဆုံမှ ကျွန်းတောလမ်းအတိုင်း ဟံသာဝတီလမ်းအထိ
(၉)	ဟံသာဝတီအဝိုင်းမှ ဦးဝိစာရလမ်းအတိုင်း၊ ဓမ္မစေတီလမ်းဆုံ၊ ဦးဝိစာရအဝိုင်း၊ ၄င်းမှတစ်ဆင့် ရွှေတိဂုံဘုရားလမ်းအထိ
(၁၀)	ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်းနှင့် ရွှေဘုံသာလမ်းဆုံမှ ရွှေဘုံသာလမ်းအတိုင်း ကမ်းနားလမ်းအထိ
(၁၁)	ကန်ရိပ်သာလမ်းနှင့် အထက်ပန်းဆိုးတန်းလမ်းဆုံမှ အထက်ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ၄င်းမှ ပန်းဆိုးတန်းလမ်းအတိုင်း ကမ်းနားလမ်းအထိ
(၁၂)	ကန်ရိပ်သာလမ်းနှင့် သိမ်ဖြူလမ်းဆုံမှ သိမ်ဖြူလမ်းအတိုင်းကမ်းနားလမ်းအထိ
(၁၃)	မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ဝေဘာဂီလမ်းနှင့် သုဓမ္မလမ်းဆုံ (၆ကွေ့ ဝေဇယန္တာလမ်းအနီး)မှ သုဓမ္မာလမ်းအတိုင်း၊ ၄င်းမှ ဝေဇယန္တာလမ်းအတိုင်း ဧရာဝဏ်လမ်းသုဝဏ္ဏတံတားအထိ၊ ၄င်းမှဧရာဝဏ်လမ်း၊ မင်းနန္ဒာလမ်း၊ ၄င်းမှ မင်းနန္ဒာလမ်းယမုံနာလမ်းနှင့် မင်းနန္ဒာလမ်းဆုံအထိ၊ ၄င်းမှ မင်းနန္ဒာလမ်း၊ မဟာဗန္ဓုလတံတားမှ ဗိုလ်တထောင်စျေးလမ်း အောက်ပုဇွန်တောင်လမ်းဆုံအထိ
(၁၄)	သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် လေးဒေါင့်ကန်လမ်းဆုံ (ပြည်ထောင်စုခုံးကျော်တံတား)မှ သံသုမာလမ်းအတိုင်း သမိန်ဗရမ်းလမ်းဆုံ(ကြက်ဘဲစျေး)ရှေ့အထိ)
(၁၅)	သမိန်ဗရမ်းနှင့် သံသုမာလမ်း (ကြက်ဘဲစျေး)ရှေ့မှ အထက်ပုဇွန်တောင်လမ်း အတိုင်း ဗိုလ်ချုပ်လမ်းနှင့် အောက်ပုဇွန်တောင်လမ်းဆုံ ၄င်းမှ အောက်ပုဇွန်တောင်လမ်းအတိုင်း သံလျှက်စွန်းအထိ)
(၁၆)	တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ပါရမီလမ်းနှင့် သံသုမာလမ်းဆုံမှ သံသုမာလမ်းအတိုင်း လေးထောင့်ကန်လမ်းဆုံ(ပြည်ထောင်စုခုံးကျော်တံတား)၊ ၄င်းမှ လေးထောင့်ကန်လမ်းအတိုင်း အရှေ့မြင်းပြိုင်ကွင်းလမ်း၊ ၄င်းမှ အရှေ့မြင်းပြိုင်ကွင်းလမ်းအတိုင်း တာမွေမီးပွိုင့်၊ ရွှေဂုံတိုင်လမ်းနှင့် သမိန်ဗရမ်းလမ်းဆုံအထိ
(၁)	မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ အမှတ်(၃)လမ်းမကြီးနှင့် ခရေပင်လမ်းဆုံမှ ခရေပင်လမ်းအတိုင်း၊ ပြည်လမ်းဆုံ၊ အောင်မင်္ဂလာလမ်းဆုံမှတစ်ဆင့် ရွှေပြည်သာတံတားအထိ
(၂)	အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ပြည်လမ်းနှင့်လမ်းသစ်လမ်းဆုံမှ လမ်းသစ်လမ်းအတိုင်း(အာလိန်ငါးဆင့်လမ်း) ဗဟိုလမ်းဆုံ၊ ၄င်းမှ လှိုင်မြစ်လမ်းအတိုင်း အောင်ဇေယျတံတားအထိ
(၃)	မရမ်းကုန်း(၈)မိုင်လမ်းဆုံမှ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းအတိုင်း၊ ၄င်းမှ ကိုယ့်မင်းကိုယ့်ချင်းလမ်းနှင့် နန္ဒာဝန်လမ်းဆုံအထိ၊ ၄င်းမှ ကိုယ့်မင်းကိုယ့်ချင်းလမ်း၊ ဗဟန်းလမ်း၊ ဦးထောင်ဘိုအဝိုင်းမှ တစ်ဆင့် တိရိစ္ဆာန်ဥယျာဉ်လမ်း၊ ၄င်းမှ အလံပြဘုရားလမ်းအတိုင်း ဆူးလေဘုရားလမ်းနှင့် ကမ်းနားလမ်းဆုံအထိ
(၄)	ဆူးလေဘုရားလမ်းမှ ဂျိုးဖြူလမ်း၊ ၄င်းမှ တိရိစ္ဆာန်ဥယျာဉ်လမ်းနှင့် ဗိုလ်မင်းခေါင်လမ်းဆုံ
(၅)	မရမ်းကုန်း(၈)မိုင်လမ်းဆုံမှ ကျိုက်ဝိုင်းဘုရားလမ်းအတိုင်း အင်းစိန်လမ်းဆုံ၊ ၄င်းမှ သမိုင်းဘူတာရုံ လမ်းအတိုင်း ဘုရင့်နောင်တံတားအထိ
(၆)	ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ ပင်လုံလမ်းနှင့် ဦးဝိစာရလမ်းဆုံမှ ပါရမီလမ်းအတိုင်း ဝေဇယန္တာ လမ်းဆုံ၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းဆုံ၊ ပြည်လမ်းဆုံ၊ အင်းစိန်လမ်းဆုံ၊ ဗဟိုလမ်းဆုံမှတစ်ဆင့် ဘုရင့်နောင် လမ်းဆုံအထိ
(၇)	ဆရာစံလမ်းနှင့်တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းဆုံမှတက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းအတိုင်း လှည်းတန်း လမ်းဆုံအထိ
(၈)	လှည်းတန်းလမ်းဆုံမှ လှည်းတန်းလမ်းအတိုင်း ကြည့်မြင်တိုင်ကမ်းနားလမ်းဆုံအထိ
(၉)	ပြည်လမ်းနှင့်နာနတ်တောလမ်းဆုံမှ နာနတ်တောလမ်းအတိုင်း ကြည့်မြင်တိုင်ကမ်းနား လမ်းဆုံအထိ
(၁၀)	ဟံသာဝတီအဝိုင်းမှ ဟံသာဝတီလမ်းအတိုင်း ကျွန်းတောလမ်းဆုံ၊ ဗဟိုလမ်းဆုံ မှတစ်ဆင့် ကြည့်မြင်တိုင် ကမ်းနားလမ်းဆုံအထိ
(၁၁)	အောင်ရတနာလမ်းနှင့် ကမ်းနားလမ်းသစ်မှ ကမ်းနားလမ်းသစ်အတိုင်း သန်လျှက်စွန်း လမ်းဆုံအထိ
(၁၂)	ဗားကရာလမ်းနှင့် ဓမ္မစေတီလမ်းဆုံမှ ဗားကရာလမ်းအတိုင်း ကမ်းနားလမ်းဆုံအထိ
(၁၃)	ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းနှင့် ဓမ္မစေတီလမ်းဆုံမှ ဓမ္မစေတီလမ်းအတိုင်း ၄င်းမှ ရှင်စောပု လမ်းအတိုင်း ဗဟိုလမ်းဆုံအထိ
(၁၄)	ဦးဝိစာရအဝိုင်းမှ အလုံလမ်းအတိုင်း ဗဟိုလမ်းအထိ
(၁၅)	ဦးဝိစာရအဝိုင်းမှ ဦးထောင်ဘိုလမ်းအတိုင်း ဦးထောင်ဘိုအဝိုင်း၊ ၄င်းမှ ကန်ရိပ်သာလမ်း အတိုင်း နတ်မောက်လမ်းအထိ
(၁၆)	အောက်ကြည့်မြင်တိုင်လမ်းနှင့် အောင်ရတနာလမ်းဆုံမှ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လမ်းအတိုင်း အထက်ပုဇွန်တောင်လမ်းဆုံအထိ
(၁၇)	ကမ်းနားလမ်းနှင့်အနော်ရထာလမ်းဆုံမှ အနော်ရထာလမ်းအတိုင်း အောက်ပုဇွန်တောင် လမ်းအထိ
(၁၈)	ကမ်းနားလမ်းနှင့် မဟာဗန္ဓုလလမ်းဆုံမှ မဟာဗန္ဓုလလမ်းအတိုင်း ယမုံနာလမ်းဆုံအထိ
(၁၉)	ကမ်းနားလမ်းနှင့် ကုန်သည်လမ်းဆုံမှ ကုန်သည်လမ်းအတိုင်း မေယုလမ်းဆုံအထိ
(၂၀)	အောက်ကြည့်မြင်တိုင်ကမ်းနားလမ်းနှင့် ကမ်းနားလမ်းသစ်ဆုံမှ ကမ်းနားလမ်းအတိုင်း သံလျှက်စွန်း အထိ
(၂၁)	ဦးထောင်ဘိုကုန်းအဝိုင်းမှ ဗဟန်းလမ်း၊ ၄င်းမှ နတ်မောက်လမ်းအတိုင်း ကန်ရိပ်သာလမ်းဆုံ၊ ၄င်းမှ ကန်ရိပ်သာလမ်းအတိုင်း ဦးထောင်ဘိုအဝိုင်းအထိ
၄။	အထက်ဖော်ပြပါ ယာဉ်မရပ်ရ နယ်မြေအတွင်း ယာဉ်ရပ်နားခြင်းပြုပါက ရပ်နားသည့်ယာဉ်ကို ဆွဲယာဉ်ဖြင့်သတ်မှတ်ထားသော ယာဉ်ရပ်နားစခန်းသို့ သယ်ယူသွားမည်ဖြစ်သည်။ ယာဉ်ပိုင်ရှင်အနေဖြင့် သတ်မှတ်ထားသော ဆွဲယာဉ်ခကို ပေးဆောင်ရမည့်အပြင် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင် သာယာရေး ဥပဒေအရလည်း အရေးယူခြင်းခံရမည်။
၅။	ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ ပလက်ဖောင်းများနှင့် ကားလမ်းအကြား တိုးချဲ့၍ ဆောင်ရွက်ထားသော ယာဉ်ရပ်နားရန်ပြုလုပ်ထားသည်နေရာများတွင် ယာဉ်ရပ်နားခ ရယူ၍ ယာယီခွင့်ပြုပေးမည်ဖြစ်ပြီး သင့်တော်သောကာလတွင် ယာယီရပ်နားခွင့်ကို ပိတ်သိမ်း မည် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် ကျန်ရှိသောလမ်းများကိုလည်း ယာဉ်ရပ်နားခြင်းအား တစ်ဆင့်ပြီး တစ်ဆင့် ပိတ်ပင်အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
၆။	သို့ဖြစ်ပါ၍ ရန်ကုန်မြို့တော်အား မြို့တော်အင်္ဂါရပ်နှင့်ညီညွတ်စေရေး၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှု လုံခြုံချောမွေ့စေရေးတို့အတွက် ယာဉ်ပိုင်ရှင်များ၊ ယာဉ်မောင်းများအနေဖြင့် အထက်ဖော်ပြပါ ယာဉ်မရပ်ရနယ်မြေ သတ်မှတ်ခြင်းအား တိကျစွာလိုက်နာကြရန်နှင့် မရပ်ရနယ်မြေများတွင် ယာဉ်များရပ်နားမှု မရှိစေရေး ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်ကြပါရန် အသိပေးကြေညာပါသည်။
ယနေ့ကြည့်ရှုသူ - 1849 ဦး
ကြည့်ရှုသူစုစုပေါင်း - 2599936 ဦး